घाम झुल्किनुअघि (कथासङ्ग्रह) | Matrika Pokharel
← अनुहारहरू (कवितासङ्ग्रह)
मातृका पोखरेल →
यहाँसम्म आइपुग्दाको कथा
समाजमा नङ्याउनु पर्ने मानिसहरु अझैसम्म पनि नाङ्गिन सकेका छैनन् । शोषण, अत्याचार र भ्रष्टाचारको भ¥याङ्गमाथि चढेर बनेको ‘इज्जत र प्रतिष्ठा’ लाई समाजले अझैसम्म पनि आवश्यक घृणा गर्न सकेको छैन । अर्थात्, हामीले समाजलाई त्यो स्तरसम्म चेतना सम्पन्न बनाउन सकेका छैनौं । समाज रुपान्तरणका निम्ति भिन्न भिन्न क्षेत्रबाट क्रियाशील हामी सवैका लागि यो ठूलो चुनौतिको विषय हो । यही चुनौतिलाई सामना गर्ने प्रयत्न स्वरुप आजभन्दा डेढ दशक अघि मैले कथा विधामा हात हालेको थिएँ । सत्य, न्याय र परिवर्तनको पक्षमा बहस गर्न कथा अत्यन्त प्रभावकारी विधा हो भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
यो कथासङ्ग्रह “घाम झुल्किनुअघि” २०६१ सालमा प्रकाशित “सन्त्रस्त आँखाहरु” पछिको मेरो दोस्रो कथा सङ्ग्रह हो । कविता लेखनमा लागेको एक दशकपछि मात्रै मैले कथा लेखनमा हात हालें । त्यसपछि केही मित्र र पाठकहरुको नियमित सुझावका कारण मैले कथा लेखनलाई कछुवा गतिमै भएपनि निरन्तरता दिएको छु । बेला बेलामा अग्रज कवि मित्रलाल पंज्ञानीले मलाई भनिरहनुहुन्छ – “तपाईं कवितामा स्थापित बन्नुभयो तर कथालाई प्राथमिकताबाट बाहीर नपार्नु होला ।” भेट भएको बेलामा मात्र होइन बेला बेलामा मोबाइलमा सन्देश पठाएरसम्म झक्झक्याईरहने बरिष्ठ साहित्यकारद्वय जगदीश घिमिरे र विष्णुविभू घिमिरेको प्रेरणाले मेरो कथा लेखनमा अझ गति थप्ने काम गरेको महशूस गरेको छु । एक दुई वर्षअघि बरिष्ठ साहित्यकार एवं मूल्याङ्कन मासिकका प्रधान सम्पादक हरिगोविन्द लुइटेलको सुझावमा नवयुवा मासिकमा आठ दसवटा कथाहरु लेखें । संगठन लगायतका कामहरुको शिलशिलामा त्यसलाई निरन्तरता दिन मलाई पटक्कै सम्भव भएन । नवयुवाका पाठकहरुले इमेल र पाठक प्रतिक्रिया मार्फत् मलाई निकै हौस्याए । कथा मार्फत् युवाहरुसँगको त्यो सम्वाद मेरा लागि धेरै अर्थमा प्रेरणादायी रह्यो ।
मलाई के लाग्छ भने, सचेत ढङ्गले सुरु गरिएका जुनसुकै क्रान्ति, आन्दोलन र लेखनहरुको मूल अभिष्ट भनेको समाजलाई रुपान्तरण गर्नु हो । केही कमीकमजोरीहरु रहे पनि विगतको बाह्र वर्षको जनयुद्ध नेपाली समाजको रुपान्तरणका लागि एउटा कोसेढुङ्गो थियो । सतहमा अहिले देखिएको गुणात्मक रुपान्तरणको मूलकारण पनि त्यहीनै थियो । जनयुद्धको यो प्राप्तीलाई कमजोर बनाउन अनावश्यक बहस गर्न खोज्नेहरु आफैंप्रति पनि इमान्दार छैनन् भन्ने मलाई बारम्बार लागिरहन्छ । विशेषतः नेपाली युवाहरुले प्रस्तुत गरेको त्याग बलिदान र सौर्यका ती घटनाहरु मेरा लागि निकै प्रेरणादायी रहेकाछन् ।
कथामा काल्पनिक जीवनको रोमाञ्चपूर्ण विवरणमा मलाई कतै पनि रुचि छैन । मैले लेखेका कथाहरुले मानिसहरुलाई एउटा उद्देश्य तर्फ प्रेरित गर्न सकून भन्ने मेरो चाहना हो । म कथा लेख्न बस्दा यो पाटो तर्फ विशेष ध्यान पु¥याउने प्रयत्न गर्छु । प्रत्येक लेखन पाठक र समाजप्रति समर्पित हुन सक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यसतर्फ म विशेष सचेत छु ।
मेरा मित्र कथाकार आत्माराम शर्माले बारम्बार नझक्झक्याएको भए यसलाई सङ्ग्रहको रुपमा संकलन गर्न अझै लामो समय लाग्न सक्थ्यो । त्यसका लागि उहाँ विशेष धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । मेरा कथाहरु पढ्ने सबै पाठकहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । अझ मुरीमुरी धन्यवाद ती पाठकहरुलाई, जसले मेरा कथाहरु पढेर सुझावहरु समेत दिनुभएकोछ । प्रकाशनको भार उठाइदिने साझा प्रकाशनलाई मैले विर्सनै हुँदैन ।
ठानागाउँ–४, थामखर्क, उदयपुर
शहरमा जाडो धेरै बढेको छ । केही दिनदेखि मन पनि अलि नै बढी चिसो भएको छ । बिहान यति अबेरसम्म सिरकमा गुजुल्टिएर बसिरहन मन पराउने मेरो स्वभाव नै होइन । आज त अलिक बढी जाडो पनि भयो । आफू हिंड्ने बाटो हिजोभन्दा बढी उवड–खावड र कष्टकर देख्न थालेको छु । आफ्नै अनुभूतिसँग आफैंलाई कहिलेकाहीं डर लाग्छ । मभन्दा अघिल्लो पुस्तामा देखिएको निराशाले कतै मलाई छोप्दै गएको त हैन ? हिजोआज आफैंलाई यो प्रश्न सोध्छु ।
फेरि आफूले आफैंलाई उत्तर दिन्छु– ‘अरुको कारणले आफ्नो उद्देश्यलाई बराल्नु आफ्नै कमजोरी हो ।’
मनलाई बलियो बनाएर घरिघरि यसैगरी सोच्छु । नकारात्मक कुरालाई धूरीमा राखेर नसोचौंभन्दा पनि मलाई बेलाबेलामा यसले झम्टिरहन्छ ।
आज कमरेड पातालको हेराइ मप्रति पहिलेको भन्दा धेरै फरक थियो । हुन त, केही समयदेखि नै उनको हेराइ मप्रति अत्यन्तै अस्वाभाविक भएको मैले महशूस गर्न थालेको छु । मैले राखेका कार्ययोजना र तर्कहरुमा उनको नकारात्मक धारणाले ठाउँ पाउन थालेको थियो । हिजोआजका केही बैठक र भेटघाटहरुबाट म यो निश्कर्षमा पुगेको थिएँ ।
म विगतका केही घटनाहरुको जति साक्षी हुँदैआएको छु, मलाई भविष्यको बाटो झन्–झन् कमजोर र जीर्ण बन्दै गएको बोध भइरहेको छ ।
हुन त पोहोरको एउटा घटनाबाट पनि मैले उनी मसँग अलिक टाढिएको महशूस गरेको छु । त्यस दिन उनको निम्ताबिना नै म उनको घर थानकोट पुगेको थिएँ । घरमा पुगेर म सिधै उनको बैठक कोठामा गएँ । कमरेड पाताल म पुग्दा त्यहाँ थिएनन् । उनको बैठक कोठामा खाइलाग्दा मान्छेहरुको एउटा जमात बसिरहेको थियो । अरुतिर बस्ने ठाउँ नभएकोले अप्ठ्यारो मान्दै म पनि बैठकको एउटा कुनामा गएर थचक्क बसें ।
एकछिनपछि कमरेड शान्ता चिया लिएर टुप्लुक्क भित्र पसिन् । म अचम्मित भएको थिएँ, त्यसबेला । तडक–भडकपूर्ण जिन्दगीको विरोध गर्ने मान्छेलाई त्यो अवस्थामा देख्दा म एक प्रकारले छाँगाबाटै खसेको थिएँ । त्यस दिनको उनको ओठको लिपिष्टिक र अनुहारको लाली, पाउडर मैले कल्पनासम्म गर्न सकेको विषय थिएन । धेरै बैठक र भेलाहरुमा कमरेड शान्ताका ‘शादा जीवन र उच्च विचार’का धारणाहरुबाट म पटक–पटक प्रभावित भएको छु । त्यस दिन कमरेड शान्ता पनि मेरो उपस्थितिबाट अत्यन्त क्रोधित भएको मैले अनुमान गरेको थिएँ । मसँग त्यति राम्रो व्यवहार प्रस्तुत गर्ने मान्छे, त्यस दिन उनी मसँग बोल्दै बोलिनन् । उनले त्यस दिन लगाएका अनेकौं सुनका गहनाहरु देखेर म दङ्गदास भएको थिएँ । केही छिनपछि कमरेड पाताल त्यही बैठक कक्षमा पसेका थिए । मेरो उपस्थितिले उनी पनि चकित भए । मेरो उपस्थिति त्यहाँ ‘कवाफभित्रको हड्डी’ बनिरहेको कुरामा म प्रष्ट थिएँ ।
‘तपाईं सूचना नगरी किन आउनुभयो ?’ आँखा रातो पार्दै कमरेड पातालले मसँग भनेका थिए ।
हो, म अर्कै कामले त्यो क्षेत्रतिर पुगेको थिएँ । बाटोमा परेकाले मात्र म त्यहाँ पुगेको थिएँ ।
उनलाई मैले त्यही कुरा भनें ।
‘सूचना नगरी आएको मलाई राम्रौ लाग्दैन ।’ कमरेड पातालले फेरि आफ्नो आक्रोशपूर्ण निर्णय सुनाए र श्रीमतीसँग खुसुक्क कुरा गर्ने निहुँमा बाहिर निस्किए ।
उनीहरु बाहिर निस्किएको मौका छोपेर म पनि त्यहाँबाट कुलेलम ठोकेको थिएँ ।
त्यस दिन कमरेड पातालको घरबाट बाहिर निस्किएपछि मैले पार्टीको भविष्यमा एउटा अँध्यारो छायाँ देखेको थिएँ । पार्टीमा उनी चानचुने नेता थिएनन् । एक जना प्रभावकारी नेता ।
त्यसका धेरै दिनहरुसम्म मेरो मष्तिष्कमा जाँतो जस्तो एउटा चिज घुमिरह्यो । राति निद्रालाई समेत प्रभावित पारेको थियो त्यो घटनाले । त्यसपछि मलाई आफैं सामेल भएका जुलुसहरुसँग पनि आफैंलाई अविश्वास पैदा हुन थालेको थियो । आफ्नो यात्रा नै गहुङ्गोजस्तो लाग्न थालेको थियो ।
त्यसपछिका दिनहरुमा कमरेड पातालले मलाई हेर्ने आँखामा आतंकको बादल घुमिरहेको देख्न थालेको थिएँ ।
‘व्यक्तिगत सम्पत्तिका बारेमा चिन्ता लिने मान्छेले क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई कसरी सहयोग पु¥याउन सक्छ ?’ भरखर आन्दोलनमा आएका सामान्य कार्यकर्ताहरुलाई यसो भन्दै उनी क्रान्तिकारी शब्दहरूका साथ झम्टिने गर्थे ।
तर पोहोरको त्यस घटनापछि भने म उपस्थित भएका छलफलहरुमा पहिले–पहिले गर्ने ठूल्ठूला क्रान्तिकारी कुराहरुमा उनी सचेत देखिनथाले । अलि हच्किन थाले ।
कमरेड पातालको तर्कशैलीले उत्साहित र ऊर्जाशील मान्छेहरुलाई धेरै प्रेरणा पनि दिन्थ्यो तर केही सामान्य मानिसहरु भने कडा कुरा सुनेर आन्दोलनको मैदान छाडेर भाग्थे । उनको आक्रामक र ओजिलो शैलीको प्रभावमा परेर धेरै कमरेडहरुले आफ्नो छोराको नामसमेत ‘पाताल’ राख्न थालेका थिए ।
आन्दोलनमा उनको नियमित लगावले परारैको त्यो घटनालाई मैले विस्तारै–विस्तारै बिर्सिदै जानथालेको थिएँ ।
अकस्मात अस्तिको घटनाले म फेरि एक पटक नराम्ररी झस्किएँ ।
त्यस दिन हामी केही साथीहरु सरकारद्वारा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरुद्धमा आयोजित ‘नेपालबन्द’को कार्यक्रम सफल पार्न मशाल जुलूसको तयारीका लागि मशाल बनाउन इन्द्रचोकको एउटा पुरानो घरमा जम्मा भएका थियौं । जुलूस कार्यक्रमको लागि मानिसहरु जुटाउने, रुट तय गर्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण कार्य त्यही बैठकबाट गर्नेसमेत तय भएको थियो । त्यो निर्णयको जानकारीसमेत हामीलाई कमरेड पातालले नै गराएका थिए । त्यो कार्यक्रमको नेतृत्व पनि कमरेड पातालले नै गरेका थिए । बिहानै बोलाइएको भए पनि धेरै साथीहरु ढिलो आइपुगेका थिए कार्यस्थलमा । त्यसै गरेर कमरेड पाताल पनि त्यहाँ ढीलै गरेर आइपुगे ।
‘पार्टीको काममा धेरै व्यस्त रहियो, राति सुत्न पनि पाइएको छैन ।’ आउनेबित्तिकै कमरेड पातालले आफू अत्यन्तै थकित भएको कुरा बताए ।
उनी जहिले र जहाँ भेट्दा पनि आफूलाई पार्टी कामको ज्यादै बोझ भएको र अत्यन्तै व्यस्त रहने कुरा बताउने गर्थे । तर अब उनको कुराप्रति म शंकालु बन्न थालेको थिएँ, त्यस कुराको संकेत उनले पनि पाइसकेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो ठम्याइ थियो । त्यसै कारणले पनि मेरा अधिल्तिर उनी अत्यन्तै सचेत भएर कुरा गर्ने कोशीस गर्थे । म नभएको मौका छोपेर भने उनी उग्र–क्रान्तिकारी गफ लगाउन पछि पर्दैनथे भन्ने कुरा मैले बाहिरका ढोका र चोटाहरुबाट धेरै पटक सुनेको थिएँ ।
पहिले–पहिलेझैं त्यस दिन पनि उनले उपस्थित भएका सबै साथीहरुसमक्ष आफूलाई त्यसैगरी प्रस्तुत गरे ।
कमरेड पातालको क्रान्तिकारी लगावसँग सदाझैं फेरि पनि साथीहरु द्रवीभूत भए । मसँगका पुराना घटनाहरु बिर्सिएझैं गरेर त्यस दिन उनले मेरै अघिल्तिर फेरि आफ्नै शैलीमा कुरा शुरु गरे ।
“नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सांस्कृतिक रुपान्तरण नै भएन !” कमरेड पाताल बोल्दाबोल्दै गम्भीर भए ।
“अघिल्लो पुस्ताका नेताहरुको व्यवहार र कुरामा कतै सामान्यजस्यता र तालमेल मिलेन ।” कमरेड पातालले चिन्तित मुद्रामा फेरि थपे ।
म यतिबेला उनीसँगको त्यो अतीततिर फर्किरहेको थिएँ । उनको कुराले मभित्र अर्को चिन्ता थपिरहेको थियो ।
हामी सबै काममा जुटिसकेका थियौं र कमरेड पाताल पनि कार्यक्रममा सहभागिता गराउन कार्यकर्ताहरुलाई टेलिफोनबाट निर्देशन दिइरहेका थिए । दिउसोको बाह्र बजिसकेको थियो । बिहानै आउनु परेका कारण हामीले केही खाएका थिएनौं । हामी सबैलाई भोक लाग्न थालेको थियो । हामीले कमरेड पाताललाई पनि यो कुरा भन्यौं ।
“क्रान्तिका लागि भोक सामान्य कुरा हो !” कमरेड पातालले फेरि सहज जवाफ फाले ।
“क्रान्तिका लागि दिनु परे त ठीकै हो । तर अहिले नै बलिदान दिनुपर्ने आवश्यकता छैन ।” कमरेड विशाखाले प्रत्युत्तर थपिन् ।
“तपाईंले सर्वहारा संस्कृतिलाई आत्मसात गर्ने प्रयत्न गरिरहनु भएको छैन ।” कमरेड पातालले उही बनिबनाऊ तर्कको फेरि झटारो हाने ।
“म ग्याष्ट्रिकको विरामी हुँ ! मैले केही नखाई हुँदैन ।” ट्रेड युनियनमा काम गर्ने मजदूर साथी कमरेड जसबहादुरले आफ्नो बाध्यता राखे ।
“भोको बस्न सकिँदैन भने क्रान्तिका लागि केही पनि गर्न सकिँदैन ।” कमरेड पातालले आफ्नो कुरालाई जाँतोझैं फेरि घुमाए ।
“खै ! नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन !” कमरेड पातालले फेरि निराश बनेझैं गरेर आफ्नो मुखाकृति बिगारे ।
“मैले कमरेड हिमालबाट पातालमार्फत् खानाको प्रबन्ध गरिएको सूचना पाएको थिएँ ।” कमरेड विशाखाले मेरो कानमा आएर खुसुक्क भनिन् ।
तर उता कमरेड पाताल आफूसँग पैसा नभएको र आफैं पनि भोकै रहेको कुरा बताइरहेका थिए ।
म कमरेड पातालसँगका सम्बन्धलाई लिएर केही समयदेखि सतर्क रहँदै आएको छु । तसर्थ पनि उनको बारेमा कुनै टिप्पणी भइहालेमा सचेत भएर प्रत्युत्तर दिन्छु । अझ, कसैले मेरो अघिल्तिर उनको प्रंशसा ग¥यो भने म धेरैबेरसम्म पीडाले छट्पटिन्छु ।
“म एकछिन बाहिर पुगेर आइहाल्छु ।” कमरेड पाताल यसोभन्दै बाहिरिए ।
“भोकले पेटै दुख्नथाल्यो ।” कत्लेटी परेका ओठहरुबाट कमरेड सौरभ अलिकति हाँसे ।
क. सौरभतिर फर्किएर हामी सबै एकपटक हाँस्यौं ।
“मसँग तीन रुपियाँ छ । अरुसँग जति छ, सबै निकालौं र पाउरोटी किनेर ल्याऊँ । क. सौरभले सबैतिर हेरेर मलिनो स्वरमा एउटा प्रस्ताव फ्याँके ।
कसैले गोजी छाम्न थाले । कसैले फोन डायरीका पाना पल्टाएर पैसा खोजे । केही कमरेडहरुसँग पैसा थिएन । सबैबाट जोडजोड गर्दा तीस रुपियाँ जम्मा भयो ।
‘पाउरोटी किनेर ल्याऊँ, मैले फेरि प्रस्तावलाई अघि बढाएँ ।
“सबैभन्दा सस्तो र राम्रो त्यही हुन्छ ।” कमरेड सौरभको भोक ब्यग्र भएर बोल्यो ।
“तपाईं र म किनेर आऊँ । अरु साथीहरु काम गर्दै गर्नुहुन्छ ।” कमरेड जसबहादुरले मलाई संकेत गरेर जुरुक्क उठे ।
हामी दुईजना इन्द्रचोकको बहाल हुँदै पश्चिमतिरको गल्ली छि¥यांै । हामी पाउरोटी पाइने पसलको खोजिमा थियौं । गल्लीतिर सोझिनेबित्तिकै छेउमा एउटा रेष्टुरेन्ट थियो । रेष्टुरेन्टको अघिल्लो भागमा आकर्षक र पारदर्शी सिसा लगाइएको थियो; जसबाट रेष्टुरेन्टभित्रको दृश्यलाई राम्ररी देख्न सकिन्थ्यो । रेष्टुरेन्टलाई नाघेर केही पाइलामात्र अघि बढेपछि क. जसबहादुरले मेरो कुमनेरको सर्टको भागलाई ताने । म एकाएक अचम्मित भएँ ।
“यता पछाडि फर्किनुस् त !” कमरेड जसबहादुरले दबेको स्वरमा मेरो कानमा आएर फुसफुसाए ।
“किन ? के भयो ?” म पनि उनको कुरा बुझ्न हतारिएँ ।
कमरेड जसबहादुरले मलाई विस्तारै दुई कदम पछि ताने र चोर आंैलाले पारदर्शी सिसाबाट रेष्टुरेन्टभित्र देखाए । उनले औंला देखाएको ठाउँमा कमरेड पाताल काँटा र चम्चाले पिजा टुक्राउँदै खाइरहेका थिए । उनको अघि कोकाकोलाको बोतल पनि थियो । कमरेड जसबहादुरलाई अघिल्तिर तान्न खोजें । उनी कमरेड पाताललाई अझै हेर्ने कोशिस गर्दैथिए । मैले रेष्टुरेन्टको पारदर्शी सिसाबाट भित्रतिर फेरि हेरें । अनायास कमरेड पातालका आँखाहरुसँग हाम्रा आँखाहरु जुधे । त्यसपछि कमरेड पातालले पिजा राखिएको प्लेटलाई आफ्नो शरीरले एक पटक छेक्न खोजे । तर त्यो छेकिएन । उनी त्यसपछि अर्कैतिर फर्किए ।
“यस्ता फटाहाहरुलाई पनि नेता मानेर हिंड्नुपर्ने ?!” कमरेड जसबहादुरले तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिए ।
“हेर न, उही कस्ता–कस्ता सांस्कृतिक कुराहरु गर्छ !” मैले पनि अलिकति प्रतिक्रिया नदिई बस्न सकिँन ।
कमरेड जसबहादुर पनि केहीबेर निरासजस्तै देखिए । पाउरोटी किनेर साथीहरु भएको ठाउँमा नपुगुन्जेल उनी पनि चुप रहे । म पनि चुप रहें ।
“त्यो फटाहाको हामी सबैले भण्डाफोर गर्न सक्नुपर्छ ।” कमरेड जसबहादुरले आक्रोशित भएर सबै साथीहरुसँग आफ्नो धारणा राखे ।
“यस्तो नेतृत्व भएपछि कसरी समाज र देशको परिवर्तन होला ?” बहसमा कमैमात्र उत्रने स्वभाव भएका कमरेड जसबहादुरले कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रको अवसरवादका बारेमा सैद्धान्तिक छलफल गर्न खोजे ।
“नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले मानिसहरुको सांस्कृतिक पक्षलाई मूल्यांकनको विषय बनाएन । केवल सक्रियता र वाक्टुताको भरमा मानिसहरु नेतृत्व तहमा पुग्नथाले ।” कमरेड सौरभले पनि आफ्नो तर्क अघि सारे ।
कमरेड पातालका बारेमा सबै साथीहरु केही समय चिन्तित भएर बहसमा उत्रिए । त्यस दिन कमरेड पाताल हामी भएको ठाउँमा फर्किएनन् ।
चिसो हुस्सूले काठमाडौंलाई पुरै छोपेको छ । मलाई लाग्छ– म काठमाडौंमा आएपछि यति धेरै जाडोको महशूस कहिले पनि गरेको थिइनँ । आज बिहान एउटा मिटिङ्ग थियो । मिटिङको समय भने हुन लागिसक्यो । म सिरकभित्रै छु । आजको मिटिङमा पनि केन्द्रबाट कमरेड पाताल नै इन्चार्ज बनेर आउँदैछन् ।
म विस्तारै ओछ्यानबाट उठें । यति साह्रो अल्छी योभन्दा पहिले कहिल्यै पनि लागेको थिएन ।
नवयुवा, वर्ष ११, पूर्णाङ्क ११३, २०६३ फागुन
‘फ्रष्टेड बौलाहा’ चोकको पूर्वपट्टि आएर उभियो । निर्माण पूरा हुन नपाउँदै अलपत्र परेको विवादित स्तम्भतिर फर्केर ऊ फेरि एकपटक जोडले हाँस्यो ।
‘यहाँ सहिद स्तम्भ बन्नुपर्छ, कुनै भ्रष्टहरुको सालिक यहाँ बनाउन पाइँदैन ।’ उसले सबैलाई सुनाउन ठूलो स्वरमा करायो ।
यो चोक बजारमा त्यो बौलाहा जहाँ पनि जतिबेला पनि उपस्थिति हुन्छ । समय–समयमा वस्तीतिर पनि गइरहन्छ । ऊ अरु बौलाहाजस्तो बौलाहा भने होइन । मानिसहरुसँग सभ्य र शिष्ट व्यवहार गर्छ । दुःख र अन्यायमा परेका मानिसहरुलाई सल्लाहमात्र होइन, प्रतिबद्ध भएर सहयोग पनि गर्छ । ऊ यो भेकमा ‘फ्रष्टेड बोलाहा’का रुपमा प्रख्यात छ । तर उसको वास्तविक नाम शशीराज थापा हो । एउटा बोरा ओडेर हिंड्छ ऊ । एउटा लौरो पनि बोक्छ ।
कसैको घरमा गएर ऊ त्यसै खाँदैन । त्यहाँका केही काम गरिदिन्छ । उसले जीवनको लामो खण्ड राजनीतिमा वितायो । त्यसबेला पनि ऊ इमान्दार व्यक्तिको रुपमा परिचित भयो । उसले आफ्ना क्रियाकलापहरुमा परिवर्तन गर्दै जान थाल्यो । त्यसपछि ऊ शशीराज थापाबाट ‘फ्रष्टेड बौलाहा’ बन्यो । अविवाहित थियो र अहिलेसम्म पनि अविवाहित नै छ । यो बजार वरिपरि मात्र होइन, टाढा–टाढाका गाउँ–वस्तीहरुमा समेत ऊ परिचित छ ।
हिजोआज यो बौलाहा स्थानीय पार्टी नेताहरुको आँखामा कसिंगर बनिरहेको थियो । तर ऊ नयाँ पुस्ताका युवाहरुको मन जित्न पनि उत्तिकै सफल भएको थियो । ऊ सत्ता नजिकका मानिसहरुको कसिंगर बन्नेक्रम निकै लामो छ । निरंकुश पंचायतकै समयमा प्रधानपञ्चमा चुनाव उठ्ने निहुँ गरेर उसले पंचायती व्यवस्थाको खिल्ली उडायो । पंचायती सरकारको आँखामा ऊ खतरनाक शत्रु बनेको थियो त्यसबेला । संसदीय राजनीतिको बाह्र वर्षमा पनि ऊ एमाले, कांग्रेस र राप्रपाजस्ता पार्टीहरुको आँखामा बिझाइरह्यो । शाही शासनकालको समय उसका लागि धेरै कष्टपूर्ण रह्यो । जनस्तरबाट ठूलो आवाज नउठेको हो भने माओवादीको आरोपमा ऊ मारिने अवस्थामा पुगेको थियो । तर ऊ बौलाहा भनिएर मात्र बाँच्न सफल भयो ।
बजारको बीचमा एउटा सानो चोक छ । चोकको बीचमा वरिपरि पर्खाल लगाएर घेरिएको एउटा सानो पार्क पनि छ । तर त्यो पार्क केही महिनादेखि अलपत्र र लथालिङ्ग अवस्थामा छ । निर्माण गर्दागर्दै स्थानीय युवा विद्यार्थीहरुले पार्कको बीचमा पंचायतकालमा मारिएका एकजना सहिदको सालिक राख्ने प्रस्ताव राखे । त्यो प्रस्तावका कारण त्यहाँ निकै ठूलो राजनीतिक हल्लीखल्ली मच्चियो । विद्यार्थीहरुको प्रस्तावमा फ्रष्टेड बौलाहाले समर्थन मात्र जनाएन, अरुको सहयोग जुटाउने अभियान नै पनि थाल्यो ।
अचेल यो महत्वपूर्ण विवादलाई लिएर फ्रष्टेड बौलाहाले नयाँ पुस्ताको चेतना र चिन्तनलाई बोकेर नेतृत्व नै लिएको छ ।
“सहिदको नाममा यहाँ कम्युनिष्टको सालिक राख्न दिनुहुन्न । बरु सालिक राख्ने नै हो भने हाम्रा पार्टीका नेताको राख्नुपर्छ ।” पंचायतकालका यही गाउँ पंचायतका प्रधानपञ्च र बहुदलकालका गा.वि.स. अध्यक्ष भइसकेको जनता पार्टीका नेता रंगध्वजले युवा विद्यार्थीहरुको प्रस्तावको बिरुद्धमा एउटा मोर्चा नै खडा ग¥यो ।
युवा विद्यार्थीहरुको प्रस्तावमा दिनहुँ जनसमर्थन बढ्दै गयो ।
“एउटा सभा गरेर हामीले जनसमर्थन बटुल्नुपर्छ ।” एक दिनको कोठे भेलामा रंगध्वजले आफ्ना सहयोगीहरुसँग यस्तो प्रस्ताव राख्यो ।
रंगध्वज र उसका सहयोगीहरुले सभा गर्ने दिन त तोके, तर युवा र विद्यार्थीहरुको पक्षमा दिन दुईगुना रात चौगुनाको दरले समर्थन बढिरहेको थियो । पार्कभित्र राख्ने सालिकका बारेमा विवाद बढ्दै गएपछि अलिकति आकार लिन थालेको पार्क पनि क्रमशः भत्कदै र विद्रुप बन्दै गइरहेको थियो ।
“हाम्रो पार्टीको आदरणीय नेताको सालिक नराख्ने हो भने यहाँ हामी कसैको पनि सालिक राख्न दिँदैनौं ।” रंगध्वजले सभामा चुनौति र धम्कीका शब्दहरु वर्षाए । सभामा मानिसहरुको उपस्थिति अत्यन्तै कम थियो । उसले सभाको यो हालतको कल्पनासम्म पनि गरेको थिएन । सभामा रंगध्वजले औंला सोझ्याएर मान्छेहरुको गिन्ती ग¥यो । एक.. दुई…, चौध…. पन्ध्र । फेरि ग¥यो । उही पन्ध्रजना ।
“पन्ध्र जनाको सभा त साह्रै लाजलाग्दो भयो ।” एकजना सहयोगीले रंगध्वजकै अघिल्तिर निरास सुस्केरा छाड्यो ।
यो कुरालाई रंगध्वजले नसुनेझैं गरेर एकपटक आफ्नो अतीततिर फर्कियो । ऊसँग त्यस्ता दिनहरु पनि थिए, जुन दिन यी सभामा जम्मा भएका मानिसहरु सदादिन उसकै अघिपछि भइरहन्थे । सभामा मानिसहरुको उपस्थिति देखेर ऊ ज्वालामुखी फुट्न लागेको पहाडझैं क्रोधित भइरहेको थियो ।
रंगध्वजको सभा कोणसभाझैं क्षणभरमैं सकियो । सभालाई अन्त गरेर उसले पाइला मात्र के अघि बढाएको थियो, बजारको तल्लो चोकतिरबाट एउटा ठूलो जुलुस आफैं भएतिर आउँदै गरेको आवाज सुन्यो । उसले जुलुसका मान्छेहरुको आवाजलाई ठम्याउने कोशिस ग¥यो । आवाजले बुझिन्थ्यो– जुलुस निकै ठूलो थियो ।
‘ओहो जुलुस त ठूलो रहेछ !’ उसकै सहयोगी रघुवीरले ठूलो स्वरले प्रतिक्रिया दियो । रंगध्वजलाई रघुवीरसँग भित्रभित्रै रिस उठ्यो ।
जुलुस आएको बाटोबाट अलिकति पछि फर्किएर रंगध्वज एउटा गल्लीतिर पस्यो । केही सहयोगीहरुलाई लिएर रंगध्वज भाग्दै पूर्वतिरको मूलबाटो निस्कियो । मुलबाटोमा निस्किएपछि उसलाई झन् डर लाग्यो । ऊ फेरि अर्को गल्लीतिर पर वेग बढिरहेको श्वासलाई रोकेर ऊ एकपटक पछिल्तिर फर्कियो । जुलुसबाट चर्को नारा गुन्जिरहेको थियो । नारामा आफ्नो नाम मिसिएको पनि सुन्यो उसले । उनी आफ्ना भयग्रस्त जीवनका अतीततिर फर्कियो । पंचायत ढलेर बहुदल आउँदा पनि उसको जीवन कम त्रासपूर्ण थिएन । तर विस्तारै उनले एउटा पार्टी समातेर गा.वि.स. अध्यक्षसम्म भयो ।
उनको आँखामा यस ठाउँमा शासन गरेका आफ्ना स्वर्गीय दिनहरु नाच्न थाले ।
“तर समय अब मेरो मुठ्ठीबाट टाढा पुगिसक्यो !” उसले फेरि वर्तमानतिर फर्केर सोच्यो ।
“सहिदहरुलाई बिर्सेर यहाँ भ्रष्टहरुको सालिक राखिन्छ भने अब यस ठाउँमा मानिसहरु नबसेर मुर्दामात्र बसे हुन्छ ।” माइकबाट ठूलो स्वरले फ्रस्टेड बौलाहा कराइरहेको थियो ।
“केटाहरु अब हामीले ठण्डा भएर सोच्नुपर्छ ।” रंगध्वजको अनुहार पानी पर्नुभन्दा अघिको वातावरण शान्त भएझैं देखियो ।
“यो सबै भाँड्ने काम त्यही बौलाहाको हो । त्यसले यो सबै गाउँ टोललाई नै उचालेको छ ।” हुल्लड–बाजको रुपमा कुख्याती कमाएको उसको सहयोगी नरेन्द्रले परिस्थितिको विश्लेषण गर्न खोज्यो ।
“अब यहाँ त्यो एउटा बौलाहा मात्र छैन । सयौं बौलाहाहरु जन्मिसकेका छन् । ती सबै बौलाहाहरु सदाचार, नैतिकता र जीवन मूल्यको कुरा गर्छन् ।” रंगध्वजले परिस्थितिको गम्भीर आंकलन ग¥यो ।
“अब हामीले नयाँ ढंगले चल्न सक्नुपर्छ ।” अर्को सहयोगीले रंगध्वजलाई आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्ने सल्लाह दियो ।
उसले रंगध्वजको कानमा सुटुक्क केही कुरा फुस्फुसायो । एकछिन अघिल्तिर अँध्यारो पोतिएको रंगध्वजको अनुहारमा फेरि उज्यालोको किरण पोखियो ।
रंगध्वज टाउको हल्लाउँदै विस्तारै उठ्यो । र सहयोगीहरुलाई लिएर फेरि गल्लीको अर्को दिशातिर अलप भयो ।
“आज राति फ्रस्टेड बौलाहा मरेछ !” रेडियोले प्रसारण गरेको समाचारझैं यो खबर छिनभरमैं चारैतिर फैलियो । विहानै नुहाउन नदी किनारतिर जाने कोही मान्छेले उसको मृत्युको खबर एकांकानु मैदान हुँदै सारा बजार र वस्तीभरि फैलियो ।
विहान उज्यालो हुनेबित्तिकै फ्रस्टेड बौलाहाको मृत्यु बजारवासीहरुका लागि असामान्य समाचार बन्यो । धेरैले ‘होइन होला’ भनेर शंका व्यक्त गरे । बजारका प्रायः सबै मानिसहरुको अनुहारमा चिन्ताका धर्साहरु देखिए । रंगध्वज र उसका केही सहयोगीहरु भने केही हतास भएजस्ता देखिन्थे । बौलाहाको मृत्युको जनचासोले झन् उनीहरुको हतासपन बढ्दै गयो । यी दुवै प्रतिक्रियाहरु त्यहाँ प्रष्टै देखिन्थे र बुझिन्थे ।
फ्रस्टेड बौलाहाले आफूलाई फ्रष्टेड राजनीतिक कार्यकर्ता भनेर परिचय दिन्थ्यो । त्यसैले उसको नाम नै फ्रष्टेड बौलाहा भनेर परिचित बन्यो ।
“मलाई फ्रस्टेड बौलाहा भने केही फरक पर्दैन !” सबैसँग ऊ हाँसेरै यसो भन्थ्यो ।
सबैले बौलाहा भनिदिएर मात्र ऊ बौलाहा भयो । ऊ एक्लो थियो । राजनीति ग¥यो, अविवाहित बस्यो । छयालीस सालको आन्दोलनपछि उसले आफ्नो बाटो भत्कियो भन्न थाल्यो । आफ्ना साथीहरुको सत्तामोहपछि उसले पार्टी छाडिदियो । केही समयपछि आफ्नो सम्पत्ति आफ्नै परिश्रमले खोलेको गाउँको विद्यालयलाई दियो र त्यही विद्यालयमा निःशुल्क पढाउन थाल्यो । त्यसपछि सबैले उसलाई बौलाहा भनिदिए । उसले मानिसहरुको भनाइलाई अस्वीकार गर्दै हिँडेन । वास्तवमा ऊ बौलाहा थियो कि थिएन, उसको मृत्युपश्चात्सम्म पनि रहस्यकै विषय बन्यो ।
उसको तर्क गर्ने शैली बडो अचम्मको थियो ।
सत्य र न्यायको पक्षमा डटेर लाग्थ्यो । अन्यायी र शोषकहरुको ऊ हुर्मत लिन्थ्यो । बजारका जाली–फटाहाहरु ऊसँग त्राहीमाम हुन्थे । उनीहरु ऊसँग छलिएर हिँड्थे र अघि पर्ने साहसै गर्दैनथे ।
विहान सबेरै बजार र टोलका मानिसहरु बौलाहाको लास हेर्न सुनकोशी बगरतिर दौडिए ।
“यो मृत्यु स्वभाविक होइन !” उसको लासलाई हेर्नेबित्तिकै एकजनाले अर्कोको कानमा फुसफुसायो ।
“स्वभाविक नभएको भनेको के ?” अर्कोले सोध्यो ।
“हत्या !” अर्कोले थप्यो ।
“पक्कै हो !” त्यो मान्छे कन्भिन्स भयो ।
“घाँटीमा डोरीले कसिएको निलडाम छ ।” भीड अघिल्तिरबाट एउटा आवाज आयो ।
त्यसपछि भीडमा फेरि मानिसको ठेलमठेल शुरु भयो ।
“हत्या नै हो !” सबैको यही ठहर भयो ।
“कसले, किन मा¥यो ?” भीडमा कसैले अर्को प्रश्न उठायो ।
“यो पनि बुझ्न अप्ठ्यारो छ र !” एकजना विद्यार्थीको आक्रोश सुनियो ।
“यहाँ ठूलो षडयन्त्र छ !” अर्को विद्यार्थीको स्वर चर्को भयो ।
“यी बौलाहा हाम्रो समाजका मणि हुन् । सम्मानका साथ यिनको अन्त्येष्टि गर्नुपर्छ ।” शिक्षक रामानन्दले विद्यार्थीहरुतिर फर्केर समर्थनको आग्रह गरे ।
“पहिले पोष्टमार्टम गर्नुपर्छ ।” फेरि अर्को मत सुनियो ।
मानिसहरुको एउटा ठूलो समूह लास लिएर अस्पतालतिर गयो । अस्पताल वरिपरि मानिसहरुको ठूलो भीड लाग्यो । पोष्टमार्टममा षडयन्त्र हुनसक्ने त्रासले मानिसहरु खबरदारी गरिरहेका थिए ।
अस्पतालमा भीड बढ्दै गएपछि केही मान्छेहरु बजार चोकको चियापसलमा झुम्मिए ।
“त्यो मान्छे बौलाहा थिएन ।” शिक्षक दिनानाथले चिन्तित मुद्रामा आफ्नो भनाइ राखे ।
“बौलाहा थिएन भने उसको जीवन किन अस्वाभाविक थियो ?” चियापसले एकाएक जिज्ञासु भयो ।
“उसले आफ्नो आस्था र विचारलाई क्रियान्वयन गर्न सजिलो बनाउन त्यसो गरेको हुनसक्छ ।” शिक्षक दिनानाथ फेरि गम्भीर देखिए ।
“मलाई पनि यस्तै लागेको हो ।” अघिसम्म शंका व्यक्त गर्ने पसले पनि आफ्नो विचारलाई परिवर्तन गर्दै थियो ।
“बौलाएजस्तो नगरेको भए के हुुन्थ्यो ?” अर्का कर्मचारी फेरि जिज्ञासु देखिए ।
“बौलाहाजस्तो अभिनय नगरेको भए उनी यति लामो समयसम्म बाँच्न पाउँदैनथे । माओवादीको आरोपमा उनलाई गिरफ्तार गर्दा उनलाई त्यतिबेला हत्या गर्न लागेको चर्चा चलेको थियो । बौलाहा भनिएर मात्र उनी त्यतिबेला बाँच्न सफल भए ।” दिनानाथले स्पष्टीकरण दिए ।
“आखिर बौलाएर पनि त बाँच्न पाएन नि !” कर्मचारीले नि आफ्नो जिज्ञासालाई खोतल्दै गयो ।
“ऊ केका लागि बौलायो ?” अर्को जिज्ञासा भीडमा फेरि कतैबाट आयो ।
“सत्य र न्यायको कार्यान्वयन गर्न !” अर्को जवाफ भीडबाटै आयो ।
“ऊ सत्य र न्यायको बिरुद्धमा कतै लाग्यो त ?” चिया पसल्नी रुँलाजस्तो गरी ।
“बौलाहा मरेकोमा यसलाई ठूलो चिन्ता परेजस्तो छ ।” चियापसलेले आफ्नी स्वास्नीतिर फर्केर खिसिट्यूरी ग¥यो ।
“त्यो बौलाहा नभएको भए तिमी मलाई यसरी बस्न दिन्थ्यौं र ? सम्झ त पुराना कुराहरु !” स्वास्नीले उसलाई वाल्ल पारी ।
“त्यो बौलाहाले तँलाई के न्याय ग¥यो ?” पसलेले अँध्यारो मुख पार्दै प्रतिवाद गर्न खोज्यो ।
“दाइजो नल्याएको निहुँमा तिमीले मलाई घरबाट निकाल्न खोजेको कुरो बिस्र्यौ ?” पसलेलाई स्वास्नीले अतीतको घाउ देखाई ।
“त्यसो भए त्यो बौलाहा तेरो भाग्य विधाता थियो होइन त ?” पसले निधार खुम्च्याएर फेरि हाँस्यो ।
“मलाई मात्र होइन, धेरै मानिसहरुलाई त्यसले न्याय दिलायो ।” पसलेकी स्वास्नी फेरि संवेदित देखिई ।
“मलाई न्याय चाहियो । म बौलाहा खोज्दै हिँडेकी !” एउटी वृद्ध महिला चोकमा आएर सबैको मुखतिर हेर्दै चिच्याइन् ।
सबैले एकपटक मुखामुख गरे ।
अस्पतालबाट शवयात्रा गर्दै विशाल जुलुस यही चोकतिर आयो । सबैका आँखा जुलुसतिर टाँसिएका थिए ।
घरमा आगो लागे छ । आगोको मुस्लो र धुँवाले आकासै छुन लाग्यो !” पसल्नीले सबैको ध्यान अर्कोतिर आकर्षित गरी ।
“रंगध्वजको घरमा जुलुसले आगो लगाएजस्तो छ ।” शिक्षक दिनानाथले परिस्थितिको अनुमान लगाए ।
“त्यसको घरमा त आगो झोस्नै पथ्र्यो ।” पसल्नीको प्रतिक्रिया झरिहाल्यो ।
जुलुस त्यही चोकमा आएर रोकियो ।
“यस ठाउँमा यतिका मान्छे मैले अहिलेसम्मै देखेकी थिइन् ।” पसलेले अचम्म मानेर मानिसहरुको भीडतिर आँखा दौडायो ।
“अब यस ठाउँमा फ्रस्टेड बौलाहा र शहीदको शालिक स्थापना गरिने छ ।” चोकमा बनाइएको मंचमा चढेर उद्घोषक बोलिरहेको थियो ।
“शवयात्रा अब फेरि शुरु हुन्छ ।” मंचबाट कसैले अर्को जानकारी गरायो ।
रंगध्वजको घर सल्किएर धुँवाको लप्का आकाशमा थेग्ला–थेग्लामा विभाजित भएर विलाइरहेको थियो ।
“घर बलेको धुँवा त अरु धुँवाभन्दा बेग्लै हुँदो रहेछ ।” मलामीहरु आकाशतिर फर्केर प्रतिक्रिया जनाइरहेका थिए ।
रचना द्वैमासिक, वर्ष ४८ पूर्णाङ्क ९९ कार्तिक–मंसीर २०६५
मिर्मिरे उज्यालो भुइँमा खस्न अझै केही समय बाँकी नै थियो । रातको अन्तिम प्रहरको हुस्सूले अँधेरो अझै बाक्लो देखिन्थ्यो । महाभारतको डाँडामा आधा रातदेखि चल्न थालेको सिरेटो बतास निरन्तर र एकनाशले चलिरहेको छ । मुटु नै बन्द होलाजस्तो चिसो छ । अब दुई–तीन घण्टापछि कटारीबाट हिंडेका बसहरु चिया खान यसै ठाउँमा आइपुग्छन् । राउतखर्क र पाल्सिङतिरबाट दूध लिएर आउने मान्छेहरु पनि आइपुगेका छैनन् । आजको जाडोले उनीहरुलाई काम गर्न कठीन भएको हुनसक्छ ।
सिरेटो एकनाससँग जोडले चलिरहेको छ । तल गैह्राबाट एउटा आवाज आयो । यो आवाज दूध लिएर आउनेहरुको होइन ।
उसले अझै ठम्याएर सुनी– ‘अहँ, यो आवाज चिनेका मान्छेको पनि होइन ।’
को आउँदैछ यतिबेला ? घुर्मीबाट आउने गाडीहरु आउने बेलै भएको छैन । कटारीबाट आउने गाडीहरु आइपुग्न पनि अझै धेरै समय बाँकी छ । गाडी पर्खिने मान्छेहरु पनि यति चाँडै आउनुको कुनै अर्थ छैन ।
आवाजलाई उसले अझै ध्यान दिएर सुनी । नितान्त नौलो आवाज थियो । मनको कतै कुनामा डर पसेको बोध भयो उसलाई । आकाशतिर फर्केर हेरी । उज्यालो हुनै लागेजस्तो लाग्यो ।
ऊ अर्थात् माइली । उसको नाम नै यही हो । अर्थात्, माइली मगर । बाबु–आमाकी माइली छोरी थिई ऊ । तर पछि नाम नै माइली भयो । परारै गाईघाट गएर नागरिकता प्रमाण–पत्र बनाउँदा पनि उसको नाम त्यही रह्यो । माइलीलाई पनि त्यो नामबाहेक आफ्नो अर्को नाम भएको थाहै छैन । ऊ यहाँ होटल चलाएर बस्न थालेको पनि
छ–सात वर्ष भइसक्यो । होटल चलाउनुअघि माइली मयङखु गाउँकी एक सिधासाधा केटी थिई ।
एक दशकअघि कटारी–ओखलढुंगा सडक खण्डको निर्माण कार्य शाही सेनाले जिम्मा लिएपछि माइलीजस्ता धेरै ग्रामीण युवतीहरु सेनाका वैध या अबैध पत्नी बन्न पुगे ।
अरु कैयौं युवतीजस्तै माइली पनि त्यही अभागी युवती थिई ।
उसलाई पनि लोग्नेले बच्चा जन्मनुभन्दा अघि नै छाडेर अन्यत्र सरुवा भएर गएको थियो । कटारीदेखि ओखलढुंगासम्म सडकको आसपास माइलीजस्ता प्रशस्तै युवतीहरु छन् र बाबु नचिनिएका बच्चाहरुसमेत
छन् । माइलीको लोग्ने पनि डढेल्धुरातिरको हो रे ! तर उसलाई डढेल्धुरा कति टाढा छ, थाहै छैन । पसलमा आउने धेरै मान्छेहरुको मुखबाट उसले सुन्दै आएकी हो– डढेल्धुरा यहाँदेखि धेरै टाढा पर्छ ।
बच्चा जन्मेपछि माइलीलाई घर र समाजमा बस्न सजिलो भएन । ऊ त छँदै थिई, खाने पेट अर्को पनि बढ्यो । दुई जनाका लागि छाक जुटाउनु चानचुने कुरा थिएन । दया–माया गर्ने मान्छेहरुले दिएको सल्लाह पच्छ्याउँदै ऊ बेतिनीमा चिया पसल गर्न आइपुगी ।
अँध्यारोलाई छिचोल्दै आवाज नजीक–नजीक आउन थाल्यो । आवाजहरु फरक–फरक थिए । माइलीले मनमनै विचार गरी– मानिसहरु पनि धेरै छन्जस्तो छ ।
अगेनामा आगो कमै हुँदैगयो । उसले दाउराहरु थपी र अगेनाको नजिकै सरेर जाडो मार्न खोजी ।
‘दूध पनि धेरै बाँकी छैनजस्तो छ !’ एक्लै बर्बराई र पछिल्तिर फर्केर खाटमाथि राखेको कराहीतिर हेरी ।
‘एक मानुजति मात्रै छ’ –माइलीले आवाजहरुको संख्यासंग कराहीको दूधको मात्रालाई दाँजी ।
‘चियालाई पुग्दैनजस्तो छ’ –फेरि मनमनै विचार गरी ।
आवाजहरुको चर्को स्वर बढ्दै गयो ।
‘विवाहको जन्ती त होइन होला ?’ उसले फेरि तर्कना गरी ।
माइलीले सानो छोरालाई उठाई । अलि–अलि डर पनि महशूस भयो उसलाई । छोरो ओच्छ्यानबाट उठेर आँखा मिच्दै अगेनाको छेउमा आएर टुक्रक्क बस्यो ।
‘सुन् त, केको आवाज हो ?’ उसले सानो स्वरमा छोरालाई सोधी ।
‘कति धेरै मान्छे बोलेका छन् !’ छोराको कुराले उसको अनुमानमा झनै बल पुग्यो ।
माइलीले अगेनामा दाउराहरु थपी ता कि उज्यालो पर–परसम्म पुगोस् ।
‘भाले त अघि नै बासेको थियो । कति बज्यो होला खै ? उज्यालो पनि हुँदैन ।’ सात वर्षको छोरालाई सोधेझैं गरी माइलीले एकान्तपन मेट्न खोजी ।
शाही सैनिकहरुको एउटा ठूलो जत्था गैह्राबाट टर्चको लाइट देखाउँदै माइलीको पसलनेरै आइपुग्यो । धेरैवटा टर्चको प्रकाश उसको अनुहारमा परेपछि ऊ बेस्सरी झस्की ।
‘कस्ता बदमासहरु ! अरुको अनुहारमा यसरी टर्च बाल्नुहुन्छ ?’ उनीहरुले नसुन्ने गरी माइलीले एउटा आक्रोश पोखी ।
शाही सेना भन्नेबित्तिकै उसको मनमा घृणाको एउटा विशाल पोखरी निर्माण भएको छ । शाही सैनिककै रुपमा उसको जीवनमा एउटा मान्छेले प्रवेश ग¥यो र उसको व्यक्तिगत संसारलाई हिरोशिमा र नागाशाकीमा अमेरिकाले खसालेको एटम बमलेझैं पलभरमै खण्डहर बनाइदियो । उसको मात्र होइन, उसका कैयौं केटी साथीहरुको जीवनलाई पनि उनीहरुले खेलौंनामा परिणत गरिदिए । सैनिकहरुको हूल देख्नेबित्तिकै उसको भित्री मन एकपटक फेरि काँप्यो ।
‘यो पसलमा चिया पाइन्छ ?’ एउटा कुनै सैनिकले सोधेको थियो ।
‘चिया मात्र होइन, धेरै कुरा पाइन्छजस्तो छ !’ माइलीसँग जिस्कने आसयले अर्को सैनिकले पछिल्तिरबाट सानो स्वरमा बोलेको सुनियो ।
‘पाइँदैन !’ यी दुष्टहरुको जमातलाई ख्वाउनुभन्दा छैन भनेरै टारिदिन्छु । उसले मनमनै सोचेर यस्तो उत्तर दिई ।
‘यहाँ दूध छ त ! किन चिया छैन भनिस् ?’ अर्को एउटा चटपटे सैनिक कुल्र्यो ।
‘यति धेरै मानिसलाई त्यति दूधले कसरी पुग्छ ?’ ओठमा झुण्डिरहेझैं उसले जवाफ फर्काई ।
‘त्यही दूधमा पानी थपेर बनाए भइहाल्छ नि !’ अगाडि उभिएको सैनिकले आदेशको शैलीमा बोल्यो ।
‘हामीलाई तेईस कप चिया चाहियो ।’ कमाण्डरजस्तो लाग्ने अर्को सैनिक फेरि बोल्यो ।
सैनिकहरुले माइलीको अगेनालाई मौरीले गोलोलाई घेरेझैं घेरिरहेका थिए । ओठ कमाउने चिसो सिरेटो अझै चलिरहेको थियो ।
चिया पाक्दा नपाक्दै सबै मानिसहरुलाई देखिने गरेर उज्यालो भुइँमा खसिसकेको थियो । माइलीले पछिसम्मै आँखा फालेर हेरी– ‘हत्कडी लगाइएको एउटा मान्छे सैनिकहरुको बीचमा जाडोले कामिरहेको थियो ।’ जुत्ता–चप्पल नलगाएको खाली खुट्टा, सेतो नैनसुतको मैलो कमिज र छोटो कछाड लगाएको त्यो मान्छे माइलीलाई आपूmले बेलाबेलामा देखिरहेको अनुहारझैं लाग्यो । उसले मनमनै चिन्न खोजी ‘यतै बड्डाँडा, पाल्सिङ्गतिरकै मान्छे हुनुपर्छ ।’
त्यो नीरिह मानिस र सैनिकहरुको बीचको एउटा छोटो सम्वाद पनि सुनी उसले ।
‘म त माओवादी हुँदै होइन हजूर !’
‘तेरो भाइ भएपछि तँ पनि माओवादी नै होस् ।’
‘भाइसँग मेरो एक वर्षदेखि भेटै भएको छैन ।’
‘तैले खोजिस् भने भेट्न सक्छस् !’
‘छाड्दिनूस् हजूर म माओवादी होइन ।’
‘एक वर्षअघि तेरो घरमा आएर ऊ बास बसेको प्रमाण छ हामीसँग ।’
‘ऊ आएर बसेको त हो हजूर !’
‘आतंककारीलाई सहयोग गर्ने पनि आतंककारी नै हुन्छ ।’ चियाका लागि माइलीले सबैलाई एकाएक गन्दै गर्दा यस्तै सम्वाद सुनेकी थिई ।
‘तपाईंहरु चौवीसजना हुनुहुन्छ, चियाचाहिँ किन तेईस कप ?’ माइलीले मानिसहरु गनिसकेपछि भनी ।
‘तैंले आतङ्ककारीलाई पनि गनिस् ?’ छुच्चोजस्तो लाग्ने अर्को सैनिक फेरि कड्कियो ।
माइलीले त्यो मान्छेलाई फेरि हेरी– ‘त्यो मान्छे स्यालको जमातमा एउटा टिठलाग्दो पाठोले जीवनको भीख मागिरहेको झैं देखिन्छ ।’
माइलीले देखिरहेझैं लाग्ने त्यो मान्छेलाई अझै चिन्न खोजी– ‘फेरि पनि धेरै पटक देखिरहेको अनुहार, चिनिरहेको अनुहारझैं लाग्यो ।’
‘अब एकैछिनपछि महाभारतमा घामको किरण पर्ने छ र त्यसपछि यो अनाथको कामिरहेको शरीरमा न्यानो हुनेछ ।’ माइलीले मनमनै आकाशतिर हेरेर प्रार्थना गरी ।
उता सैनिकहरुद्वारा चिया खाइसकेपछि त्यो एक्लो र निरिह मान्छेमाथि अमानवीय र त्रासद यातनाको क्रम शुरु भयो ।
‘पुलिस र सेनाको जातै कस्तो हँ ?’ माइलीले सैनिकसँगको विगत र आफ्नो जीवनलाई एकपटक कोट्याएर सोची ।
माइली हेर्दै थिई– एउटा सैनिकले त्यो एक्लो मान्छेमाथि एक लात्ती हान्यो र ऊ अर्कोतिर पुगेर लड्नमात्र के लागेको थियो; अर्कोतिरबाट अर्को सैनिकले फेरि अर्को लात्ती वर्षायो । मान्छेलाई फुटबल बनाएर खेलिएको यो दृश्यलाई माइलीले हेर्न नचाहँदै पनि हेरी ।
माइलीले हाट भर्न जाँदा कटारीको चौरमा कहिलेकाहीं यसैगरी मान्छेहरुले फुटबल खेलेको देखेकी थिई । माइलीले उसको बन्द मुखबाट रगत बाहिर बगिरहेको देखी ।
माइलीको सानो छोरो त्यो दृश्यलाई हेर्दै भित्र भाग्यो । सँगसँगै माइली पनि भित्र गई ।
‘आमू ! त्यो मान्छेलाई सेनाले किन पिटेको ?’ छोराले कानमा सुटुक्क सोध्यो ।
‘चुप लाग् !’ माइलीले छोरासँग त्रासद स्थितिको संकेत गरी र मजेत्रोले आँसु पुछी ।
यातनाका प्रत्येक लात्ती र लठ्ठीहरु त्यो नीरिह र एक्लो मान्छेको शरीरमा बज्रँदा ऊ माइलीको अनुहारतिर एक पटक हेर्ने कोशिस गथ्र्यो । त्यसबेला माइली झन् मर्माहत हुन्थ्यी ।
बाहिर आँगन फेरि एकछिन मौन भयो । माइली फेरि बाहिर आई । उसको छोरो पनि फेरि उसलाई पच्छ्याउँदै बाहिरियो ।
बर्दिवालहरुको बीचमा त्यो निरिह मान्छे टुक्रुक्क बसिरहेको थियो । चिसो सिरेटो भरखरै रोकिएको छ । घाम नझुल्किएकोले महाभारतको चिसो भुईंमा उसको बसाइ जडवत मूर्तिजस्तै देखिन्थ्यो । सैनिकहरु वरपर जाँदै एकापसमा कानेखुसी गरिरहेका थिए ।
माइलीले सानैमा देखेको एउटा घटना सम्झी– ‘एक दिन विरालोले घरको मझेरीमा एउटा मुसो मारेछ । मुसोलाई हिंड्न र चल्न नसक्ने बनाएपछि विरालोले खानुभन्दा पहिले छोड्दै… हिंड्दै केही टाढा जाँदै, आउँदै गथ्र्यो ।’ यो घटना उसलाई त्यस्तै लाग्यो ।
“तँ यहाँबाट भाग् ! तँलाई हामी छाडिदिन्छौं ।” एकजना सैनिकले सबैको मुखमा हेरेर हाँस्दै भन्यो ।
“हँ !” ऊ झस्क्यो ।
“हो ! हो ! भाग् !” सैनिकहरु खित्खिताउँदै हाँसे ।
“होइन होला ।”रगतको फालसाले रंगिएको दाँत र ओठ देखाउँदै उसले अलिकति मुख खोलेर हाँसेको अभिनय ग¥यो ।
“मान्छेको जात त बलियो हुँदोरहेछ, त्यति गर्दा पनि मरेको छैन । बाँच्न पाइन्छ कि भनेर अझै हाँस्दैछ !” अर्को सैनिक साथीको काननेर गएर फुस्फुसायो ।
“भागिहाल्, तँलाई हामी छोडिदिन्छौं ।” कमाण्डरजस्तो देखिने अर्को सैनिकले फेरि गम्भीरजस्तो भएर भन्यो ।
“साँच्चै ?” उसले कमाण्डरको मुखतिर हे¥यो ।
“हो, भाग् !” कमाण्डरले फेरि विश्वास दिलाउन खोज्यो ।
उसले एक हात जमीनमा टेक्यो र उठ्न खोज्यो । तर सकेन । फेरि दुई हात भुइँमा टेक्यो र नजिकैको भित्तामा समातेर बल्ल–तल्ल उठ्यो । एकपटक फेरि वरिपरि फर्केर हे¥यो ।
उसलाई भागेर बाँच्छु भन्ने कुरामा शंकाको ठूलो पर्खाल अघिल्तिर उभियो । फेरि वरिपरि हे¥यो र स्थिति बुझ्ने प्रयत्न ग¥यो । मौन भएर उभिएकी माइलीलाई हे¥यो । माइलीको अनुहारबाट पनि उसले केही बुझेन ।
“ढिलो नगर् ! चाँडो भागिहाल् !” फेरि कमाण्डर कड्कियो । उसले हातले भित्तालाई छोड्यो र अलिकति हिंड्न खोज्यो । जीउ थर्थर काँपेजस्तो लाग्यो । तर पनि ऊ लड्नबाट सम्हालियो र विस्तारै पूर्वतर्फको बाटो अघि बढ्यो । माइली पनि छक्क परेर हेरिरही ।
नजिकैको दोबाटोनेर पुगेर फेरि उसले अविश्वासका साथ पछिल्तिर फर्केर हे¥यो ।
उसले हेरेकोमा सैनिकहरु गलल्ल हाँसे ।
फेरि दुई पाइला अघि बढ्यो र पछिल्तिर फर्केर हे¥यो । सैनिकहरु फेरि खित्का छोडेर हाँसे ।
मोटर बाटो छोडेर ऊ महाभारतको डाँडाबाट उत्तरतिरको बाटो मोडियो ।
“ड्याङ्ग ! ड्याङ्ग !! ड्याङ्ग !!!” महाभारत पर्वत नै भत्किने गरेर आएको तीनवटा आवाजले माइलीको छोरो कहालिंदै रोयो ।
“मारे अपराधीहरुले !” माइलीले पूर्वतिर फर्कंदै भनी ।
तुषारोले खाएका पाखाका विरुवाहरुको झाडीलाई लाछ्दै उसको शरीर खोल्सातिर झ¥यो । बाटामाथि धुवाँका पातला धर्साहरु अलि अलि देखिँदै देखिँदै बिलाए ।
महाभारत डाँडामा घामको झुल्को आइपुग्न अझै केही समय बाँकी नै थियो ।
कौशिकी मासिक, वर्ष ८ अङ्क ६, पूर्णाङ्क ८५, २०६५ असोज
भित्तामा फिल्मी दुनियाँका पोस्टरहरु टाँसिएका छन् । पल्लो कोठाको उज्यालोको प्रकाश पत्रिकाका कापहरु छिचोलेर उनीहरुको कोठैलाई पनि उज्यालो बनाइदिन्थ्यो । वल्लो छउ र पल्लो छृ दुई ठाउँमा तल र माथि दुईतिर दुई फिट जति एकसरो इँटको गारो उठाएर तीन तीन वटा फल्याकहरु जोडेपछि भीमबहादुरको जस्तै गणेशको पनि आजदेखि एउटा पलङ तयार भयो । बनाइसकेपछि साह्रै खुसी भयो ऊ । च्यादरको छानोबाट राति सुत्दा मुखमा र अझ कति त कानमै शीतको थोपा खसेर साह्रै दुःख दिन्थ्यो । राति नै त्यसमाथि पत्रिकाहरु टाँस्यो र कामले थाकेर लखतरान भएपछि आउने आज रातिको मीठो निद्राको कामना ग¥यो । ढोकामा पनि डोरी झुण््याएर भित्रैबाट बन्द गर्न मिल्ने बनायो । गएको महिनाको ज्यालाबाट बचाएर हिजै मात्र उसले डेढ सय रुपैयाँमा एउटा सानो चाइनिज रेडियो किन्यो । राती सुतेपछि त्यो रेडियोबाट आधा रातसम्म नेपाली गीतहरु सुन्ने चाहना पाल्यो उसले ।
भीमबहादुर पनि उसको कामबाट प्रभावित भयो । निकै दिन भयो भीमबहादुरलाई ज्वरो आइरहेको छ । भीमबहादुर बिरामी भएपछि गणेश पनि निराश देखियो । ज्वरो आएको एक हप्ताभन्दा बढी भयो, तर कुनै औषधिले छोएन । अस्पताल लान पनि साहुले चासो देखाएन । घरबाट काठमाण्डौ आएपछि साँच्चै राम्रो अभिभावक भेट्टाएको थियो गणेशले भीमबहादुरलाई । आफ्नै तानमा राखेर काम सिकायो । उसको मात्र होइन यो गलैंचा कारखानामा काम गर्ने धेरै कामदारहरुको भीमबहादुर असल अभिभावक थियो । सबैले उसलाई भीमबहादुर दाइ भनेर सम्बोधन गर्थे । परिवारको सदस्य भएर मात्रै पनि मान्ते यति माया लाग्दो हुँदैन । तर उसलाई अहिलेसम्म थाहा थिएन, भीमबहादुर कहाँको मान्छे थियो ।
राति दस बजेपछि ज्वरो अलिकति ओर्लिए जस्तो मात्र भयो । उठेर गणेशले भीमबहादुरको निधार छाम्यो, ज्वरो नाम मात्रै ओर्लिए जस्तो छ । गणेशले भीमबहादुरको छेउमै बसेर उसको विगत र परिवारका बारेमा सोध्यो ।
‘काठमाण्डौ खाल्डोमा पसेपछि मेरो यहाँबाट बाहिर जाने सपना सपना मात्रै भयो । काठमाण्डौभित्र पस्दा मेरो उमेर पन्ध्र वर्षको थियो । हजुरबा हजुरआमासँगै मेरा बाबु पनि पहाडबाट मधेस झरेका थिए रे ! पहाडबाट एक हल गोरु बाहेक केही सम्पत्ति नलिई उनी बूढा हजुरबा र हजुरआमालाई लिएर आएको कुरा बाबुकै मुखबाट हामीले सुनेका थियौं । मधेस झरेको एक वर्ष नपग्दै औलोले गर्दा हजुरबा बितेछन् । हजुरबा बितेको केही महिनामै हजुरआमा पनि गइछन् । उमेर सानै भएकोले धेरै ठूलो दुःख पाएछन् बाउले । गरिबको जीवन, दुःद त सँगसँगै आएकै थियो । त्यसमाथि सानै उमेरमा बाबुआमासँगको बिछोड । अनि बाँकी के रह्यो र ! नयाँ बस्तीका मान्छेहरुकहाँ नोकर बसेर काम गर्दा गर्दै बाबुको बाल्यकाल बितेछ । उमेर छिप्पिदै गएपछि पहाडतिरबाट झरेका मान्छेहरुसँग मिलेर जङ्गल फाँड्न थालेछन् । छत्तीस सालको जनमतसङ्ग्रहका पञ्चायती नेताहरुले पञ्चायतको पक्षमा लागे जङ्गल फँडानी गरेको जमीन दर्ता गराइदिनेछौं भनेर आश्वासन दिएछन् । पछि पञ्चायतले जितेपछि कहाँ जग्गा दिनु, उल्टै हाम्रो बस्तीमा हात्तीद्वारा घर भत्काएर आगो लगाई दिएछन् । प्रशासनसँग ठूलो संघर्ष भएछ । मेरा बाबु त्यो संघर्षको अगुवा हुनुहुन्थ्यो । झोडा बासीहरुलाई सरकारले ठूलो दमन र अत्याचार ग¥यो । मेरो बुबालाई पक्रेर लामो समयसम्म बेपत्ता पा¥यो । करेन्ट लगाउने, महिनौंसम्म चिसो भुइँमा लडाइराख्ने, नङका कापहरुमा सियोले घोच्ने, प्रत्येक दिन मुर्छा नहुन्जेलसम्म डिट्ने जस्ता यातनाका कारण थुनाबाट छुटेर आएपछि बाबु विरामी भइरहन थाले । झोडाका सबै सुकुम्बासीहरुको नराम्ररी हार भयो । उनीहरु सबै नयाँ बस्तीबाट विस्थापित भए । पछि सुन्नमा आयो — कोही आसामतिर पसे, कोही भुटानतिर गए त कोही नागाल्याण्डतिर । हाम्रा बाबुहरुले दुःखका साथ फाँडको जग्गा पञ्चायती नेताहरुले आफ्ना नाममा दर्ता गरेर पछि बेचेछन् ।
बाबुको बिरामी निको हुनुको सट्टा बढ्दै बढ्दै गयो । म दस वर्षको छँदा मेरा बाबु मरे । उनलाई खै के रोग थियो, थाहा भएन । तर मर्ने बेलामा रगत छादेर मेर । बाबुको मरेको वर्ष नपुग्दै आमा पनि पोइन गइन् । सानी बहिनी पनि थिई, आमासँगसँगै पच्छ््याएर गई । उनीहरु कसरी बसिरहेका छन्, मलाई केही पनि थाहा छैन । कहिलेकाहीं उनीहरुको मलाई साह्रै सम्झना आउँछ । अझ चाडबाडको बेलामा उनीहरुको सम्झनाले मन भित्रैदेखि चिमोटिन्छ । तर के गर्ने ? उनीहरु कहाँ छन् त्यस क्षेत्रतिरबाट गलैंचा कारखानामा आउने मान्छेहरुसँग आमा र बहिनीको बारेमा सोध्ने गर्छु, तर कसैले पनि चिनेका कुरा गर्दैनन् ।
काठमाण्डौ आइसकेपछि मोरङ्ग झोडाबाट बिस्थापित भएर आउने मान्छेहरुसँग लागेर मैले पनि गलैंचा कारखानामा काम गर्न थालें । गलैंचा कारखानामा पनि म अरु साथीहरुभन्दा छिटो काम गर्थें । मेरो काम देखेर साहुहरु पनि प्रभावित हुन्थे । अहिलेको साहुले मेरै आडले कारखाना टिकाएको हो । नत्र उसको हिम्मतै थिएन । काम गर्ने राम्रा राम्रा मान्छेहरु पनि मैले नै खोजेर राखिदिएको हुँ । नत्र उसले कारखाना छोडेरै हिँड्न लागेको थियो । अचेल म बिरामी हुँदा अस्पताल लैजान पनि ऊ आनाकानी गरिरहेको छ । यसको कारखानामा काम गर्न थालेको पनि दस बर्षभन्दा बढी भयो । तिमी भरखर आएको मान्छे, तिमीले देखिहाल्यौ, कामदारहरुलाई त्यसले कति तल्लो व्यवहार गर्छ । तिमी जस्तो नवयुवकले पनि यस ठाउँमा लामो समय बस्न उपयुक्त हुँदैन । हामी कामदार र मालिकहरुको बीचमा कहिल्यै पनि मानवीय सम्बन्ध स्थापित हुन्ै नसक्ने रहेछ । बिरामीबाट उठेपछि यसको कारखानामा काम गर्न मलाई पटक्कै मन छैन ।
अँ, पूर्वतिर जाने बाटो अहिले त राम्रो छ रे होइन ? म काठमाण्डौ आउँदा बाइरोडको मात्र बाटो थियो । लोड गरेको ट्रकमाथि बसेर सर्प झैं घुमेको बाटो हेर्दै आउँदा कस्तो रमाइलो लागेको थियो । अहिले त हाम्रो झोडा पनि सहर जस्तै भइसक्यो रे ! गाउँगाउँमै मोटर जान्छ रे ! एकै पटक पनि हेर्न नपाई मरिने हो कि के हो ?
गणेशले फिलिमको कथा सुने जस्तो गरी भीमबहादुरका कुराहरु चाख मानेर सुनिरह्यो । मध्यरातदेखि भीमबहादुरको ज्वरो झनै बढ्यो । पानीपट्टी लाउँदा पनि ज्वरो एक सय चारभन्दा तल झरेन । सिटामोलले पनि हिजोसँझदेखि कुनै काम गर्न सकेको देखिएन । हिजो दिउँसोदेखि खोकी पनि सदाभन्दा बढ्दै हुन थाल्यो । थुकको मात्रामा रगत देखिन थालेपछि कारखानामा काम गर्ने उसका सहकर्मीहरु हिजोदेखि निकै आत्तिए ।
गलैंचा कारखानभित्रै थिए कामदार बस्ने टहराहरु । मालिक बस्ने घर कारखानाभन्दा अलिक टाढै थियो । कामदारहरुको समूहले साहुलाई गुहार्न जाने निश्चय ग¥यो ।
‘साहु त बिहान दस बजे मात्रै उठ्छन् ।’ एक जना कामदारले समस्या बतायो ।
‘उज्यालो हुनुभन्दा अगाडि नै अस्पताल पु¥याइसक्नुपर्छ ।’ एक जना पाको कामदारले स्थितिको संवेदनशीलतालाई औंल्याए ।
‘अस्पताल लैजान किन साहुलाई पर्खिने, हाम्रै खल्तीको जम्मा पारेर लैजाऊँ ।’ भर्खरै दोलखातिरबाट आएर कारखानामा काम गर्न थालेका एक जना नवयुवाले समाधान खोजे ।
कारखानाभित्र काम गर्ने तीस जना कामदारहरुसँग उठाइएको रकम जोडदा अस्पताल पु¥याउने खर्च जुट्न सकेन । उनीहरुले दुई तीन महिनादेखि काम गरेको ज्याला लिन नै बाँकी थियो । कसै गर्दा पनि अस्पताल लाने पैसा जुट्नै सकेन । सबैका सामुन्ने अब उजयालो नहुँदै साहुकहाँ जानुभन्दा अर्को विकल्प बाँकी पनि थिएन । कामदारहरुको समूहले साहुसँग गएर कुरा गर्नका लागि तीन जना साथीहरुलाई जिम्मा दिएपछि हर्कबहादुरसहित तीन जना जोरपाटीबाट साहुको घर चावेलतिर बटो लागे ।
रात उज्यालोलाई निम्ता गर्न ओरालो लाग्दै गरेको भान हुन्थ्यो । हिउँदको काठमाण्डौ, चिसोले सडकमा भुस्याहा कुकुरहरु पनि छिँडी र कुना खोज्दै भौंतारिइरहेका थिए । रातको निरवतालाई चिर्दै आइरहेका मानिसहरु देखेर पनि कुकुरहरु सडकमा निस्कन साहस गर्दैनथे र फोहोर फाल्ने कन्टेनरको आडमै सुतेर भुक्थे । साँखु र सुन्दरीजलतिरबाट तरकारी बोकेर रत्नपार्क पुग्ने मोटरहरु निस्कने बेला भएकै थिएन । बेलुका ढिलो सुत्ने बानी परेको काठमाण्डौ उठ्ने बेला हुन धेरै समय बाँकी थियो । सडक शून्य थियो ।
साहुको घर पुग्न उनीहरुलाई कुनै बेर लागेन । गेटको बाहिरी भित्तामा पित्तलको पहेँलो प्लेटमा लेखेर टाँसिएको थियो — ‘नामगेल शेर्पा निवास ।’ उनीहरुले दोहो¥याएर त्यो नाम पढे र निश्चिन्त भए — साहुको घर यही हो । रातको सन्नाटामा साहुको घरको बडेमाको फलामे गेटले उनीहरुको त्रासलाई भित्रभित्रै बढाइदियो ।
तीनै जना ढोकाअगाडि मूर्तिवत् उभिए । कसले ढोका ढकढक्याउने ? तीनै जनाले एक आपसमा मौन प्रश्न गरे । यो प्रश्न नबुझ्ने त्यहाँ कोही थिएन । शिवराम र गणेशले हर्कबहादुरतिर इसारा गरे । हर्कबहादुरले नाइनास्ति गर्न सकेन, किनकि तीन जनामध्ये ऊ अलिक पाको र अनुभवी गनिन्थ्यो ।
‘ड्याङ ! ड्याङ ! ड्याङ !’ हर्कबहादुरले ढोकामा सानो आवाज दियो । ढोकाको आवाजपछि वरिपरिका कुकुरहरुको भुकाइले रातको सन्नाटालाई एक्कासि चि¥यो । साहुको घरभित्रको कुकुर खोर चर्काउँदै उफ्रियो । डरले छाती हप्प फुलेझैं लाग्यो उनीहरुलाई । कुकुर भुकेको आवाज भुइँमा नझर्दै एक जना पाले कामदार गेटमा हाजिर भयो र उसले टर्च बालेर एक पटक सबैको अनुहार हे¥यो ।
‘यो राति के खोज्न आ’को ?’ आगन्तुहरुको कमजोर व्यक्तित्वको अध्ययन गरेपछि पालेले निद्राको रिस पोख्दै भन्यो ।
‘कारखानामा भीमबहादुर साह्रै बिरामी छ । साहुलाई अस्पताल लैजान भन्दिनु प¥यो ।’ हर्कबहादुरले मलिन स्वरमा समस्या राख्यो ।
‘यतिबेला साहुलाई उठाउन मिल्दैन । तपाईंहरु भित्र बसिरहनुस् । साहु उठेपछि मात्र कुरा गर्नुस् ।’ पालेले ढोका खोलेर बरण्डाका कुर्सीहरु देखाइदिदै भन्यो ।
उनीहरु एक घण्टापछि भित्र पसे अर्थात् साहुको घरको कम्पाउपण्डभित्र । बाहिर उभिनु परेको पीडाले गर्दा यसलाई पनि उनीहरुले एउटा सानो सफलता नै ठाने । उनीहरु कम्पाउपण्डभित्र पसेपछि पालेले फलामको ढोका फेरि लगायो र उही यामानको ताल्चा ठोकिदियो ।
कुनै कुनै बेला चिसोले सासै लैजाला जस्तो हुन्थ्यो । अँध्यारो बरण्डामा बसेको करिब एक—डेढ घण्टापछि सहरका घरहरु छिचोल्दै आएका भालेका स्वरहरु सुने उनीहरुले । ‘उज्यालो हुने बेला भएछ दाजु !’ गणेशले हर्कबहादुरतिर फर्केर जाडोले काम्दै गरेको स्वर ओकल्यो ।
‘तर भीमबहादुरको स्थिति राम्रो छैन । चाँडै अस्पताल पु¥याउन सकिएन भने हामीले उसलाई नभेट्टाउन पनि सक्छौं ।’ खुला आकाशमा मधुरो हुँदै गएका ताराहरुतिर हेर्दै हर्कबहादृुरले लामो सास फे¥यो ।
त्यसपछि चिसोले कठ्याङ्ग्रिएको वातावरणमा डरको अर्को सिरेटो पस्यो । त्यसपछि वातावरणमा फेरि मुर्दाशान्ति छायो । एक छिनपछि नजिकै गाडीको आवाज सुनियो । उनीहरुले नजिकै मुख जोडेर खस्याकखुसुक सल्लाह गरे, ‘अब उज्यालो हुँदैछ ।’
सडकमा आ—आफ्ना कामले हिँड्ने मान्छेहरुको भीड बढ्न थाल्यो । चाबेल चोकतिरबाट आएको मानिसहरुको हल्ला पनि घरिघरि सुनिन्थ्यो । तरकारी र दूध बेच्ने र किन्ने मानिसहरु हतारहतारमा हिँडिरहेका थिए । तर बिहानै लागेको काठमाण्डौ हुस्सुले सडकमा हिँडिरहेका मान्छेहरुको आकृति मात्र देखिन्थ्यो । साहुको घरबाट पनि एक जना कामदार फुत्त निस्कियो र उनीहरुलाई हेर्दै बाहिर गयो । एक छिनपछि ऊ प्लास्टिकको एक झोला दूध बोकेर भित्र पस्यो ।
हर्कबहादुर विस्तारै उठेर गेटमा पुग्यो । ऊ गएको देखेपछि पाले पनि बाहिर निस्क्यो । उसले फेरि स्थितिको गम्भीरतालाई बुझिदिन आग्रह ग¥यो । ‘भीमबहादुरको अवस्था अत्यन्तै ननाजुक छ, साहुलाई बोलाइदिनुभए जाती हुन्थ्यो ।’
‘यति बेलै निद्रा बिथोल्यो भनेर साहुले हामीलाई अहिले खेद्छन् ।’ पालेले फनक्क आफ्नो कोठातिर फर्कदै अस्वीकृति जनायो । हुस्सु बिस्तारै फाट्दै गयो । घरका छतहरुमा घामको प्रकाश देखिन थाल्यो । घरअगाडिको सडकमा कार्यालय जाने मानिसहरुको आवतजावत बढ्न थालेको थियो । घरबाट साहुका बच्चाहरु पनि स्कूलतिर गए । उनीहरुले साहुका परिवारका सदस्यहरुलाई पनि गुहारे, तर पनि साहु उठेर आएन ।
‘मान्छेको ज्यानभन्दा पनि उसको निद्रा ठूलो’ गणेशले हर्कबहादुरसँग विस्तारै आक्रोश पोख्यो ।
‘यो मान्छे होइन जनावर हो,’ शिवरामले अलिक ठूलो स्वर ग¥यो । हर्कबहादुरले गणेश र शिवरामलाई हातको इसाराले चुप रहन संकेत ग¥यो । उनीहरुले वरिपरिको वातावरणबाट बुझे, खाना खाने बेला पनि टरिसक्यो ।
‘कामै गर्न छाडेर किन हूलै कसेर आ’को ?’ निद्राबाट भर्खर उठेको मुखाकृति बोकेर साहुले बाहिर एकाएक उनीहरुलाई झम्ट्यो ।
‘भिमबहादुर साह्रै बिरामी छ । अस्पताल लैजान हजुरलाई बिन्ती गर्न आ’को,’ हर्कबहादुरले अलिकति झुकेर भन्यो ।
‘बिरामी हुनेवित्तिकै अस्पताल लगिहाल्नु पर्दैन । तिमीहरु कारखानमा जाँदै गर, म एक छिनपछि आउँछु ।’ साहुले हर्कबहादुरको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएन ।
‘नमस्कार मालिक ! हामी विदा हुन्छौं,’ कोठाभित्र पस्न लागेको साहुलाई ठूलो स्वरले कराउँदै हर्कबहादुर जुरुक्क उठ्यो । अघि हिँड्दा हिँड्दै साहुले टाउको हल्लाएर विदा दिएजस्तो लाग्यो उसलाई । तर साहुले टाउको हल्लाएर विदा दिएको हो कि होइन राम्ररी भेउ पाउन उसले सकेन ।
‘हर्कबहादुर दाइ ! चाँडै जाऊँ,’ गणेश र शिवरामले हर्कबहादुरको हात ताने । बरण्डाको माथि भित्तामा झुण्ड््ययाइएको घडीको घण्टीले एघार बजेको सूचना दियो ।
‘धेरै अबेर भयो,’ हर्कबहादुरले मध्य घामतिर फर्केर हे¥यो ।
उनीहरु विस्तारै गेटबाट बाहिर निस्के र पूर्वको सडक समातेर जोरपाटीतिर लागे । सबैको अनुहारमा प्रस्ट पढ्न सकिने एउटा खिन्नता थियो ।
‘यस्ता कुकुरहरुको विश्वास गर्ने हामी बेकुफहरु हौं !’ शिवराम रिसले मुर्मुरियो ।
गणेशले टाउको हल्लाएर सहमति जनायो । परैबाट उनीहरुले देखे, कारखानामा मानिसहरुको भीड लागेको छ । उनीहरुको मनमा चिसो पस्यो । उनीहरुले आफ्ना पाइलाहरुको गति अझै बढाए । ‘बेलैमा अस्पता लागुपथ्र्यो,’ छिमेकी महिलाले भनेको कुरा बतासले उनीहरुको कानसम्मै ल्याइपु¥यायो ।
भीमबहादुृरको लास कारखानाको आँगनको बीचमा राखिएको थियो । भीमबहादुरले लाउने गरेको उही पातलो र मैलो लुङ्गीले उसको लास छोपिएको थियो ।
‘कति बेला ?’ साथीहरुतिर फर्केर गणेशले सोध्यो ।
‘भर्खरै हो, कात्रो किन्न गएकाहरु फर्केकै छैनन् ।’ कामदारहरुको स्वरमा आक्रोश थियो ।
मौरीहरुले रानोलाई घेरेझैं कामदारहरु भीमबहादुरको लासलाई घेरिरहेका थिए । सबैको अनुहारमा एउटा संकेत थियो । तर संकेत मौन थियो र सजिलै पढ्न सकिन्थ्यो । आँधी आउनुभन्दा अघिको वातावरण जस्तै । गणेश र शिवरामले त्यो संकेत सजिलै बुझे र गएर त्यही समूहमा मिसिए । हर्कबहादुर पनि उनीहरुसँग पछिपछि गयो ।
— समकालीन साहित्य, पूर्णाङ्क ५६÷२०६१, चैत्र
हामीलाई तपाई पोहोरै आउनुहुन्छ र सोधौं भन्ने लागेको थियो । सधै दशैमा घर आउने मान्छे, त्यो वर्षको दशैमा पनि तपाई घर आउनु भएन । धेरै चिठ्ठीहरू पठायौं, तर तपाईले उत्तर पठाउनु भएन । बाबा! तपाईं भरखर आउनुभएको छ । हतारहतार आउने वित्तिकै यस्तो कुरा ग¥यो भन्नुहोला । तर तपाईंलाई हामी सबै यही कुरा सोध्ने भनेर व्यग्रतापूर्वक प्रतिक्षामा बसेका थियौं । पोहोर देखि समाजका मान्छेहरूले तपाईलाई हेर्ने आँखानै बेग्लै भएको छ । हाम्रो घरलाई हेर्ने आँखा पहिलेको जस्तो छैन । तपाई पहिले पहिले घर आँउदा गाउँका मानिसहरू कति खुसी हुन्थे । अब भोलि बिहान उज्यालो मात्रै होस, अनि थाहा पाउनु होला । तपाईलाई देखेर मान्छेहरू अर्कै बाटोबाट हिंड्नेछन् । मानिसहरूले तपाईलाई थुक्न सक्नेछन् । गाउँमा बुभ्mने र पढेका मान्छेहरू कोही छैनन् र मात्रै हो । उनीहरू भएको भए तपाईलाई के के गर्ने थिए । हो, तपाईलाई पक्कै वाँच्न सजिलो थिएन । तपाई यहाँ आएको कसैले थाहा पाएका छन् भने तपाईले भोलीको उज्यालो देख्न पनि पाउनु हुन्न । अझै पनि तपाई यो घरमा लुकरै भए पनि केही दिन बस्नु भयो भने तपाई यहाँबाट पक्कै पनि आफनो जागिरमा बाँचेर फर्कन सक्नुहुन्न । अव गाउँ कहाँ तपाईले सोचे जस्तो छ र । तर यतिबेला तल्ला गाउँ, माथ्ला गाउँमा कोही दाइहरू पनि घरमा छैनन् । हामी जस्तै साना केटाकेटीहरू, बुढा हजुरवाहरू र आमैहरू मात्र छन् । उनीहरूले पनि तपाईलाई साह्रै खराब मान्छेका रूपमा चिनेका छन् ।
बाबा ! जागिर त परिवार आफन्तहरू र समाजलाई सहयोग गर्नका लागि खानु पर्ने होइन र तर तपाईको जागिरले सबैलाई बर्बाद पा¥यो । पुलिसको जागिर खाएर तपाई त उठ्नै नसक्ने गरि बर्वाद हुनु भयो । हाम्रै गाउँमा पनि पुलिसको जागिर खाने अरू पनि त छन् । सामाजिक प्रतिष्ठा प्रति उनीहरू सचेतै छन् । समाज र आफन्तहरूको आँखामा तपाई त दुष्ट र अपराधी मान्छेका रूपमा चिनिनु भयो भयो तर हामीलाई पनि किन किन मानिसहरूले राम्रो आँखाले हेरिदिदैनन् । बाबा ! तपाईको दोषका कारण हामीले किन सजाय पाउने ? यो त हामी माथिको अन्याय हो नि होइन ? हामीले त सबैलाई त्यसै भन्ने गरेका छौं । बाबाले गरेका अपराधका कारण हामीलाई नराम्रो व्यवहार नगरिदिनुस भनेर अनुनय–विनय गरेका छौ र यो समाजमा बस्न पाएका छौं ।
आमा एकदिन पँधेराबाट रूँदै आउनु भएको थियो । पँधेरामा आमाले अरू मानिसहरूलाई बोलाउँदा पनि बोलेनन् रे ! उहाँलाई देख्ने वित्तिकै मानिसहरू परपर जान्छन रे ! मास्टर्नी काकी त आमाको नजिकै पर्न चाहनुहुन्न रे ! बाबा ! तपाईले किन यस्तो महाअपराध गर्नुभयो ?
बाबा ! मास्टर काकासँग झगडा गरेर तपाई भोलिपल्ट बिहानै हिड्नु भयो । झगडा गर्दा मास्टर काकालाई तपाईले भोलि राती नै सिध्याइ दिन्छु भन्नुभएको रहेछ । पर्सीको उज्यालो देख्न पाउदैनस् भनेर भन्नुभएको रहेछ । तपाईले यसो भन्नु भएको कुरा गाउँका सबै मान्छेले सुनेका रहेछन् । तपाईले यति निच काम गर्नुृहुन्छ भनेर हामीले त कल्पनै गरेका थिएनौं ।
बाबा ! मास्टर काका जस्तो असल मान्छे त यो गाउँमै थिएनन् । ‘आँखामा राख्दा पनि नबिझाउने मान्छे’ भन्दै मास्टर काकालाई मारे पछि यहाँका कैयौं मान्छेहरू धेरै दिनसम्म रोइरहे । हो, बाबा हामीलाई पनि तपाईहरूले मास्टर काकालाई मारेपछि यो गाउँको मणि नै हराए जस्तो लाग्यो ।
मेरो कुरा सुनेर तपाईलाई साह्रै रिस उठ्यो होला । तपाई रिसाउनु अब हाम्रा लागि महत्वपूर्ण कुरा होइन । अनुहार पनि तपाईको कति साहै विग्रेको । तपाईलाई यति वेला ठूलो पश्चाताप भएको होला तर अब के गर्ने ? एक पटक मरिसकेपछि कसैको जीवन फेरि फर्केर आएको छैन । यहि कुरा तपाईले पहिले नै सोचिदिनुभएको भए कति राम्रो हुने थियो ।
भोलिपल्ट राति उस्तै उस्तै लुगा लगाएर आउने मान्छेहरूको एक हुलले मास्टर काकालाई कति क्रुरतापूर्वक मारे, त्यो तपाईलाई मैले भनिरहनै पर्दैन । त्यो त तपाईलाई थाहै छ । मास्टर काकाको छोरा नरेश भाईले एकदिन म सँग खुसुक्क भनेको थियो, त्यहाँ तपाई पनि हुनुहुन्थ्यो अरे । तर तपाईले अनुहारलाई खै ! किन हो एउटा रूमाल बाँधेर मुख छोप्नु भएको थियो रे ! बन्दुकको कुन्दाले मास्टरकाकाको टाउकै टाउकोमा हान्दा नरेशले तपाईसँग ठुलो बुवा बाबालाई नमारी दिनुस्, हामी जे भनेपनि मान्छौ भनेको थियो रे तपाईसँग । नरेशले यो कुरा स्कूलमा मेरो कानमा खुसुक्क भनेको थियो । उसले मलाई बाबालाई मार्न ठुलो बुवा पनि आउनु भएको थियो भन्थ्यो । जति छोप्न खोजे पनि बाबा ! तपाईलाई त सबैले चिनेछन । मास्टर्नी काकीले तपाईलाई चिनेपछि तपाई भित्तामा छेलिनु भयो रे ! होईन ? मास्टर काकालाई तल देविथानको रूखतिर मार्न लैजादा तपाईले मास्टर काकालाई गाली गर्दे लगेको तपाईको स्वर त, गाउँका सबैले चिनेछन् नि ! मास्टर काकालाई गोली हान्ने बेलामा पनि तपाईंले तँ माओवादी नै होस् भनेर जथाभावी गाली गर्नु भयो रे ! होइन ? घरबाट तल देविथान सम्म पु¥याउँदा मास्टर काकालाई बन्दुकको कुन्दाले जथाभावी घोच्दै लानु भयो रे ! होइन ?
गाउँका मान्छेसँग हामी पनि भोलि पल्ट विहानै तल देविथानमा मास्टर काकाको लास हेर्न गयौं । काकाको जिउभरि प्वालैप्वाल थिए । डोरीले बाँधेको त्यति एकजना मान्छेलाई मार्न पनि तपाईंहरूले किन त्यति धेरै गोली हान्नु परेको ? हतियार नभएको मान्छे मास्टर काकासँग तपाईंहरूलाई कति धेरै डर रहेछ ।
मास्टर काकाको लास हेर्न जाँदा त गाउँका धेरै मान्छेहरू मुर्छा भएर लडे नि ! मास्टर्नी काकीलाई त तीन दिनसम्म होस आएन । नरेशले त कति दिनसम्म भातै खाएन नि बाबा ! उसलाई त त्यसपछि कस्तो कस्तो रोग लाग्यो । टोलाएर बस्न थाल्यो । मान्छेहरूसँग पनि डराउन थाल्यो । हाम्रो कक्षामा त त्यो भन्दा पहिले प्रथम हुन्थ्यो नि बाबा ! त्यसपछिको परिक्षामा ऊ फेलै भयो । नरेश त अव पहिले पहिले जस्तो छैन । साथीहरू सँग पनि बस्न रूचाउँदैन । एक्लैएक्लै बसेर समय बिताउन मन पराउँछ । स्कूलमा साथीहरू उसलाई सा¥है मन पराउँछन् । पहिले कसैसँगपनि झगडा गर्दैनथ्यो । अहिले त साथीहरू सँग पनि सानो कुरामा झड¨ रिसाउँछ । साथीहरूसँग नजिक हुनै चाहँदैन । स्कूलबाट आउदा म उसैसँग घर फर्कन चाहन्थे तर ऊ एक्लै आउँछ । तपाईहरूले उसको बाबालाई मारेपछि उसको स्वभावमा कति फरक भयो, भयो ।
तपाईको अनुहार देख्दा मलाई अहिले मास्टर काकाको सम्झना भइरहेको छ । हामी केटाकेटीका लागि उहाँ कति असल मान्छे हुनुहुन्थ्यो । माओवादीले गरेका गलत कामलाई उहाँ गलतै भन्नुहुन्थ्यो । माओवादीले गरेका राम्रा कामको उहाँ प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो । के राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्नु गलत हो र ! तपाईहरूले त्यस्तो मान्छेलाई पनि देख्न सक्नु भएन । तपाईहरू आफैले सूरक्ष्ाँ गर्नु पर्ने कानूनलाई आपैmले कुल्चनु भयो । एकपटक उहाँलाई मन पराउने समाज, मास्टर्नी काकी र नरेशको अनुहार सम्झनुस् त ! के तपाईलाई कतै दुखेन ?
हामीलाई पनि तपाईको अनुहार हेर्न मन छैन । तपाईको अनुहार सम्झँदा पनि घिन लाग्छ । तर यो कुरा तपाईलाई भन्ने जरूरी थियो । हामी तपाईलाई भेटेर यो कुरा भन्न चाहन्थ्यौं ।
तपाईलाई जति शान्ती हुन्छ, रातमै शान्ती हुन्छ । यो गाउँमा, यो समाजमा तपाईका लागि उज्यालो कति पीडादायक हुनेछ, हेर्दै जानुुस । बरू कामना गर्नुस कहिल्यै उज्यालो नहोस् भनेर । भोली उज्यालोमा तपाईले यो गाउँलाई नहेर्नुस् । तपाई राती आउनुभयो, ठिकै गर्नुभयो । तपाईलाई घरमा आउँदा लुकेर बस्नु पर्ने छ भनेर हामीले एउटा कोठा बनाइदिएको छौं । त्यहाँकतैबाट उज्यालो छिर्दैन । तपाई यहाँ बसुन्जेल त्यही अँध्यारो कोठामा बस्नुस् ।
यो गाऊँमा तपाई आएको बाटामा कसैले देखेका रहेछन् भने तपाई यहाँबाट बाँचेर फर्कन पक्कै पनि सक्नुहुन्न । अब गाउँ तपाईहरूले पहिले सोचेजस्तो कहाँँ छ र !
स्रष्टा, पूर्णाङ्क २, २०६२ साउन
पश्चिमपट्टिबाट बाजा बजेजस्तो, गीत गाएजस्तो एउटा मधुरो आवाज धानचामर हालिसकेको हिउँदे मकैबारीलाई छिचोल्दै दनुवार टोलसम्मै आइपुग्यो ।
‘जन्तीहरु ब्गरमा आएर बसिसकेका छन् । अब साँझ पर्नेबित्तिकै आइपुग्छ ।’ यसो भन्दै केटाकेटीहरुको ठूलो जत्था जन्ती हेर्न बगरतिर दौडियो ।
“सबै तयार भएर बस्नुपर्छ” रबुवा दनुवारले ठूलो आवाज निकालेर सबैलाई सचेत बनायो । उसको आदेशपछि मानिसहरुको भीडमा एउटा तरङ्ग उत्पन्न भयो । भीड पोखरीको पानीमा बतासले पारेको हलचलजस्तै देखियो । काम गरेर लखतरान भएर थाकेका मान्छेहरु पनि नयाँ जाँगर बोकेजस्तो गरेर सलबलाए ।
दनुवार टोलमा छोरोलाई विद्यालय पठाउने चलन यही घरबाट सुरु भएको थियो । छोराहरुमा सात वर्षअघि मात्र पकनाले एस.एल.सी. पास ग¥यो । ऊ एस.एल.सी. पास भएपछि गाउँका दनुवारहरुले आपूmहरु प्नि केही शिक्षित भएजस्तो सम्झे । पकनाले एस.एल.सी. पास गरेको हल्ला ठूलो घटना घटेझैं टाढाटाढाका दनुवार बस्तीरित छोटो समयमै पैmलियो । त्यही बर्षदेखि साना—साना भन्ट्याङभुन्टुङदेखि यौवनवस्थामा टेकिसकेका तर विद्यालयको वातावरण नै नदेखेकाहरु प्नि कालोपाटी बोकेर दौडिन थाले । तर अरुले नपठाए पनि त्यही बर्षदेखि रबुवाले छोरीलाई स्कुल पठायो । टोलका धेरैजसो आफन्तहरुले रबुवाको खिसिट्युरी गरेर धेरै साँझहरुलाई गफमा उडाए । गाउँले आफन्तहरुका कुरा रबुवाले पट््रक्कै नसुनेको भनेचाहिं होइन । आप्mनै परिवारबाट पनि आफन्तका कुराहरु प्रशस्त सुन्यो । छोरीलाई किन पढाउँनुपर्छ ? ऊ तर्क गर्न त सक्दैनथ्यो । मात्र यति भन्थ्यो — ‘अचेलका मान्छेहरुले छोरा र छोरीलाई फरक गर्नु हुँदैन भन्छन् । मलाई पनि त्यो कुरा ठीकै लागेको छ ।’ यिनै कुराहरु गरेर ऊ बहसबाट पन्छिन्थ्यो । कुरा काट्नेहरुका धेरै कुरालाई रबुवा मौन रहेरै उडाइदिन्थ्यो । बिस्तारै—बिस्तारै आफन्तहरु पनि आपैंm थाक्दै जान थाले ।
रामवतीले पोहोर सात कक्षा पास गरी । पोहोरमात्र त्यो एउटा सानो घटना देखेपछि रबुवा छोरीलाई स्कुल पठाउन हच्कियो ।
कटारीमा शुक्रवार ठूलो बजार लाग्छ । सानो बजार भएर पनि कटारी अरु दिन पनि प्रायः व्यस्त नै हुने गर्छ । सगरमाथाको द्वार मानिने कटारीमा सिन्धुली, खोटाङ्ग, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बुलगायतका जिल्लाबाट सामान ओसारपसार गर्ने मानिसहरु त आउने नै गर्छन्, स्थानीय मानिसहरुले पनि मौसमअनुसारका फलफुलहरु बेचेर यही बजारबाट आप्mनो जीविका चलाउँछन् ।
शुक्रवारको दिन । विद्यालय चाँडै बिदा हुने दिन थियो । फुल्कना रबुवाले बिक्रीका लागि बजारमा लिएर आएको तरकारी चाँडै विक्री भयो । फुल्कना दनुवारले आज रबुवासँग एउटा प्रस्ताव ग¥यो — “आज हामीले ल्याएको सामान राम्रो मूल्यमा विक्री भएको छ, होटेलमा गएर केही चिया—नास्ता गरुँ ।”
रबुवाले तुरुन्तै फुल्कनाको प्रस्तावमा सहमति जनायो । आज रबुवाको चीजबीजले पनि राम्रै मूल्य पाएको थियो ।
रबुवा एक्कासि झस्क्यो र फुल्कनातिर हे¥यो । फुल्कना मधेसीसँग कुरा गर्न व्यस्त थियो । उसलाई अलिकति ढुक्क महसुु भयो । फुल्कनाले आप्mनी छोरी रामवतीलाई यसरी नचिनेको केटासँग हात समातेर हिंडेको देखेको भए आज टोलमा सबैले उसलाई गाली गर्थे । एक मनले रामलाई पनि सा¥है रिस उठ्यो । यत्रो बजारमा चिनेकाहरु कैयौंले उसलाई यसरी हिंडेको देखे होलान् । आज रबुवाले आप्mनो इज्जतमा ठूलो चोट परेको महसुस ग¥यो ।
रबुवाले फुल्कनाको आँखा छलेर अगाडिको बाटोतिर त्रासमिश्रित आँखाले हे¥यो । उसकी छोरी रामवती अर्को केटासँग हात समातेर पल्लो बाटोको कुइनेटोबाट अघि बढ्दै रबुवाको आँखाबाट ओझेल भई । यो घटना फुल्कनाले नदेखेकोमा रबुवाले आप्mनो मनलाई अलिकति शान्त बनायो । नत्र आज टोलमा बसिसक्नु हुँदैनथ्यो । रबुवाले छोरीलाई पढाउन स्कुल पठाएकोमा फुल्कना पनि सहमत थिएन ।
मन नहुँदानहुँदै पनि रबुवाले मगाएका कुरा खायो । फुल्कनाले मीठो मानेर मिठाइहरु थपेर खायो । उनीहरुले होटलमा पसेर कहिल्यै पनि यसरी खानेकुरा खाएका थिएनन् । अरुले खाएको मात्र देखेका थिए ।
“रबुवा, तँ बिरामी भइस् कि के हो ? त्यतिका खाने मान्छे आज त केही खाइनस् ।” रबुवा भित्रको चिन्ताप्रति उसले भेउ पाउनै सकेन र उसको अस्वाभिक अवस्थाप्रति जिज्ञासा पोख्यो ।
“अलिकति टाउको दुखिराखेको छ ।” रबुवाले परिस्थितिको गोप्यता कायम राख्ने प्रयत्न ग¥यो । घरफर्केपछि रबुवाले एकाएक पुराना अडानहरुमा परिवर्तन ल्याउन थाल्यो । परीक्षा आइहाल्न लागेको बेलामा छोरीलाई विद्यालय छोडाउने निर्णय ग¥यो ।
“रामवतीको तुरुन्त विवाह गर्नुपर्छ ।” घर आउनेवित्तिकै उसले स्वास्नीलाई भनेको थियो । “घरमा अन्नको नाममा एउटा दानो छैन, केले बिहा गर्ने ?” स्वास्नीले उसलाई सचेत बनाएकी थिई ।
धेरै पढाउनुपर्छ, बिहा गर्न हतारिनु हुँदैन भन्ने मान्छेले किन अचेल यस्तो कुरा गर्छ ? उसकी स्वास्नीको धारणा पनि छोरीलाई नपढाउने नै थियो । रबुवाको हिजोआजको भनाइप्रति उसकी स्वास्नी खुसी देखिएकी थिई । त्यही दिनदेखि छोरीको विवाहका लागि आप्mनो माइत कमलाखोंचतिर खबर पठाएकी थिई उसले । विवाह कसरी गर्ने ? केले गर्ने ? यो प्रश्नको उत्तर भने उनीहरुसँग कतै पनि थिएन ।
रामवतीले पढ्न जान्छु भनेर अलिक दिनसम्म अड्डी लिए पनि आखिर उसको केही जोर चलेन । रबुवाले खरो शैलीमा निर्णय सुनाएकै दिनदेखि ऊ विद्यालय जान छाडी ।
एक दिन गाई चराउन जाँदा जामुनले रामवतीलाई भनेको थियो — “मलाई अचेल तिमीलाई नदेख्दा कस्तो—कस्तो लाग्छ ।” जामुनको कुरा सुनेर रामवतीले केही बुझेजस्तो गरेर उसलाई हेरी । लाजले जामुन अर्कातिर फर्कियो ।
दुई दिनदेखि काम छ भनेर घर बाहिर गएको रबुवाले एक साँझ रामवतीका लागि सिथौलीबाट केटो खोजेर आएको र दुई महिनापछि विवाह गर्ने कुरा छ भन्ने खबर लिएर आयो । “बिहे त गर्छौ तर के ले गर्छौ ।” स्वास्नीको कुराले रबुवा गम्भीर भयो ।
“रामवती, तैंले बिहा गर्नुपर्ने केटो त्यही हो ।” टाढाबाटै आमाले रामवतीलाई देखाई । हरिया पातहरु झरेर शिरपाखो जङ्गल उजाड भइसकेको थियो ।
“अब केही दिनपछि यो गफ छोडेर जाँदैछु रे म । नयाँ गफ, नयाँ ठाउँ कस्तो होला त्यो । त्यहाँ शिखरपाखो छैन । त्यहाँ तीनतलेको बगर छैन । त्यहाँ जामुन छैन । अब त मेरो बिहा हुन पनि धेरै दिन बाँकी छैन । तर बाबुले मेरो विवाह कसरी गर्छन् । घरमा त केही छैन । सबैको ऋण छ ।” केही दिनदेखि प्रत्येक दिन बिहानै उठेर सोचेजस्तै आज पनि त्यही कुरा सोची । रामवतीको मन फेरि कटक्क काटियो ।
“अब तिमी र म सँगसगै गाईवस्तु चराउने दिन पनि सकिएजस्तो छ । मेरो सिधौलीको केटासँग विवाह हुने कुरा छ ।” रामवतीले जामुनलाई आज पहिलो पटक आप्mनो बारेमा सुनाई । “किन तिम्रो मुख त अँध्यारो भयो ?” रामवतीले जामुनलाई अलिक बुभ्mन खोजी र अलिकति कोट्ययाएर सोधी ।
जामुन अँध्यारो मुख लगाएर खिसिक्क हाँस्यो । “गाईवस्तु चाँडै बाँधेर तिमी जसरी भए पनि मेरो बिहामा आऊ है”, रामवतीले विशेष निम्ता गरी । “मेरो कुराले आज जामुनको अनुहार अँध्यारो भयो ।” राति घरको काम सिध्याएपछि रामवतीले खुसुक्क आमासँग भनी ।
“लाटी ! उसले तँलाई मन पराएको कुरा बुझिस् ।” आमाको कुराले रामवती लजाई ।
आज दिउँसो सिर्थौलीबाट एक जना मानिस आएर रबुवालाई भेटेर गयो । छोरीको बिहाले चिन्तित भइरहेको ऊ आज दिनभर पहेंले लागेको खसीझैं झोक्राई मात्र रह््यो । घरको काम पनि गर्न सकेन । “बिहा मात्रै हो र ! केटालाई सामान पनि दिनुपर्छ रे !” बेलुका साँझमा आँगनको खटियामा बसेका आफन्तहरुका अगाडि रबुवाले लामो सुस्केरा हाल्दै भन्यो ।
“तिमीले के भन्यौ त !” उसको नयाँ कुराले स्वास्नी पनि छक्क परी । “चालिस—पचास जना मानिसलाई ख्वाउनुपर्छ । त्यो तँ कसरी गर्लास् । त्यसमाथि सामान दिने कुरा कसरी हुन्छ ?” फुल्कनाले रबुवाको भनाइहरुलाई साथ दियो ।
“घरमा खान छैन, कसरी यस्तो बिहा गर्ने कुरा हुन्छ ?” रामवती बाबुको कानमा फुसफुसाई । रामवतीको भनाइले रबुवाले ठूलो आड—भरोसा पाएको महसुस ग¥यो ।
“भन्न आउने मान्छेलाई के समाचार पठायौ त ?” रबुवाको स्वास्नीले अताल्लिएर सोधी ।
“म सक्दिन भनेको छु , उसले उनीहरुसँग कुरा मिलाउनु भनेको छ ।” रबुवाले स्वास्नीतिर फर्केर उत्तर दियो ।
रामवतीले बाँसको भाटाले बारेको कटेरोमाथिको कोठाको प्वालबाट च्याएर पश्चिमतर्फ हेरी — तावा खोलातिरको पाखोलाई ओझेल पारेर घाम कटारीतिरको पाखोमा बसाई सरिसकेको थियो । पश्चिमतिरको सिमलको बूढो रुखमा चराहरु आउँदै कराउँदै फेरि जङ्गलतिर गइरहेका थिए । आजै मात्र एकझर पानी परेर रहेपछि हिजोअस्ती मात्रै जोतेको बारीबाट छिचिमिराहरु उडिरहेका थिए । भिजेको जमिनबाट तातो बाफसँगै माटोको गन्ध आइरहेको थियो । उसले एक पटक शिखर पाखारित हेरी—किन किन आज त्यो जङ्गलको उसलाई असाध्य माया लाग्यो ।
“खुसी देखिन्छेस् रे रामवती ।” पल्टू काकाकी छोरी दैया उसलाई जिस्क्याउँदै पल्लाघरतिर पसी । काकाहरु विजुली (डाडा बोकेर गाउनेसँग सहयोग उठाउन प्रथा) माग्दै गाउँ घुम्न थाले । कति खुसी छन् गाउँका मान्छेहरु । अरु खुसी भएको देख्दा उसको गरिबी पीड नराम्रोसँग कुँडियो ।
“हाम्रो पालामा त केटो तरबार लिएर आउँथ्यो । अहिले त त्यस्तो चलन नै हरायो ।” पल्लाघरे ठूलो बुबाकी छोरी फुलन दिदीले आँगनमा अति बेफुर्सदजस्तो देखिंदै ठूलो स्वरमा असन्तुष्टि ओकलिन् । धुवाँको मुस्लो उठेझैं शिखरपाखाबाट भुइँ कुहिरोले आकाश ताकिरहेको थियो । पहेंलो भएर भर्खरै पोखिएको घामलाई भुइँकुहिरोले एकैछिनमा छोप्यो । ऊ सूर्यलाई हेर्र्थी । भुइँकुहिरोले कटारी डाँडालाई छोडेपछि सूर्य तलै झरेको देखियो । सूर्यको डुब्ने क्रमसँगै उसको मनभित्र कौतूहलताको आँधी बेजोडले चल्न थाल्यो ।
कोठाबाट आँगनतिर च्याएर हेरी जामनु काठको बारमा अडेस लागिरहेको छ । सायद उसले उसैलाई खोजीरहेको होला । विचरो ! बाबुआमा ऊ सानै छँदा मरे रे । अर्काको घरघरमा चहारेर हिंड्छ जामुनलाई मनमनै उसले माया गरी ।
कटारीतिरबाट बाजा बजेको आवाजजस्तो फेरि सुनियो । उनीहरु बाजा बजाएर आउँदै छन् भन्ने उसले सुनेकी हो । त्यो बाजाले उसले आफ्नो गरिबीलाई गिज्याएको महशुस गरी उसले ।
“जन्तीहरु बगरमा आएर बसीसकेका छन्, अब साँझ पर्ने वित्तिकै आइपुग्छन् ।” रबुवाको ठूलो स्वरले भीडमा एउटा हलचल ल्यायो । भाटाले बारेको चेपबाट रामवतीले च्याएर तल आँगनतिर हेरी—दुई जना मान्छेहरु आएर बुबासँग कुरा गरिरहेका छन् । उनीहरु केटापक्षका मान्छेहरु हुुनपर्छ—उसले लख काटी ।
उनीहरु फर्केपछि रबुवाले बाहुलाले आँसु पुछ्दै गरेको देखी रामवतीले । किन यस्तो भयो, रामवती जिल्ल परी । फुल्कना र बगुवालाई छेउमा बोलाएर रबुवाले केही कुरा ग¥यो । “तिनीहरुले हामीलाई धोका दिए ।” फुल्कना जन्तीहरुतिर बसेको ठाउँतिर फर्केर चिच्यायो । बगुवाले पनि ठूलो स्वर निकालेर बगरतिर फर्केर गाली ग¥यो ।
“बेहुलालाई सम्पत्ति पनि चाहियो रे” रामवतीलाई आमाले आएर सुनाई र भनी — “नत्र उनीहरु फर्किने रे ।” आँगनमा जम्मा भएका मान्छेहरु नयाँ कुराले अचम्मित भए । कोही रिसाउँदै गरेका देखिन्थे । कोही खासखुस खासखुस गर्दै थिए । “फर्किन भन्नुस् म त्यो केटासँग विवाह गर्दिन” रामवती फटाफट भुइँमा झरी रबुवालाई भनी ।
“समाजले हामीलाई के भन्छ ।” रबुवाले रामवतीलाई सम्झाउन खोज्यो । “समाजले हामी गरिब भएको बुझेको छैन र ?” रामवतीले फुल्कना र रबुवातिर हेर्दै सहमति खोजी । “हो हो, उनीहरु फर्कुन् ।” रामवतीको कुरामा बगुवाले सहमति जनायो । गाउँका युवाहरु पकनाको पछिल्तिर लागेर कराए — “हो ! हो ! रामवतीको कुरा ठीक हो ।”
समाजको समान धारणा देखेर रबुवा पनि मनमनै खुसी भयो । जन्तीहरु फर्किउन भन्ने कुरा सुनाइदिन पकनालाई अ¥हायो । पकनाको पछिल्तिर लागेर युवाहरुको एउटा जत्था जन्तीहरु आएर बसेको ठाउँ बगरतिर दौडियो ।
पकनाको जत्था पुगेपछि जन्तीसँग निकै झगडा भयो । जन्तीभन्दा गाउँका मान्छे बढी भए । तर पकनाले उनीहरुलाई गाउँका मान्छेहरुबाट कुटपिट हुन दिएन । अन्ततः लज्जित भएर जन्ती फर्के ।
जामुनसँग रामवतीले आँपको फेदमा केही कुरा गरी । “ तिम्रो इच्छा भए म खुसी छु ।” जामुनले सानो स्वरले जवाफ दियो ।” “यही ठाउँमा म आजै जामुनसँग विहा गर्छु ।” रामवतीले उसका आमाबाबुलाई सुनाई ।
“कोही नभएको एउटा टुहुरो मान्छेसँग ।” रबुवाले शंका व्यक्त ग¥यो । “उसको कोही नभएकाले के फरक पर्छ र ।” उसले अविचलित निर्णय सुनाई । रबुवाले स्वास्नीसँग सहमतिको संकेत माग्दै उसको अनुहारतिर हे¥यो । उसकी स्वास्नी पनि रबुवाको मुखतिर फर्केर हाँसी ।
“टुहुरो भएर के भो र ! मान्छे बुभ्mझकी छ ।” फुल्कनाले सही थप्यो । नयाँ खुलदुलीहरुकै बीचमा विवाहको कार्यक्रम अघि बढ्यो ।
वनिता, बर्ष –९, पूर्णाङ्क –२९, २०६४ वैशाख—असार
‘किन आएन राति यति अबेर भइसक्यो ।’ झ्यालबाट बाहिरको अँध्यारो संसारतिर हेरेपछि कश्यपको मनभित्र शंकाको सानो पर्खाल उठ्यो ।
मनको अन्तरमा उसले उसको जीवनमा आनन्दरामको उपस्थितिबाट मुक्ति खोजिरहेको कुरा सोच्यो । फेरि सोच्यो– अब ऊ मेरो कोठामा नफर्किए पनि हुन्थ्यो ।
आनन्दराम काठमाडाँै आएको दुई महिना पुगिसकेको थियो । उसको बाल्यकाल सम्पन्नतामा बित्यो । उसले सानोमा कुनै दुःखको अनुभव गर्नु परेन । बाबुको एक्लो छोरो । सुख–सयलको जीवनका कारण पछि दुर्दशामा बदलियो । जाँड, रक्सी, जुवा र तासको कुलतमा लागेकाहरूको संगतले सानैमा गाँज्यो । पढ्ने र लेख्ने कार्य उसको जीवनकोे तालिकाबाट पहिले नै हराइसकेको थियो ।
आनन्दरामलाई धेरै मान्छेले मन पराउँदैनथे । त्यसैले काठमाडौँमा ऊ अरूको कोठामा पुगिहाले पनि बस्दैनथ्यो । ऊ कसैले मन पराइहाल्नुपर्ने मान्छे पनि थिएन । अरूलाई खिसिट्यूरी गरेर कुरा गथ्र्यो । अरूको कुरा सुन्नुभन्दा आफ्नो कुरा बढी भन्थ्यो । लिएको पैसा तिर्दैनथ्यो । गरिबीको खिल्ली उडाउँथ्यो । आफ्ना बाबुबाजेको पालाको सम्पतिको गफ लडाएर समय नास गथ्र्यो । चिन्ने जान्ने अधिंकाश मानिसको आँखामा ऊ साह«ै अप्रिय मान्छेका रुपमा परिचित थियो ।
कश्यपका लागि पनि आनन्दरामको जरुरी थिएन । उसको अपाङ्गताको आनन्दराम ठाउँ–कुठाउँ खिल्ली उडाउँथ्यो । सानैदेखिको साथी हो ऊ । गाउँमा सँगसँगै हुर्केर बढेका । गाउँमा कश्यप गरिबको छोरो थियो । सानैमा घाँस काट्न जाँदा ऊ पहिरोबाट लड्यो । खुट्टा भाँचिएको रहेछ । घरको अस्पताल पु¥याउने सामथ्र्य थिएन । धेरै महिनासम्म ओछ्यान परेपछि कश्यप अपाङ्ग भएर उठ्यो । धेरैपछि गाउँका आफन्तहरूसँग लागेर काठमाडौँ आयो । गाउँका सबै मान्छेहरू गलैँचा कारखानामा काम गर्न थालेपछि उसको अपाङ्ग शरीर त्यहाँ बिक्री भएन ।
कश्यपले पुरानो बसपार्कमा बेलुका नगर प्रहरीहरूसँग लुकामारी खेल्दै फुटपाथे व्यापारबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न थालेको पनि पाँच वर्ष भइसक्यो । काम कष्टकर भए पनि गाउँको जस्तो भरे के खाउँ भनेर पिरोलिनु पर्ने अवस्था चाहिँ भएन । सुरुका केही महिना भने दुःख र सास्तीको कुनै सिमाना रहेन । व्यापार हुने ठाउँ थाहा नहुने, कुन सामानको बजार छ भन्ने ज्ञान नहुने, नगर प्रहरीहरूले कसरी दुःख दिन्छन् भन्ने थाहा नहुने आदि कारणले सुरुका दिनहरू कश्यपका लागि अत्यन्तै त्रासद सावित भए ।
विस्तारै विस्तारै व्यापारका प्वालहरू उसले थाहा पाउँदै गयो । फुटपाथ व्यापारी भए पनि कश्यप अचेल राम्रैसँग जीविकोपार्जन गर्ने ठाउँसम्म आइपुग्यो ।
दुई महिनाअघि साँझमा ग्रँहक कुर्दाकुर्दै पुरानो बसपार्कमा कश्यपले आनन्दरामलाई देख्यो । उसले आनन्दरामलाई नभटेको धेरै वर्ष भइसकेको थियो । अधिकांश मानिसहरू गाउँबाट सहर आएपछि लगाउने कुराहरूमा आफूलाई केही परिवर्तन गर्छन् । कश्यपले भेट्दा आनन्दराम हिजोको गाउँको आनन्दरामभन्दा सबै अर्थमा कमजोर थियो । एक मनले त आनन्दराम होइन कि जस्तो लाग्यो उसलाई । फुच्चे आनन्दरामको खाइलाग्दो शरीरको केही भाग मात्र बाँकी थियो । त्यसबेलाको रहरलाग्दो उसको लवाई भने कतै पनि बाँकी थिएन । मैलो र टालेको पाइन्ट, थेग्ला–थेग्ला भएर कालो दाग लागेको हाप सेतो सर्टमा ऊ धेरै दयनीय मान्छे जस्तो देखिन्थ्यो । भीडबाट छलिने बेलामा उसले आनन्दरामलाई कराएर बोलायो ।
काठमाडौँ सहरमा अनाथ जस्तो भएर हिँडिरहेको बेलामा कसैको आवाजले आनन्दराम एक्कासी झस्किएर पछिल्तिर हे¥यो । हाँसिरहेको कश्यपलाई देखेपछि आशा नगरेको शिकार भेटेको शिकारीले झैँ आनन्दरामले कश्यपलाई अँगालो हाल्यो ।
“तँ, यहाँ छस्” आनन्दरामले आश्चर्य मान्यो ।
‘बाँचिरहे त धेरै थोक देख्न पाइन्छ । गाउँमा यसले हामीसँग बोल्दा पनि जात जान्छ कि झंँै गथ्र्यो । सहरमा यो कति निरिह जस्तो देखिन्छ ।’ आनन्दरामलाई भेट्ने बित्तिकै कश्यप आफ्नो अतीततिर फर्कियो ।
“तँलाई भेट्न भनेर म बौद्धका धेरै गलैँचा कारखानातिर पुगेँ । गाउँका दुई चार जनालाई भेट्टाएँ पनि । तर कसैले पनि तेरो बारेमा बताएनन् ।’ आनन्दरामले उसलाई भेटेकोमा ठूलो उपलब्धि भएको ठान्यो ।
“त कहिले आइस् त काठमाण्डू” आनन्दरामले नैराश्यतालाई नबुझेझैँ गरी उसले सोध्यो ।
“म आएको एक हप्ता भइसक्यो । तँलाई भेट्दा मलाई देउता भेटेजस्तै लाग्यो ।’ आनन्दरामले रुन्चे स्वरमा भन्यो ।
गाउँबाट सहर आएका मान्छेहरूसँग काठमाडौँले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरामा कश्यप राम्रैसँग जानकार थियो ।
“हिजो स्वर्गीय आनन्दमा बसेको मान्छेको यस्तो हाल ! हिजो उसको सान नै बेग्लै थियो । आज ऊ यो हालतमा आइपुग्छ भनेर कसले कल्पना गर्न सक्थ्यो । हामी जस्ता गरिब मान्छेहरूले उनीहरूसँगको नियमित सानिध्यता गर्न पनि सजिलो थिएन ।” कश्यप आनन्दरामको अतीततिर फर्कियो ।
“एक हप्तासम्म कताकता घुमिस् त ! ” आनन्दरामले काठमाडौँमा पाएको कष्टलाई कश्यपले खोतल्न खोज्यो ।
“अहिले भनेर भ्याइन्न । पछि कुरा गरौँला ।” आनन्दरामले कुरालाई अघि बढाउन चाहेन ।
आनन्दरामले आफूलाई अब पछ्याउँदै छ भन्ने कुरा बुझेपछि कश्ययको मनभित्र द्वन्द्वको एउटा सानो तरङ्ग उठ्यो । ‘यसलाई लिएर कोठा जाउँ, यसको अव्यावहारिक र उच्छृङ्खल जीवनशैलीका कारण आफैँलाई अफ्ठ्यारो हुन के बेर ? यसलाई कोठा नलैजान पनि कसरी । गाउँबाट आएको मान्छे । यसको यहाँ कोही छैन । फेरि कति दिन बस्ने हो, त्यो पनि ठेगान छैन ।’ यिनै द्वन्द्वहरूमा पर्दापर्दै त्यस दिन कश्यपले आनन्दरामलाई आफ्नो डेरा बागबजार लिएर गयो ।
निरस र एक्लो जीवन बिताइरहेको कश्ययका लागि आनन्दरामको उपस्थिति सुरुसुृरुमा रमाइलै लाग्यो । आफ्नो गाउँ, आफूले खेल्ने गरेका वनडाँडाहरू, चौरहरू, साथीहरूको चर्चा गरेर उनीहरू राति अबेरसम्म कुराकानी गरिरहन्थे ।
“तँ पनि केही काम गर । यसरी रक्सी पिएर हिँडेर मात्रै कसरी जीवन चल्छ । काम गरेर खान सिक ?” केही दिनदेखि त्यतिकै घुमेर रक्सी खाएर घर आउन थालेपछि कश्यपले आनन्दरामलाई भन्यो ।
“के म यहाँ बसेको तँलाई अफ्ठ्यारो लागेको छ । मैले खाएको हिसाब गरेर राख न ? म तिरीहाल्छु नि ?” आनन्दरामले रक्सीको धङधङीसँगै उत्तर फर्काएको थियो ।
केही दिनपछिको कुरा हो । एक दिन दिउँसो आनन्दराम केही साथीहरू लिएर कोठा आयो । नेपाल बन्दको दिन भएकोले सडकमा पसल थाप्न जाने कुनै योजना थिएन । आनन्दराम साथीहरू लिएर कोठामा आइपुग्दा कश्यप कोठामा सुतिरहेको थियो । यी मानिसहरूले चोकबजारमा हुल्लडबाज गरेर हिँडेको सोझासाझा मानिसहरूलाई कुटपिट गरेको कश्यपले धेरैपटक देखेको थियो । यी मान्छेहरू लिएर आएपछि कश्यप आनन्दरामको व्यवहारबाट सशंकित र आतङ्कित भयो । अस्ति माथिल्लो तलामा बस्ने मानिसलाई यही समूहले खसी बजारमा हाक्काहाक्की लुट्यो, प्रहरीले पनि केही गर्न सकेन । अर्थात् सकेर पनि गरेन । चुनावमा निर्वाचित हुने मानिसहरूले होइन, यो टोलको शासन यिनीहरूले नै चलाउँछन् । चुनावमा निर्वाचित हुने मान्छेहरूले यिनीहरूलाई साथ लिएर मात्र आफ्नो योजना पूरा गर्छन् । यिनीहरूको गतिविधि देख्दा चुनावबाट जितेका प्रतिनिधिहरू र पुलिसहरूसँग पनि कश्यपलाई भित्रैदेखि घृणा छ । साँझमा पसलको पोको बोकेर फर्कँदा कतिपल्ट यिनीहरूले आपूmलाई घुरेर हेरिरहेको देख्दा ऊ मनमनै आतङ्कित बन्थ्यो ।
यी सबैजना आज उसकै कोठामा । ऊ आज बेसरी आँत्तियो । आज आनन्दरामसँग उसलाई कहिल्यै नउठेको रिस उठ्यो ।
हेर्दाहेर्दै एउटा कुण्डलेले ज्याकेटबाट एउटा सुई र केही सिसीहरू झिक्यो ।
अर्को कुण्डलेले आनन्दरामको पाखुरामा सुई हान्यो ।
आनन्दरामले पनि झ्याप्लेलाई अर्को सुई हानिदियो । यसो गर्दागर्दै सबैले सुई लगाए ।
एउटा कुण्डलेले एउटा सुई झिकेर तँ पनि लगा भन्दै थियो । ऊ म लगाउँदिन भन्दै बाहिर भाग्यो । ऊ भाग्दा आनन्दराम मरिमरि हाँस्यो ।
ऊ कोठामा फर्कँदा सबै निस्किसकेका थिए । आनन्दराम खाटमा पल्टिरहेको थियो । उसलाई देख्नेबित्तिकै आनन्दराम फेरि हाँस्यो । उसको हाँसोसँग कश्यपलार्ई आज धेरै रिस उठ्यो । उसलाई केही भन्न पनि ऊ डरायो । उसको सम्बन्ध यो टोलका ठूलाठूला गुण्डाहरूसँग भएको कुरा पनि आज मात्रै उसले थाहा पायो ।
आज नेपाल बन्दको दिन । ऊ पसल बोकेर बसपार्क र सडकतिर जानु नपर्ने दिन । उसलाई आनन्दरामको अघिल्तिर बस्न पनि घिन लाग्यो ।
काम नभए पनि कश्यप एक्लै पुरानो बसपार्कतिर निस्कियो ।
कश्यप घुमेर कोठा फर्कँदा साँझ झमक्कै परिसकेको थियो । त्यतिबेला आनन्दराम सुतेर भर्खरै ब्युँझेको जस्तो देखिन्थ्यो ।
‘त्यस्तो संगत छोड्, मैले जसरी काम गरेर खा त ! जिन्दगी कति सुखी जस्तो लाग्छ ।’ खाना खाइसकेर सुत्ने बेलामा कश्यपले आनन्दरामसँग त्रासमिश्रित स्वरले सुस्तरी भन्यो ।
‘तँ लङ्गडालाई कुवा पनि ठूलो समुद्रजस्तो लाग्दो हो’ कश्यपको कुरालाई आनन्दरामले हावामा उडाइदियो ।
‘सिरानमा राखेको रुपैयाँ पनि सबै हराएछ ।’ बिहानै उठेर कश्यपले खुइय ग¥यो र लामो श्वास फे¥यो । रिसले ऊ आनन्दरामतिर फर्कियो । आनन्दराम भित्तातिर फर्केर मस्त निदाइरहेको छ । उसले सोच्यो– ‘आनन्दराम ननिदाएको पनि हुनसक्छ ।’
आनन्दराम निदाएको भ्रममा कश्यपले धेरैपटक सिरानमा रुपैयाँहरू राखेको थियो । धेरै समयदेखि रुपैयाँहरू राख्यो मात्र झिकेको थिएन । उसले मनमनै हिसाब गरेको थियो– ‘चालीस हजारजति हुनुपर्छ ।’
‘साले डाकाले सबै सिध्याएछ ।’ सिरानीको सानो प्वालबाट रुवा भित्रभित्र परैसम्म कश्यपले हात घुसा¥यो ।
‘अहँ छैन कतै छैन ।’ फेरि बर्बरायो ।
आनन्दरामसँग झगडा गरौँ, त्यो कश्यपको बुताको कुरै थिएन । टोलका सबै गुण्डाहरूसँग उसको सम्बन्ध छ । अति सामान्य मान्छे ऊ । आनन्दरामसँग कसरी झगडा गर्न सक्छ ? कश्यपभित्र आक्रोशको ज्वाला दन्के पनि आनन्दरामसँग उसले झगडा गर्ने कुरा सोच्नै सकेन ।
कश्यपको सपनाको संसार अमेरिकाको ट्वीनटावर भत्केभैmँ निमेषभरमै भत्कियो । उसले एकपटक आफ्ना सपनाहरू सोच्यो– ‘पहाड जाने, खेतबारी किन्ने, घर बनाउने, विवाह गर्ने यस्तै यस्तै सपनाहरू…’
ऊ भित्र भाउन्न भएर आयो । आँखा खोल्यो, सबैतिर अन्धकारजस्तो लाग्यो र ओछ्यानमा गएर एकछिन पल्टियो ।
आज दिनभर उसलाई काम गर्ने कुनै जाँगर चलेन । आनन्दरामले उठेर बोलायो । उसले पेट दुख्यो भनेर टा¥यो । उठेर खाना पनि पकाएन । आनन्दराम पनि एकछिनपछि भोकै एक वर्षअघि कश्यपले किनेको चश्मा लगाएर बाहिर निस्क्यो । कसरी आनन्दरामबाट मुक्ति लिने भन्दै ओछ्यानमा पल्टेर कश्यपले दिनभरि सोचिरह्यो ।
‘आजको रात कतै बास बस्यो होला ।’ राति सुत्ने बेलामा कश्यपले फेरि एकपटक आनन्दानुभूतिको महसुस ग¥यो । राति एक दुई बजे बाहिर कसैको पदचाप सुनिँदा पनि उसको मनभित्र चिसो पस्थ्यो ।
मिर्मिरे उज्यालो भुइँमा खसेको मात्र के थियो, बाहिर एउटा सानो हल्ला चल्यो । कश्यप त्यो हल्लाले ब्युँझ्यो ।
‘पुरानो बसपार्कमा एउटा केटाको लास लडिरहेको छ’ यो आवाज तरकारी बेच्न आउने हाकुचाको जस्तो थियो ।
कश्यप चाँडोचाँडो ओछ्यानबाट उठ्यो । उसले राति आनन्दराम नआउनु र हाकुचाको हल्लाका बीचको सम्बन्ध खोज्यो ।
‘कतै आनन्दराम त होइन ?’ कश्यपले आफ्नै मनसँग फेरि प्रश्न ग¥यो ।
उसले डङ्रङ्ग चिसो सिमेन्टको भुइँमा पसारिएको आनन्दरामको लास देख्यो । मरिसकेपछि पनि खाइलाग्दा देखिने उसका बलिष्ठ हातका पाखुराहरू देख्दा उसको मनको अन्तरमा कतै सानो लोभ पलायो ।
लासलाई धेरै मान्छेहरूले घेरिरहेका थिए ।
‘ग्याङफाइटमा मारिएको होला’ भीडमा कोही भनिरहेका थिए ।
‘होइन रक्सीले मरेको होला’ अर्काले थप्यो ।
‘लागु औषधिको दुव्र्यसनी हो’ फेरि कोही बोल्यो ।
‘राति चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर म¥यो होला’ कसैले दया देखायो ।
‘राति मान्छे कुटिएको आवाज सुनिएको थियो’ नजिकैको होटलवालाले भीडलाई सुनायो ।
‘शरीरभरि डामैडाम छन्’ भीडका धेरै मान्छेहरूले राय राखे ।
आनन्दरामलाई सबैभन्दा बढी चिन्ने कश्यप भने मौन उभिरहेको थियो ।
‘यो यस ठाउँको लागु औषधिको ठूलो दुव्र्यसनी हो । कसैको कुटपिटद्वारा मारिएको होइन ।’ एउटा प्रहरीले हतारहतार निर्णय सुनायो ।
‘दुव्र्यसनी भए पनि मारिएको चाहिँ कुटपिटले नै हो ।’ भीडमा एउटा युवा करायो ।
जे भए पनि आज राति आनन्दराम मरेछ । जसका बारेमा विभिन्न शंकाउपशंकाहरू भीडमा चलिरहेका छन् ।
साँझमा आर्यघाटबाट फर्केपछि कश्यपले आपूm सुख कि दुःख ? कस्तो महसुस गरिरहेको छ, आपैmँसँग एकपटक फेरि प्रश्न ग¥यो ।
बगर, वर्ष २५, पूर्णाङ्क ७६, २०६३, असोज–मंसिर
आज बिहानैदेखि माइलीको मन बेचैन भइरह्यो । सपना देख्दा पनि नपत्याउने जस्तो घटना उसल आज आप्mनै आँखाले देखी । अभैm सोची कतै यो घटना सपना त होइन ? आपैंmलाई एकपटक फेरी छामी । होइन बिपनै हो । कोठाभरि बुट जुत्ताका पाइलाहरु हेरेर विपनै भएको ठहर गरी । आँगनमा राखेको कोदालो बोकेर गएका सैनिकहरुले लासलाई त्यही खोल्सामा गाडे र उनीहरु कोदालोलाई त्यही बाटोमा फालिदीएर हिडे । कोदालोलाई उठाएर घर ल्याउन पनि उसको मनले मानेन । एक मनले माइलीलाई त्यो कोदालोलाई त्यहीबाट तल खोल्सातिर फालिदिन मन लाग्यो । यो ठाउँमा अब कसरी दिन र रात बिताउने भन्ने चिन्ताले उसको मन नराम्ररी चर्कियो । बिहानै मारिएको मान्छेको अनुहार उसको आँखामा झल्झली आइरह्यो । ‘कहाँको मान्छे होला ऊ ?’ माइलीलाई जाडोमा कामीरहेको त्यही अनाथको सम्झाना आयो । कति निरुपाय र असहाय मान्छे थियो ऊ ।
‘माइली नानी ! आज बिहान एतातिर धेरै पटक बन्दुक पड्किएको हामीले सुनेका थियौं । तिमीले केही थाहा पायौ’ दूध लिएर आएका राउत दाइले दूधको भाँडो भुइँमा नबिसाउँदै सोधे ।
‘अहँ थाहा छैन ।’ उसले नजानिदा नजानिदै रुखो जबाफ फर्काई ।
दूध लिएर आउने मानिसहरुलाई पनि आज उसले एक छिन बसौं भनेर जोड गरिन । पहिले पहिले उनीहरुलाई चिया खाएर जान कर गर्थी ऊ । आज उसलाई उनीहरुसँग राम्ररी कुरा गर्न पनि चाहना भएन । हिंड्ने बेलामा सेनाहरुले भनेको कुरा उसको मानसपटलमा अझै पनि गुन्जिरहेको थियो ।
‘यो घटना कसैलाई भनिस भने तँलाई र तेरो छोरालाई पनि त्यही खाल्डोमा गाडिदिन्छौं ।’ त्यसबेला शाहीसेनाको एउटा मान्छे यसै गरी गर्जेको थियो । त्यसबेला माइलीको मन अत्तालिएर काँपेको थियो ।
कटारीबाट बिहानै हिडेको पहिलो बस सिरिसे भन्ज्याङ्गबाट उँभो लाग्यो । आज उसलाई चिया पठाउने जाँगर पनि छैन । बिहान ल्याएको दूध पनि नतताइकन उसले दराजको कुनामा थन्क्याई । पाँच वर्ष बितिसक्यो बेतिनी भन्ज्याङ्ग रुँगेको । जीवन भोगाइका पीडाहरुको अर्को महाभारत छ ऊसँग । बाँच्नलाई सबैभन्दा ठूलो सफलता मान्नेहरुका लागि ती पीडाहरु फगत पानीका फोकाहरु मात्र हुन् । माइली यस्तै कुराहरु सोच्छे र कहिले काहीं आप्mनो जीवनलाई मूल्यांकन गर्छे । नजिकैका गाउँ र वस्तिबाट गाई चराउन आउने आप्mनै उमेरका छोरी बुहारीहरुका सपनाहरुसँग दाँज्छे । हिउँदको तुषारोले खाएका महाभारत डाँडाका कलिला विरुवाहरुजस्तै छन् उसका रहरहरु । वर्षाको समयमा हलक्क हल्किन्छन् र हिउँदमा कठ्याँग्रिएर मर्छन् । लोग्नेको सम्झना हुन छाडेको पनि बर्षौं भइसक्यो । लोग्नेप्रति पनि तीब्र घृणा छ उसलाई । कटारी ओखलढुङ्गाको बाटो खन्ने काम पूरा नहुँदै ऊ सरुवा भएर अन्यत्र गयो । त्यसपछि माइलीसँग उसको कहिल्यै भेट भएन । केही वर्ष माइलीले सानो छोरो बोकेर धेरैतिर खोज्ने प्रयत्न गरी तर पछि थकित भएर बसी । आप्mनै लोग्नेको कारण माइलीको मनभित्र सैनिकहरुप्रति घृणाको एउटा घर बनेको थियो । आज विहानैको घटनापछि सैनिकहरुप्रति उसको घृणा झनै बढेर गयो ।
माइलीले धेरै पटक आप्mनो विगततिर फर्केर आगतका निम्ति सोची । जति सोचे पनि आज विहानको घटनापछि बेतिनीमा बाँकी दिनहरु काट्न गाह्रो भएको महशूस भयो उसलाई ।
बसबाट मानिसहरु ओर्लिए ।
‘चिया खाउँ न, चिया पाइँदैन’ धेरै जनाका यस्ता प्रश्नबाट माइली एकपटक झस्की । आपूmले चिया नपकाएर गल्ती गरेजस्तो बोध भयो उसलाई । चिया नपकाएर के खाने ? आपूmले गरिबीसँग जुधेका त्रासद दिनहरुतिर फर्की ऊ ।
आज चिया छैन भनेर ग्राहक फर्काउनुपर्दा माइलीले आपूm एकपटक फेरि पराजित भएको महसुस गरी । उसको भविष्यलाई खिसीट्यूरी गर्दै बस फेरि घुर्मीतिर लाग्यो ।
घामका झुल्काहरुले उत्तरतिरका पहाडका टाकुराहरु पहेंलै टोपी लगाएर उभिएजस्तै देखिए । बेतिनीमा मानिसहरुको भीड बिस्तारै बढ्न थाल्यो । पहाडबाट मधेसतिर झर्ने मानिसहरु त छँदै थिए, बिहानै पड्किएको बन्दुकको आवाज सुनेर वास्तविकता बुभ्mन आउनेहरु पनि प्रसस्तै थिए ।
‘ए माइली नानी ! आज याँ बन्दुक पड्किएको आवाज सुनियो, तिमीलाई केही थाहा छ ?’ पण्डित भवनाथ घँघरुको लौरो टेकेर छेउमै आएर उभिइरहेका थिए ।
‘बिहान सेनाहरुले मारेको मान्छेको अनुहारसँग पण्डित भवनाथको अनुहार कतै मिलेको त होइन’ माइलीले भवनाथको अनुहारतिर हेरी । मनमा फेरि चिसो पस्यो ।
पण्डित भवनाथको छेउमा दुब्लो जिउ भएकी निन्याउरी एउटी आइमाई पनि थिई । महाभारत डाँडाको ठण्डी र चिसोले निलो ओठ टोकेर उभिइरहेका तीनजना सानासाना बच्चाहरु उसको थोत्रो फरिया समाएर उभिइरहेका थिए । भवनाथले सोधेको प्रश्नको उत्तर पाउन ती महिलाका आँखा माइलीको अनुहारमा एकनासले अडिए ।
‘किन सोध्नुभयो पण्डित बाजे ?’ माइलीले आप्mनो शंकालाई पुष्टि गर्न खोजी । ‘मेरो जेठो छोरालाई शाही सेनाले पक्रेर हिजो राती यही बाटो ल्याएका थिए । बिहानै बन्दुक पड्किएको आवाजले हाम्रो मनमा चिसो पस्यो नानी !’ पण्डित भवनाथ ओठ कमाउँदै बोले ।
‘तीन पटक बन्दुक पड्किएको आवाज त मैले पनि सुकेको थिएँ ।’ राम्चे डाँडाबाट कटारीतिर हिँडेका दलबहादुर सुनुवारले पनि राय राखे । माइलीले तीनवटा साना बच्चाहरु तिर हेरी र एकपटक फर्केर आप्mनो छोरातिर हेरी ।
‘यो आइमाई त्यही आज बिहान मारिने मान्छेकी स्वास्नी रहिछ र यी सानासाना बच्चाबच्चीहरु उसैका छोराछोरी रहेछन् ।’ माइलीले आपूmभित्रको शंकालाई पुष्टि गरी ।
‘अब के भन्ने यिनीहरुलाई !’ माइलीका अघिल्तिर जटिलताको एउटा पहाड उभियो । मानिसहरुको भीड बिस्तारै बिस्तारै बढिरहेको थियो ।
बेतिनी भन्ज्याङ्गमा बिहानको घाम पहेंलै भएर पोखियो । विहान चलेको गोलीका बारेमा भीडमा संवाद र बहसले नयाँनयाँ तर्क र अनुमानहरु चल्दै थिए । यो घटनालाई कसरी व्यक्त गर्ने भन्ने कुराले माइलीको मनभित्र द्विविधाको एउटा हुण्डरी चल्यो ।
‘नभन्ने पनि कसरी ?’ अधिर भइरहेको आप्mनै मनसँग माइलीले फेरि तर्क गरी । सैनिक ड्रेस लगाएको अर्को एक हुल परको कुइनेटोबाट यतैतिर सोझियो । माइली फेरि आतंकित् हुन्थे । ‘मावोवादी सेनाहरु आए, संवादमा व्यवस्त एकजना मानिसले भीडलाई सचेत बनायो ।
‘कि शाही सेना हो ।’ अर्को एकजना मान्छेले फेरि त्रास पोख्यो ।
‘बिहान आउनेहरुको भन्दा बेग्लै ड्रेस छ ।’ माइलीले त्यो हुल शाही सेना नभएको लख काटी । र आप्mनो मनलाई अलिक ढुक्क बनाई ।
चौबाटोको कर्मथलो भएकोले माइली साही सेना र माओवादी सेना दुबैलाई राम्रैसँग जान्दथी । ऊ माओवादी सेनाका पनि कुरा र काममा एकदमै तालमेल भेटाएको अनुभव गर्दिनथी ।
‘हामी त बन्दुक बोकेर हिँड्यौ तँ किन बसिराखेकी ?’ सैनिक लश्करको अघिल्तिरबाट आएका दुइटी युवतीको कुराले ऊ झल्यास्स भई ।
‘अप्सरा र ठाइली ?’ माइलीले फेरि एकपटक गौर गरेर हेरी । ‘होइन तिमेरु पनि माओवादी’ माइलीले अचम्म मानेर आँखीभौँ उचाली ।
‘अब तँ मात्र बाँकी छेस्’ अप्सरा खित्खिताउँदै हाँसी ।
अप्सरा र ठाइली उसको सानैदेखि बनजङ्गल गर्दाका साथीहरु थिए । उनीहरुको जीवन दशा पनि माइलीको जस्तै थियो । अर्थात् उनीहरु पनि माइलीभैंm शाही सैनिकहरुको नाटकीय प्रेममा परेर धोका खाएकाहरु थिए । आज यो रुपमा उनीहरुलाई देख्दा माइली अचम्मित भई ।
भीडलाई पन्छाउँदै कमाण्डर जस्तो देखिने एकजना माओवादी सेना माइलीको अघिल्तिर आएर कडा स्वर निकालेर सोध्यो । ‘आज बिहान यतातिर गोली चल्यो, तपाईंलाई केही थाहा छ ?’
माइली एकछिन चुप लागि । ‘तपाईं किन चुप लाग्नुभयो ।’ ऊ अझ करायो । माइलीलाई यो घटना कसैलाई नभनेर लुकाउनु पनि अपराध गर्नु हो भन्ने बोध भइरहेको थियो । अगाडि आउने खतरालाई उसले झल्झली देखिरहेकी थिई । यति हुँदाहुँदै पनि उसले यो घटना सुनाउने आँट गरी ।
‘शाही सेनाका मान्छेहरुले बिहानै एउटा मान्छेलाई लिएर आए र यही ठाउँमा गोली हानेर मारे ।’ माइलीले खोल्सातिर औंलाले देखाउँदै भनी ।
‘मेरो छोरो त माओवादीनै होइन, कसरी मारे ?’ पण्डित भवनाथ चिच्याएर कराए । भवनाथसँगै आउने महिला यो कुरा सुन्ने बित्तिकै भुक्लुक्कै भुइँमा ढलिन ।
‘फेरि यहाँ लास प¥यो’ एकजना मान्छे करायो । ‘होइन ! होइन ! बेहोस भएकी हुन् ।’ अर्को मान्छेको आवाज सुनियो । माइली अत्तालिदै भित्र गई र एउटा गुन्द्री लिएर बाहिर आई । बेहोस भएर भुइमा लडेकी महिलालाई गुन्द्रीमा सारेर राखी । माओवादीका महिला छापामारहरुले माइलीलाई सहयोग गरे । माओवादीका छापामारहरुको ठूलो हिस्सा खोल्सातिर हिँड्यो ।
‘माओवादीहरु धेरै राम्रो कुरा गर्छन्, तर कुरा अनुसारको काम गरेका छैनन् ।’ माइलीले छापामारको प्रमुखसित बहस गर्ने शैलीमा कुरा सुरु गरी ।
‘भरखर भरखरै हिंडेका मानिसहरु छन् । धेरैले बुझिसकेका छैनन् । अलिअलि त त्यस्तो भइहाल्छ नि’ छापामार प्रमुखले कुरा बुझाउने तरिकाले भन्न खोज्यो ।
‘माउत्सेतुङ्ग भन्ने मान्छेका अनुसार माओवादीले कामै गरेका छैनन् भन्छनन् धेरै मान्छेहरु । उसले त जनताको चित्त नबुझाई केही पनि लिनु हुँदैन भन्थे रे !’ माइलीले तर्कको अर्को झटारो हानी । ‘हामीले के लुटेर खाएको छ देख्नुभा छ’ पछिल्तिर बसेको छापामार आक्रमक देखियो । ‘जनताले चित्त बुझाएर दिएका छैनन् ।’ माइलीले पनि कडा स्वर पारी ‘माइली दिदी अब झन तिमी यहाँ बस्न गाह्रो हुन्छ ।’ हामीसँग हिँडे हुन्छ । अप्सराले माया गरे जस्तो गर्दै भनि ।
‘अप्सराको कुरा त सत्य हो । अब यहाँ बस्न नपाउनु मेरो बाध्यता हो ।’ अप्सराको कुरा भुइँमा खस्न नपाउँदै माइलीले मनमनै स्वीकृती जनाई । ऊ एकछिन चुप भई ।
माओवादी आन्दोलनमा हिँड्न माइलीले स्वीकृती जनाएको कुरा सबैले बुझे । अप्सरा र ठाइली सबैभन्दा बढी खुसी देखिए र माइलीलाई एकएक गर्दै अँगालो हाले ।
‘के गर्नु हाम्रो त बाध्यता पनि हो नि ।’ माइलीले दुईटैको कानमा खुसुक्क भनी । अप्सरा र ठाइलीको आँखामा खुसीको आँसु डबडबाएको देखियो ।
दिउँसो घुर्मी र कटारीबाट चिया र खाजा खान बेतिनी आइपुगेका बसका यात्रुहरुले माइलीको पसल माथिको छानामा रातो भण्डा फहराइरहेको देखेका थिए ।
मिर्मिरे, बर्ष ३२ ः अंक ः १ पूर्णाङ्क ः २६०, २०६४ वैशाख
बेलुका साँझमा दाजुले प्रसङ्गवस निकालेको एउटा कुराले मलाई हौसला थप्यो । दाजुबाट मैले स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण दाहालले कुनै समय हाम्रो गाउँको प्राथमिक विद्यालयमा शिक्षक भएर काम गरेको कुरा सुनें । मैले त्यसपछि ठूलो राहतको महसूश गरें । उनी केही समय हाम्रै घरमा बसेका थिए भन्ने सुनेपछि त अझ म रोमाञ्चित समेत भएको थिएँ । मन्त्रालयको सचिवसँग यति नजीकको सम्पर्क बनाउन सकियो भने अरु के चाहियो र ? उनले थोरैमात्र सहयोग गरे भने मेरो लागि जागिर सामान्य कुरा थियो ।
‘के उनले हामीलाई चिन्छन् त ?’ मैले आशावादी बनेर दाजुसँग यो प्रश्न सोधेको थिएँ ।
‘मलाई त उनले पढाएकै हुन्, तैंले गएर चिनजान गरिस् भने चिन्छन् ।’ दाजुले सम्बन्ध सहज हुनसक्ने कुरा स्वीकारे ।
मैले यो नयाँ कुरा सुनेको थिएँ । मैले कल्पना नै नगरेको कुरा । मैले यस कुराबाट धेरै फाइदा लिनसक्ने अनुमान लगाएँ । काठमाण्डौंमा जागिर खोजेर हिंडेको महिनौं भइसकेको थियो । दाजुको न्यून कमाइमा भर परेर बस्नु परेकोमा म भित्रैदेखि दुःखी थिएँ । दाजु प्राइभेट कम्पनीमा सानोतिनो नोकरी गर्थे । उनको नोकरीले भाउजू र दुईजना बच्चाहरुलाई पाल्न पनि निकै धौ धौ पथ्र्यो । त्यसमाथि डेढदुई महिनादेखि म पनि थपिएको थिएँ । दाजुको कमाइमा भर पर्नुबाहेक मसँग अर्को केही पनि उपाय थिएन ।
अघि साँझको दाजुको कुराले म भित्रभित्रै खुसी भएँ । त्यही खुसीले अहिलेसम्म मलाई राम्रोसँग निद्रा पनि लागेको छैन । म चाँडै यो रात बितोस् भन्ने चाहन्छु । तर अनिन्द्राको बेलामा झन् रात लामो लाग्ने गर्छ ।
मध्य रातसम्म दाजुको सानो छोरो पनि रोइरह्यो । उसलाई ज्वरो आएको छ । मेडिकल पसलमा सल्लाह गरेर औषधि ख्वाइएको हो । तर त्यो औषधिले कत्ति पनि छोएन । सबै छिमेकीहरुले अस्पताल लान सल्लाह दिएका छन् । एउटा मजदूरको कमाइ, अस्पताल भन्न जति सजिलो छ, जान त्यति नै गाह्रो छ । मैले उनीहरुको बाध्यता राम्रोसँग बुझेको छु ।
गाउँबाट काठमाण्डौं आएको पनि डेढ महिना भइसक्यो । जागिर खोज्न आउँदा लिएको ऋणले गाउँमा मुख बाएर बसेको छ । गाउँबाट हिंड्ने बेलामा सबैले भनेका थिए– ‘आइ.ए. पास गरिसकेको मान्छे, जागिर त पाइहाल्छस् नि !’ गाउँका आफन्तहरुले भनेको यो कुरा मलाई यतिबेला व्यंग्यजस्तो लागिरहेको छ । यतिका दिन बितिसक्दा पनि जागिर पाउने कुनै संकेत देखा पर्न सकेको छैन ।
राति अबेरसम्म सोच्दा–सोच्दै मैले कल्पनाको जागिर खाएँ । कल्पनाको जागिर कति मीठो हुँदोरहेछ– मेरो सचेत मनले झल्यास्स भएर सोच्यो । कस्तो सपनाजस्तै कल्पना गरेछु– मैले फेरि आफूलाई सम्हालेर आफ्नै जमीनमा ल्याएँ । उही खडेरीले खाएको उराठलाग्दो जमीन । मैले फेरि आफूलाई सोचेर निराश भएँ ।
“पहिलेजस्तै हुने हो कि ?” मैले फेरि सम्भावित भविष्यलाई अविश्वास गरें । कतै विमलराज शर्माले जस्तै त नगर्लान् । विमलराज शर्मा पनि गाउँमा आफूले र आफ्नो परिवारले चिनेजानेकै मान्छे थिए । म पढेकै विद्यालयबाट उनले पहिलो पटक एस.एल.सी. पास गरेका थिए । उनको पालाका साथीहरु कोही शिक्षक छन्, कोही हलो–कोदालो गर्दैछन् । उनी परार एक पटक गाउँ गएका थिए । म भरखर एस.एल.सी. पास गरेर तत्कालै स्थापना भएको गाउँको कलेजमा आइ.ए. अध्ययन गर्न थालेको थिएँ । हामी विद्यार्थी र गाउँलेहरु मिलेर उनको ठूलो स्वागत–सत्कार ग¥यौं । उनी काठमाण्डौं गएर महाप्रबन्धक भइसकेका मान्छे । त्यही बेला हामीलाई उनले आइ.ए. पास भएपछि जागिर मिलाइदिने आश्वासन दिएका थिए । हामीले त्यो आश्वासनलाई जागिरको नियुक्ति पत्रझैं ठानेका थियौं । आइ.ए.को रिजल्ट आउनेबित्तिकै म उनकै आशले काठमाण्डौ आएको थिएँ । आमाले भन्नुभएको थियो– “ठूला मान्छेकहाँ जाँदा खालि हात जानुहुँदैन ।” त्यसैले मैले फेरि ऋणमाथि ऋण थप्दै एक पाथी घिउ ल्याइदिएको थिएँ ।
काठमाण्डौं आएपछि थाहा भयो, गाउँ गएका बेलामा हुने विमलराज शर्मा र काठमाण्डौंमा हुने विमलराज शर्मामा आकाश र जमीनको अन्तर रहेछ । उनलाई भेटेपछि मलाई गाउँबाट काठमाण्डौं आउने मान्छेहरु अर्कै मान्छे भएर बाँच्दारहेछन् भन्ने लाग्यो ।
काठमाण्डौंमा आएर दुःख पाएका मान्छेहरुले भने आफूलाई परिवर्तन गर्न भ्याएका रहेनछन् । मेरा दाजु काठमाण्डौंमा पनि दुःख पाएर बाँचेको मान्छे । काठमाण्डौमा पनि उनको दुःखमा परिवर्तन आएको थिएन । उही दुःख, उही हैरानी, उही श्रम । तर गाउँबाट काठमाण्डौं आएर आर्थिक हैसियतको भ¥याङ्ग चढेका मानिसहरु चाहिँ फरक र अर्कै लोकको जस्तो लाग्ने । मैले विमलराज शर्माबाहेक अरु कैयौंलाई पनि त्यसैगरी फरक हुँदै गएको देखें ।
“मैले भोलि भेट्न खोजेको मानिस पनि विमलराज शर्माजस्तै त हैनन् ?” म फेरि सोच्दा–सोच्दै चिन्तित हुन्छु । त्यसबेला म काठमाण्डौं आउनेबित्तिकै उनलाई भेट्न गएको थिएँ ।
“भेट्ने समय नलिइकन तिमी किन आयौ ?” उनको घर पुग्नेबित्तिकै मलाई उनले खरो शब्दले झम्टिए ।
“आइ.ए. पास गरेपछि आउनू, म जागिर मिलाइदिन्छु भन्नुभएको थियो, त्यही कारण आएको ।” मैले पुरानो कुरा सम्झाएको थिएँ ।
“के जागिर खल्तीमा हुन्छ र झिकेर दिने ?” उनी पुरानो कुरा पूरै बिर्सिए जसरी मसँग प्रस्तुत भए ।
यति भन्दाभन्दै मूल ढोका बन्द गरेर उनी भित्र पसे । म मेरो सपनाको अन्त्येष्टी त्यहीँ गरेर फर्किएको थिएँ ।
नचाहँदा–नचाहँदै विमलराज शर्मालाई अस्ति भरखर मैले भेट्दाको सम्वादलाई सम्झिन पुगें ।
कतै रामकृष्ण दाहाल पनि विमलराज शर्माजस्तै त छैनन् ? आधारात नाघीसक्दा पनि म कल्पनाको गहिराइमा डुबिरहेको थिएँ ।
बिहान भाउजूले बोलाउँदा म अचानक झस्कें । एउटा उत्साह बोकेर ओछ्यानबाट उठें । कल्पनामा डुब्दाडुब्दै निदाउन पुगेछु । रातिकोजस्तै बिहानको दश बजाउने प्रतिक्षा पनि मेरा लागि कष्टकर बन्यो । म कार्यालय खुल्नेबित्तिकै स्थानीय विकास मन्त्रालय पुग्ने छु । र, त्यहाँका सचिवलाई भेट्ने छु ।
“राती निद्रा परेजस्तो छैन नि बाबुलाई ।” भाउजूले मेरो अनुहार हेरेर भन्नुभयो ।
‘होइन, प¥यो !’ भाउजूलाई वास्तविकता बताउन मलाई संकोच लागिरहेको थियो ।
म यतिबेला दश बजेको प्रतिक्षामा व्यग्र भएर बसेको छु । भाउजूलाई तरकारी केलाउनदेखि लिएर भान्सामा पानी ल्याइदिन सहयोग गर्छु ।
“हाम्रो गाउँको विद्यालय छाडेर हिँडेपछि उनीसँग हाम्रो भेट भएको छैन । धेरै सहयोग गर्लान् भन्ने आश नगर !” दाजुको यस कुराले मेरो कल्पनाको संसार फेरि धमिलो भयो ।
म साढे दश बजे स्थानीय विकास मन्त्रालय पुग्दा उनी कार्यालय आइपुगेका थिएनन् । कल्पनाको स्वर्ग निर्माण गर्दै म उनको निजी सचिवालयमा पर्खिरहेको छु ।
एक जनालाई ब्रिफकेश बोकाएर उनी एकछिनपछि आएर सचिवालयमा बसेका हामी सबैतिर विस्तारित नजर दौडाउँदै आफ्नो कक्षतिर पसे ।
“अहिले सचिवज्यू जरुरी काममा हुनुहुन्छ । तपाईंहरुले तीन बजेपछि मात्र भेट्न पाउनुहुन्छ ।” हामी बाहिर बसेका सबैतिर हेरेर निजी सचिवले सुनाए ।
म समय कटाउन बाहिरतिर निस्किएँ । मसँग अरु पनि निस्किए ।
तीन नबज्दै म फेरि उनको कार्यालयमा पुगेको थिएँ ।
“खालि ठाउँ बुझेर आउनू, म भनिदिउँला ।” सामान्य परिचयपछि सचिवले खालि ठाउँ भएपछि जागिर हुने कुरा बताए ।
“नेपालभरिका कार्यालयहरुमा कतै न कतै त कसो खालि नहोला ?” म पूरै आशावादी बनेर बाहिर निस्किएँ ।
“यो खालि ठाउँ खोज्ने भन्ने कुरा वाहियात कुरा हो । उनले तँलाई अल्मल्याउन यसो भनेजस्तो लाग्छ मलाई ।” दाजु नकारात्मक देखिए ।
मलाई कताकता फेरि दाजुसँगै रिस उठ्यो ।
खालि ठाउँ खोज्दै काठमाण्डौका कुन चाहिँ कार्यालय पुगिनँ म ।
“भाइ ! खालि ठाउँ खोज्न पठाएर तपाईंलाई उल्लू बनाए । त्यो कुराको पछि नलाग्नुस् । यहाँ खालि ठाउँ छ भनेर तपाईंलाई कसैले भन्दैन ।” भोलिपल्टै एउटा कार्यालयका एकजना मानिसले सम्झाएका थिए मलाई ।
खालि ठाउँ खोज्दै हिँड्ने क्रममा दुई चार ठाउँमा मेरो सोधाइ सुनेर गलल्ल हाँसेका थिए मान्छेहरु ।
“यहाँको खालि ठाउँ लोकसेवा आयोगले पूरा गर्छ । खालि भए पनि तपाईंलाई काम लाग्दैन ।” एक दिन एउटा कार्यालयको हाकिमले मलाई च्याँट्टिएर जवाफ दियो ।
दशपन्ध्र दिनसम्म उत्साहका साथ कार्यालयहरु घुमें म, दुई चार दिनपछि विस्तारै–विस्तारै उत्साह पनि घट्दै जान थाल्यो ।
एक दिन हिँड्दा–हिँड्दै बाटोमा हाम्रो क्षेत्रका सांसदसँग भेट भयो । उनलाई पनि संवोधन गरेर परिचय गरें र आफ्नो समस्या राखें । उनले पनि खालि ठाउँ भेट्नुभयो भने म पनि भनिदिन्छु भने । उनको कुरा सुनेर मलाई एकपटक फेरि भाउन्न छुटेर आयो । उठेको रिसलाई नियन्त्रणमा लिएर म उनीसँग विदा भएँ ।
खालि ठाउँ खोज्दैजाँदा मजस्तै थुप्रै साथीहरु भेट्टाएँ मैले । मजस्तै ठगिएकाहरुको ठूलो जमात भेटियो ।
“म यी फटाहाहरुको चंगुलमा फस्दिँन ।” यसो भन्दै धेरै युवाहरु भोलिदेखि सम्पर्कविहीन भइरहेका थिए ।
मैले काठमाण्डौंमा आएर बस्ने चिनेका सबै मानिसहरुसँग ऋण सापटी गरिसकेको छु । गाउँको ऋणबाट पार पाउन सजिलो थिएन । अझ यो ऋण थपिएको सोचेपछि म नमीठो पीडामा छट्पटिन पुग्छु ।
“धेरै ठूलो महत्वाकांक्षा नपाल, केही सामान्य काम गर्दै पढ्ने योजना बनाए राम्रो हुन्छ ।” काठमाण्डौं आउनेबित्तिकै दाजुले दिएको सल्लाह यस्तो थियो । त्यसबेला यो सल्लाहलाई महत्व दिन मैले जरुरी ठानिँन ।
“केही सानोतिनो काम गर्दैै पढ् र त्यसपछि अरु सम्भावनाहरु खोज्।” दाजुले केही दिनपछि दिएको सल्लाह थियो यो ।
यी सुझावहरुले मभित्र कुनै प्रभाव पार्नसक्ने कुरै थिएन त्यसबेला । भरखर गाउँबाट आइ.ए. पास गरेर आएको मेरो महत्वाकांक्षाको पहाड निकै अग्लो थियो ।
“खालि ठाउँ भेटिस् त ?” दाजु व्यंग्यमिश्रित प्रश्न गर्दै भित्र कोठामा पसे । उनको व्यंग्यले म झन् हतप्रभ भएँ ।
ओछ्यानबाट ग¥हुङ्गो शरीर बोकेर उठेँ म । खालि ठाउँ सोधेर हिंड्ने विश्वास निकै दिन अघि टुटिसकेको थियो ।
“यो खालि ठाउँ खोज्ने कुरा उनीहरुको हामीलाई अल्मल्याउने राम्रो जुक्ति रहेछ ।” दाजुका अगाडि पराजित मानसिकता ओकल्न बाध्य भएँ म ।
“मैले तँलाई पहिले नै भनेकै हो ।” दाजु यसो भन्दै ढोकाबाट बाहिर निस्के ।
– नवयुवा, वर्ष १२, पूर्णाङ्क ११५, २०६४ वैशाख
चारैतिरबाट ठूलाठूला चौडा डगरहरु त्यस बजारमा आएर ठोकिन्छन् । बर्षामा यो बजारको चहलपहल स्वाट्टै घट्छ । बर्षामा हिलो र पानीले यो बजार दुर्गमजस्तो लाग्छ । हिउँदमा भने यो बजारको चहलपहल एक्कासि बढ्छ । सोमबारचाहिँ यहाँ ठूलै बजार लाग्छ । यो यस क्षेत्रको ठूलो पशुबजार हो । सोमबार यहाँ पशुबजार मात्र लाग्दैन, तरकारीदेखि दैनिक उपभोगका सामान किन्ने र बेचनेको यहाँ निकै ठूलो भीड लाग्छ । यहाँको जनघनत्वमा केही वर्षदेखि निकै बृद्धि भयो । केही बर्षदेखि पहाडतिरबाट बसाइ सरेर आउनेहरुको चाप यो क्षेत्रमा निकै बढेर गयो । बजारको वरिपरि सयौं विघा जमिनका मालिकहरु छन् । काठमाण्डौका राणापरिवारदेखि मन्त्री र सचिवहरुका यस क्षेत्रमा ठूलाठूला मौजाहरु छन् । प्रायः उनीहरु हिउँदे धानको आम्दानी लिन र पुसमाघको काठमाण्डौको जाडो छल्नका लागि यहाँ आउँछन् ।
बजारनजिकै बस्ने गाउँका बुज्रुकहरु विहानै चिया पिउने निहुँमा यो बजारमा भेला हुने गर्छन् । गाउँबाट दूधदही बेच्न आउनेदेखि लिएर तरकारी बेच्न आउनेसमेत यो पसलमा निस्किएर एक कप चिया खाएर जान बानी परिसकेका छन् । बजारपरिपरिका गाउँमा घटेको घटना सबैभन्दा पहिले यहाँ सुनिन्छ र गाउँका सानासाना तिलजस्ता समाचाहरु यहाँबाट पहाड बनेर फैलन्छन् ।
यसको क्षेत्रमा भएका मौजाहरुमध्ये रवीन्द्रशमशेरको सबैभन्दा ठूलो मौजा हो । उनले धेरै जग्गा विक्री गरे पनि अझै पनि उनीसँग सयौं विघा जग्गा बाँकी नै छ । माओवादीको सहयोगमा भूमिहीन किसानहरुले उनको केही जग्गा कब्जा गरे पनि देशका अरु भागमा जस्तो यस क्षेत्रमा माओवादीहरुको उल्लेख्य उपस्थिति छैन । त्यसैले पनि मौजावालहरु अन्य क्षेत्रमा भन्दा यहाँ अलिक बढी चलखेल गर्छन् । रवीन्द्रशमशेर बृद्ध पनि हुँदै गएका र माओवादीसँगको डरका कारणले उनी अचेल राजधानी छाडेर बाहिर निस्कँदैनन् । रवीन्द्रशमशेरले मधेसतर्पmको सम्पूर्ण हेरचाहको जिम्मा आप्mनै फुपूका छोरा सरोजप्रतापलाई दिएका छन् । धेरै वर्षदेखि सरोजप्रताप मात्र नियमित यहाँ आइरहेका छन् ।
हामी सानै छँदा कोसीटप्पूतिरको ठूलो जङ्गल थियो । त्यहाँका जङ्गली जनावरहरु हाम्रो बस्तीतिर पनि आउँथे र अन्नवाली बिगार्थे । हामी केटाकेटीहरु एक्लैदोक्लै हिँड्नसमेत डराउँथ्यौं । पञ्चायती राजको समय थियो त्यस बेला । रवीन्द्रशमशेर आप्mनो परिवारसहित आउँथै र यतै बस्थे । उनीहरु यहाँ आएपछि हाम्रो वस्तीका धेरै मानिसले उनको परिवारको सेवाशुश्रूषा गर्नुपथ्र्यो । धेरै घरबाट एकएक जना जन पालो गरेर नोकर बन्नुपथ्र्यो । उनी यहाँ बसुन्जेल दलबलसहित दिनहुँ सिकार खेल्न कोसीटप्पूतिर जान्थे । उनको बसाइभरि यहाँको न्यायकानुन उनकै हातमा हुन्थ्यो । यहाँका माननीय, सभापतिहरु पनि दिनहुँ उनकै चाकडीमा लिप्त रहन्थे । उनको कुदृष्टि परेका कैयौं अभागीहरुले कुनै कसुरबिना थातबास छाडेर हिँड्नुपथ्र्यो । उनकै दयामायाले मन्त्री र सचिवहरुले राजधानीमै बसेर पनि बनजङ्गल फँडानी गरेर भर्खर आवादी गरिएका मौजाहरु हात पारेका थिए ।
रविन्द्रशमशेर यहाँ नआएको पनि अब त धेरै बर्ष भइसकेको थियो । छयालीस सालको राजनैतिक परिवर्तनले उनको हाइदुहाईलाई सानो धक्का दियो । त्यसपछिको माओवादी आन्दोलन उनका लागि अर्को बज्रपात सावित भयो । छयालीस सालको परिवर्तनपछि उनी एक पटक मात्र यहाँ आएको हामीले देख्यौं । त्यस बेला केही दिन बसेर उनी तुरुन्त काठमाण्डौ फर्किए । त्यसपछिका वर्षहरुमा सरोजप्रताप मात्र यहाँ आइरहन्थे ।
सरोजप्रताप यो बजारमा नआएको एक हप्ता भइसक्यो । उनी बजारतिर किन देखा नपरेका हुन्, हामी सबैलाई थाहा छ । हामीलाई उनको अनुहारमा देखिने छायाबारे थाहा छ । वैशाख ७ गते बिहान पनि उनी चियापसलमा आएर राजनैतिक पार्टीहरुलाई एक अध्याय गाली गरेर हिँडेका थिए । त्यस दिन दिउँसो राजनैतिक पार्टीहरुको ठूलो कार्यक्रम भयो यो बजारमा । प्रतिगामीहरुको प्रवक्ता बनेको भनेर सरोजप्रतापलाई कालो मोसो दल्नुपर्ने कुरा गरेका थिए केही नेताहरुले सभामा । त्यस दिनदेखि उनको अवस्था भूमिगत मानिसको भैंm भयो । अस्ति साँझमा मैले उनलाई सुनचरीको भट्टीपसलतिर पस्तै गरेको देखेको थिएँ । मलाई उनले नदेखेझैं गरे र कोल्टे फर्केर हिँडे । भट्टीपसलमा पसे पनि उनले त्यस दिनदेखि हल्ला गर्न छोडे । हामीले पनि अचम्म मान्यौं ।
सरोजप्रतापलाई गाउँमा सबैले ‘काजीसाहेब’ भनेर सम्बोधन गर्छन् । पहिलेदेखि काठमाण्डौबाट उनी यहाँ आउने खबरले नै यो ठाउँमा ठूलो हल्ला चल्थ्यो । अचेल उनी यहाँ कसरी गुमनाम भएर बस्न सकेका होलान् ! हामी युवाहरु रोमाञ्चित बनेका थियौं । त्यो बेला उनी यहाँ आउँदा हामीलाई भेट्न खुबै रहर गर्थे । हामीसँग गफ गर्दा उनी दङ्ग पर्थे । हामीले भने त्यसै बेला पनि उनका कुरा सुन्न दिक्क मान्न थालेका थियौं । उनका कुरामा नयाँपन केही थिएन — थोत्रा र पुराना कुराहरु । नौलो, नयाँ र आशावादी कहीँ छैन । तर हामी उनका कुरा सुन्न बाध्य थियौं । हाम्रा बाबु, काकाहरु पनि भित्रभित्र र एकान्तमा खुब गाली गर्थे तर अघि पर्दा उनलाई आदर गरेको अभिनय गर्थे । त्यसैकारणले पनि उनी हामी युवाहरुलाई ह्याकुलाले मिचेझैं गरेर कुरा गर्थे ।
काजीसाहेबकै लागि भनेर हरदम यहाँ एउटा घोडा पालिएको हुन्छ । हामीले सानैदेखि देखेको घोडा उनको कामतमा अझै छँदै छ । अब त त्यो घोडा पनि बूढो भइसक्यो । बर्ष दिनमा एकदुई महिना उनी यहाँ आएर बस्छन् । अहिलेसम्म रवीन्द्रशमशेरपछाडि यो घोडामा चढेको काजीसाहेबले बाहेक हामीले अरु कसैलाई देखेका छैनौं । त्यही बूढो घोडा लिएर उनी आउँछन् र चोकको चौतारोमा बाँद्छन् । पहिले उनी यस ठाउँमा आउँदा यो चौतारोमा उनको घोडा हिनहिनाएपछि यो सानो बजार एकतमासले थर्किन्थ्यो मानौं एउटा भूकम्पै गएजस्तो लाग्थ्यो । उनको घोडाको टापको आवाजसँगसँगै यो बजार भयभीत बन्थ्यो । अब त त्यो घोडा पनि बूढो भइसकेको छ र ऊ पहिलेको जस्तो फुर्तिलो देखिँदैन ।
‘काजीसाहेबले तिमीलाई राम्रा आँखाले हेरेका छैनन्, अलिक होस गर ।’ चियापसले काकाले भनेपछि म एक पटक जिल्ल परेँ । म उनीसँग भएका विगतका संवादतिर फर्किएर सोच्न थालेँ ।
‘अहिलेको युगमा राजाले शासन गर्नु प्रजातन्त्रवादीहरुले सोच्नै नसक्ने कुरा हो ।’ राजाले माघ १९ गते गरेको घोषणा समयसुहाउँदो छ भनेर उनले सबैका अघि भनिरहँदा मैले थोरै प्रत्युत्तर थपेको थिएँ । त्यसपछि उनका आँखा एकाएक राता भएका थिए । उनले मलाई हेर्ने आँखामा त्यसपछि अत्यन्त भिन्नता पाउन थालेको थिएँ ।
‘तिम्रो छोरालाई ठिक ठाउँमा राख्ने गर ।’ एक दिन मेरो बुबालाई उनले भनेछन् । त्यसपछि मेरो बुबा मेरो भविष्यलाई लिएर आतकिंत देखिनुभयो ।
काठमाण्डौबाट यहाँ आएपछि उनी यो सानो बजारमा रक्सी र चियाका मलिला ग्राहक हुन् । रात पर्दै गएपछि भट्टीपसलभित्रबाट सरोजप्रतापको आवाजले बजार छिचोल्दै नजिकैका पातला बस्तीतिर पुग्छ । कप्mर्यू लगाएझैं बजार चकमन्न हुन्छ । मानिस सास मारेर बस्छन् । भोलिपल्ट बिहानै उनी घोडा चढेर फेरि यही बजार आउँछन् । यस पटक उनी काठमाण्डौबाट अलिक ढिलो गरेर यहाँ आइपुगे ।
‘आन्दोलन चर्केपछि त काजीसाहेबले मुखै देखाएनन् नि गाँठे !’
चुरोटलाई भुइँमा मिल्काउँदै रुद्रहरी एक पटक बिस्तारै खितखिताए ।
‘जनताको शक्तिलाई कमजोर आँक्नु हुँदैन नि !’ चियापसले काकाले आज स्वर उकासेर बोले ।
‘यी झण्डाहरु देखेर एक पटक त काजीसाहेब छक्कै पर्लान् !’ उनले घोडा बाँध्ने चौतारोतिर देखाएर रुद्रहरीले फेरि भने । ‘यो चौतारोमा सभा हुँदै गरेको देखेर काजीसाहेब नहरको आड लिँदै लुसुक्क भागेको मेरै आँखाले देखेको हुँ चाइन्जो ।’ चाइन्जो पण्डितको स्वर फुर्तिलो थियो ।
‘होइन पण्डितबाजे ! तिमी त अलिक ढाँट्छौ पनि ।’ रुद्रहरीले एक पटक फेरि पण्डितलाई छासे ।
‘मरिजाउँ, सत्तेसत्ते चाइन्जो, ढाँटेको भए आजको रात काट्न नपाउँ !’ चाइन्जो पण्डितले आप्mनो कुरालाई फेरि हैंसे गरे ।
‘हिजो त तिमी काजीसाहेबकै कुरालाई ‘होत नि चाइन्जो’ भन्दै साक्षी बस्थ्यौ त ?’ रुद्रहरीले फेरि पण्डितलाई अर्को क्षेप्यास्त्र हाने ।
‘हिजो तैंले के उनको अघिल्तिर राजाको शासनको विरोध गरिस् र ?’ चाइ्रन्जो पण्डित पनि डेग चलेनन् । पसलमा बसेका मानिसहरु सबै एक पटक गलल्ल हाँसे ।
‘तिमीहरु चुप लागे पनि म यही केटाहरुको साथ लागेर आन्दोलनमा हिँडेको हुँ ।’ रवि मास्टरले सबैतिर औंला ताके ।
‘अब घोडा कहाँ बाँध्लान् काजीसाहेबले ! उनले घोडा बाँध्ने चौतारो त रातो झण्डाले ढपक्कै ढाकेछ नि !’ तिलकबहादुर प्रसङ्ग मोड्दै खितखिताए । तिलकबहादुरले काजीसाहेबका बारेमा यसरी व्यङ्ग्य गरेर बोलेको सुनिएको थिएन । कसैले काजीसाहेबको बारेमा नकारात्मक कुरा ग¥यो भने उनी कुनै प्रतिक्रिया नदिई जिब्रो मात्र टोक्थे ।
‘अब उनीसँगसँगै उनको घोडाका पनि दिन गए ।’ रवि मास्टरले पैmसला सुनाएभैंm गरेर सुनाए ।
हिजोआज यो चौतारो पनि नयाँ र भिन्न लागिरहेको छ । यही चौतारोबाट मानिसहरुले देशका समस्या र समाधानका बारेमा आप्mना धारणा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । वैशाख ७ गतेपछि उनी यस ठाउँमा एक पटक पनि देखा परेनन् । उनको घोडा बाँध्ने चौतारोमा पनि रङ्गीबिरङ्गी झण्डाहरु गाडिएका छन् । मलाई चौतारोसँगै यो सानो बजार पनि नितान्त नौलो र स्वाभिमानी हुँदै गएजस्तो लाग्यो । चौतारोबाट घोडाको गन्ध बिस्तारो हराउँदै गएको छ ।
— गरिमा, वर्ष, २५, अंक ५ पूर्णाङ्क २९३, २०६४ वैशाख
‘ऊ त्यही ठाउँ हो पाल्सिङ र ऊ त्यो पूर्वतिरको डाँडो चाहिँ बड्डाँडा हो ।’ बेतिनीबाट ओरालो झर्दै गर्दा क. विकलले औंलाले देखायो ।
कमरेड सुदीपले यस ठाउँको बारेमा हिजो मात्रै बाटोमा कमरेड विकलबाट धेरै कुरा सुनेको थियो । कमरेड सुदीपले टक्क उभिएर ती ठाउँहरुलाई गौर गरेर हे¥यो ।
‘जनयुद्धको पूर्वाधार विकास गर्न यी स्थानहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेछ ।’ हिजो सुनेको आधारमा क. सुदीपले मनमनै मूल्यांकन ग¥यो ।
कमरेड सुदीप !
दुई वर्ष अघि मात्र यो पार्टीमा प्रवेश गरेको एकजना कमरेड । योभन्दा अघि लामो समयसम्म ऊ कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागिरह्यो । त्रि–चन्द्र क्याम्पसमा पढिरहेको बेला प्रमाणपत्रहरु च्यातेर वि.सं. २०२८ तिर झापा आन्दोलनमा कुद्यो ऊ । त्यसपछि उसका जीवनका उर्वर समयहरु देश, जनता र मुक्तिका सपनाहरु बुन्दै बिते । छ्यालीस सालको आन्दोलनपछि उसका पार्टी संसद र सरकारमा पनि पुग्यो । कम्युनिष्ट नैतिकताभन्दा टाढा पूँजीवादी मूल्यको समेत आफ्नै पार्टीबाट विघटन गरिएका थुप्रै घटनाहरु देख्यो उसले । यिनै विचलन र विघटनका विषयहरुलाई लिएर पार्टीभित्र लामो अन्तर्संघर्ष ग¥यो । अन्ततः बाध्य भएर ऊ त्यहाँबाट बाहिरियो । उसले जनयुद्धको बाटोबाट नेपाली जनताको मुक्ति हुने सपना बोक्दै यो पार्टीमा आइपुग्यो ।
यसपटक पार्टीले कमरेड विकल इन्चार्ज भएको क्षेत्रमा उसलाई सहइन्चार्जको जिम्मेवारी दिएर पठाएको थियो ।
उनीहरु झमक्क साँझ पर्दा पाल्सिङ्ग गाउँ आइपुगेका थिए ।
आज राती कमरेड विकललाई राम्ररी निद्रा परेन । अर्कोतिर कमरेड सुदीप मस्तसँग सुतिरहेको थियो । हिजो साँझमैं आफू दिनभरिको हिँडाइले धेरै थकित भएको कुरा गरेको थियो उसले । दुई वर्षपछि ऊ यस गाउँमा आइपुग्यो । जनयुद्धको सुरुवातका वर्षहरुमा उसले यस ठाउँमा बसेर लामो पार्टी काम ग¥यो । पार्टीभित्र ऊ शिष्टता र भद्रताका निम्ति परिचित थियो । पुनः यस क्षेत्रको जिम्मेवारी पाउनेबित्तिकै यहाँका मानिसहरुले आफूलाई कसरी सोचिरहेका होलान् भनेर उसले आफूभित्रै प्रश्नहरु खेलायो । कटारी छाडेर महाभारतको डाँडातिर उक्लने बेलैदेखि यिनै कुराहरु उसले आफ्नो मनमा खेलाइरहेको छ । अस्ति राउतखर्कमा भएको कार्यक्रममा स्थानीय मानिसहरुले आफ्ना साथीहरुलाई गरेको आलोचनाले साथीहरु झगडामा उत्रिएको घटनालाई उसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । आलोचना पनि सहन नसक्ने तिनै साथीहरुसँग उसले भोलि काम गर्नु पर्नेछ, यिनै कुराहरु सोचेर ऊ चिन्तामग्न छ ।
यिनै कुराहरु मनभित्र खेलाउँदाखेलाउँदै ऊ भुसुक्कै निदाएछ ।
कमरेड विकल विहान उठ्दा कमरेड सुदीप वरिपरि हेरेर आँगनमा टहलिरहेको थियो । कमरेड विकलले पूर्वतिर फर्केर हे¥यो । घामको झुल्कोले महाभारत श्रृङ्खलालाई छुन खोजिरहेको थियो । सोरुङ्ग खोलातिरबाट बग्दै आएको चिसो सिरेटोले मुटुसम्मै पुगेर स्पर्श गरेजस्तो लाग्यो उसलाई । ऊ झोला बोकेर मतानबाट ओर्लियो र विदा माग्न मूलघरभित्र चियाएर हे¥यो ।
‘हामीले तपाईंहरुसँग विदा माग्न खोजेको ।’ घरका मानिसहरु हत्तपत्त बाहिर निस्किए र चाँडै विदा दिन लालायित देखिँदै नमस्कार गरे ।
‘हामीलाई विदा गर्न उनीहरु हतारिएजस्तो देखिए ।’ आँगन कट्नेबित्तिकै कमरेड सुदीपले विकलसँग उनीहरुको मनोविज्ञानको कुरा कोट्यायो ।
‘हामीलाई अझै पनि बोझकै रुपमा उनीहरुले लिएका होलान् !’ कमरेड विकलले पनि कमरेड सुदीपकै जस्तो मूल्याङ्कन ग¥यो ।
विभिन्न तर्कनाहरु गर्दै दुवैजना एकछिन गम्भीर भए । पाल्सिङ्ग भन्ज्याङमा पुगेपछि विहानैको चिसो सिरेटोले फेरि एकपटक गम्ल्याङ्ग छोप्यो । कमरेड विकलले यतिबेलै दश वर्ष अघिको पाल्सिङलाई सम्झ्यो । उसले आफूलाई यो गाउँसँग भावनात्मक नाता गाँसिएझैं महशूस ग¥यो । जनयुद्ध शुरु गर्ने बेलामा उनीहरुका निम्ति यी बलिया आधारहरु थिए । जिल्लामा पार्टीको संगठन अत्यन्तै कमजोर थियो । बड्डाँडा, लिम्पाटार र पाल्सिङतिरको पुरानो सम्पर्कमा टेकेर उनीहरुले उदयपुरमा जनयुद्धको महाभारत उचालेका थिए । जनयुद्धको आरम्भमैं यहाँका होनहार व्यक्तिहरुलाई राज्यले बेपत्ता बनायो र हत्या ग¥यो । ‘किलो सेरा टु’ को नाममा भएको त्यो राज्य आतंकले उनीहरुका समर्थक साथीहरुको समेत विचल्ली भयो । भन्ज्याङ्गको बरको रूखनेर उभिएर कमरेड विकलले फेरि पाल्सिङ गाउँतिर फर्केर हे¥यो । उसले आफू उभिएको माथिल्तिर अर्थात् पाल्सिङ् गाउँको थाप्लामा डोलराज कोइरालाको घर देख्यो । उसको अन्तरमा यतिबेला डोलराज कोइरालोका अनुहार नाचिरहेको थियो । उनको लगाव र इमान्दारीता सम्झेर फेरि उसको मन एकपटक चिथोरियो । त्यसबेलै गिरफ्तार गर्नेबित्तिकै पुलिसले उनको हत्या गरेको समाचार आएको थियो । त्यसपछि उनको न त लास भेटियो न त कुनै खुटखबर । कमरेड विकलले त्यहींबाटै कमरेड सुदीपलाई उनको घर चिनाइदियो ।
केही वर्षपछि ऊ यहाँ आएको थियो । पार्टीले उसलाई फेरि यस क्षेत्रको जिम्मेवारी दिएर पठायो । केही वर्षपहिले, कमरेड विकल पश्चिमतिरको पार्टी जिम्मेवारी लिएर गएको बेलामा मादले भन्ने गाउँमा जनकारवाहीको नाममा कसैलाई मृत्युदण्ड दिने काम भएको थियो । सुनेको आधारमा त्यो घटना सम्झ्यो भने अहिले पनि उसको आङ जिरिङ्ग जिरिङ्ग हुने गर्छ । कचियाले रेटिएर दिइएको त्यो मृत्युदण्ड । सनक र लहडको भरमा दिइएको त्यो मृत्युदण्ड । त्यही कारण त्यो ठाउँमा उनीहरुको संगठनको विरुवा पलाउनै सकेन । पार्टीमा ठूलो छलफलपछि त्यो मृत्युदण्डको गलत कार्यान्वयनका विरुद्धमा माफी माग्ने निर्णय भयो । कमरेड विकल यही जिम्मेवारी बोकेर त्यो ठाउँमा गइरहेको थियो यतिबेला ।
‘जनता अघि उभिएर माफी माग्न मैले गौरवबोध गर्नुपर्छ ।’ कमरेड विकलले आफ्नो मनलाई फेरि एकपटक दह्रो बनाउन खोज्यो ।
‘त्यस्ता मृत्युदण्डको निर्णयका विरुद्धमा पार्टीभित्र अन्तरसंघर्षहरु चल्दैनथे ?’ क. सुदीप चिन्तित भयो ।
‘यसप्रकारका थुप्रै घटनाहरु छन् । ती विषयहरुमा हाम्रो पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष नचल्ने होइन । तर युद्धको प्राथमिक कार्यसूचिबाट कैयौं महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विषयहरु ओझेलमा परे । त्यसको परिणाम पक्कै पनि घातक हुनेछ भन्ने मत थियो केही साथीहरुको । त्यो परिणाम अचेलभरि अभिव्यक्त हुनथालेको छ ।’ कमरेड विकलले केही कुरा गुमाएझैं ग¥यो ।
‘ऊ त्यही हो शहीद मोहन कटुवालको पैत्रिक थलो । त्यसलाई चिन्डेडाँडा भन्छन् ।’ कमरेड विकलले प्रसंगलाई मोड्न खोज्यो र औंलाको इसाराले पूर्वतिर देखायो ।
कमरेड सुदीपले त्यो ठाउँलाई फेरि टक्क उभिएर हे¥यो ।
‘चिण्डो आकारको डाँडा भएर चिण्डे डाँडा भनेको होला ।’ कमरेड सुदीपले गम्भीरताभित्र सानो मजाक ग¥यो ।
कमरेड विकल पनि आफ्नो गम्भीरताबाट पछि फर्कियो र त्यो डाँडाको सम्पूर्णतालाई हे¥यो । फेरि कमरेड सुदीपतिर फर्केर एकपटक हाँस्यो ।
‘यस ठाउँमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको प्रभाव कहिले र कसरी आइपुगेछ ?’ कमरेड सुदीपले छलफललाई अघि बढाउन खोज्यो ।
‘यो ठाउँ पहिले कमरेड ऋषि देवकोटा ‘आजाद’को कार्यक्षेत्र रहेछ ।’… हिँड्दाहिँड्दै बोल्दै थियो कमरेड विकल ।
‘आजाद’ । यो नाम सुन्नेबित्तिकै कमरेड विकल थप केही बोलिरहेको थियो । तर कमरेड सुदीप त्यहीनेर रोकियो र आफैंभित्र केही कुरा खोज्न खोजिरहेको थियो ।
‘ऋषि देवकोटा आजाद’को बारेमा मैले धेरै कुरा सुनें र पढें तर उहाँलाई भेट्न पाइँन ।’ बोलिरहेको विकल पनि सुदीपको कुरा सुनेर रोकियो ।
‘मैले उहाँलाई नेताको रुपमा देख्ने अवसर पाएँ । तर मैले उहाँलाई पनि सुनेर र पढेर मात्र धेरै कुरा बुझ्ने अवसर पाएँ । उहाँको स्वभावमै विद्रोहपन देखिन्थ्यो ।’ कमरेड विकल यति भन्दै फेरि आफैभित्र हरायो ।
विहानको झुल्के घामले महाभारतको लेकबाट माथि उठेर हे¥यो । वरिपरि उभिएका पहाडहरु घामको कलिलो प्रकाशले पहेंलपुर भएर रङ्गिए । विस्तारै जाडो पनि हराउँदै गयो ।
‘किन, यो बगरमा हेरेर तपाइँ निकैं टोलाउनुभयो नि ?’ कमरेड सुदीपको प्रश्नले सुनकोशीको बगरमा आँखा गाडिरहेको कमरेड विकल एक्कासी झस्क्यो ।
‘होइन, केही होइन’ कमरेड विकलको अनुहार अँध्यारो थियो ।
‘पक्कै केही कारण छ ।’ कमरेड सुदीपले अलिक कर ग¥यो ।
‘कमरेड सुदीप, यस ठाउँसँग मेरा केही भावनात्मक सम्बन्धहरु गाँसिएका छन् । परारसम्म यो बगरमा सोलुखुम्बु आक्रमणमा परी शहादत प्राप्त गरेका कमरेडहरु गाडिएका चिहानका दुम्किलाहरु देखिन्थे । दुई वर्ष अघिसम्म मैले नै पनि देख्ने अवसर पाएँ । यसबारे थाहा पाएका हाम्रा पार्टीका कमरेडहरु यो बाटो हिँड्दा एकपटक हेरेर मात्र हिँड्छन् । त्यो घटनामा हाम्रा पार्टीका थुप्रै इमान्दार र सचेत कमरेडहरु गुमे । त्यही घटनामा मेरी जीवनसाथी र भाइको पनि मृत्यु भयो । हामीले त्यस आक्रमणमा लड्दालड्दै घाइते बनेर पछि शहादत प्राप्त गरेका सात जना कमरेडहरुलाई यसै ठाउँमा बिर्सजन ग¥यौं । कमरेड सुदीप ! त्यसैले पनि यस ठाउँमा आइपुगेपछि म केही बढी भावुक र सम्वेदनशील बन्छु ।’ यति भन्दै कमरेड विकल फेरि सुनेकोशीको बगरतिर टोलायो ।
‘यो कुरा त तपाईंले मलाई पहिले भन्नुभएको थिएन ।’ कमरेड सुदीप अचम्भित भयो ।
‘जनयुद्धकालमा यस्ता सम्वेदनशील घटनाहरु थुप्रै घटेका छन् । तिनीहरुलाई एकैपटक भनेर कहाँ सकिन्छ र ?’ कमरेड विकलले बाध्यता देखाएझैं ग¥यो ।
आँखालाई तिरमिर बनाउँदै सुनकोशीको बगरभरि तलैसम्म घाम पोखिएको थियो । पारिपट्टिको डिकुवा गाउँ नीलो पानीमाथि बसेर घाम तापिरहेको थियो । डढुवा डाँडाले छेकेको घामबाट भरखर मुक्त हुँदै थियो दाइने पट्टिको निबुवाटार गाउँ । कोशी गड्तिरका यी गाउँहरु पनि अब त बिस्तारै बगरमा परिणत भइरहेका थिए । यस पटकको बगरको साँध अर्को वर्ष अलिक माथि सर्ने गथ्र्यो । दुईहजार तीन, चार सालतिर निबुवाटार गाउँ पारिपट्टिको मजुवाभरि फैलेको थियो रे । त्यसबेलाको निबुवाटारमा शहरझैं बाटो वरिपरि वस्ती भएको कुरा गर्छन् पुराना मान्छेहरु । दुईहजार एघार सालको बाढीले त्यो फाँट सबै बगाएछ । त्यसपछि यो गाउँ विस्तारै पाखातिर सर्न थाल्यो ।
‘अब कतै पसेर खाना खाने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भोक लाग्न थाल्यो ।’ कमरेड विकलले कमरेड सुदीपको अवस्था बुझ्न पछिल्तिर फर्केर भन्यो ।
‘ठीकै छ, ठाउँमै पुगौं न !’ कमरेड सुदीपले अझैं हिँड्न हौस्यायो ।
‘यो खोलाको नाम यारी खोला हो ।’ मरुभूमिजस्तै पल्टिएको एउटा अजङ्गको बगरतिर देखायो कमरेड विकलले ।
‘पहाडमा यति ठूलो बगर मैले कहिल्यै देखेको थिइनँ ।’ कमरेड सुदीपले आँखा तानेर पारीसम्मै हे¥यो ।
‘एकचालिस साल अघिसम्म यो बगर पुरै अत्यन्त उत्पादनशील र उर्बर ठाउँ थियो । एकचालीस सालको बाढीले यहाँको उर्बर जमिनलाई बगरमा परिणत गरिदियो ।’ कमरेड विकलले सुनेको आधारमा यस ठाउँको बारेमा केही परिचय गराउने कोशिस ग¥यो ।
‘हामी पुग्नु पर्ने ठाउँ त्यही हो । त्यस गाउँलाई माथिल्लो मादले भन्छन् ।’ दक्षिणपूर्वतिर रहेको बादलले छोडेको कालो लेक मुन्तिर आंैलाले देखायो कमरेड विकलले ।
‘बाटो त निकै उकालो जस्तो छ नि ।’ कमरेड सुदीपले आकाशतिरै फर्किउँला जसरी हे¥यो ।
‘त्यो ठाउँमा पुग्न त खाना नखाई सकिएला जस्तो छैन ।’ कमरेड सुदीपले आफ्नो धारणा परिवर्तन ग¥यो ।
‘मलाई पनि त्यस्तै लागेको हो ।’ कमरेड विकल पनि सहमत भयो ।
चौरभरि मानिसहरु छरिएका थिए ।
‘पार्टीले गल्ती ग¥यो भन्दा पनि नपाइने । यस्तै हो भने हामीले फेरि बन्दूकको सहारा लिनु नपरोस् ।’ उतातिर जिल्ला सेक्रेटरी क. दिनेश भीडतिर हेरेर गर्जिरहेको थियो ।
‘यसरी कुरा गरेर अब समस्याको समाधान निस्कंदैन ।’ कमरेड विकलले सेक्रेटरीको नजिकै गएर खुसुक हप्कायो ।
‘जनताको बीचमा यसरी प्रस्तुत भएर नाङ्गिने काममात्र हुन्छ ।’ कमरेड सुदीपले पनि अँध्यारो मुख लगाउँदै कमरेड विकलसँग गुनासो पोख्यो ।
‘तपाईंहरुले मारेको मान्छे दिनभरि मजदूरी गरेरमात्र जिविकोपार्जन गर्ने मान्छे हो । उसकी श्रीमती र चारजना सानासाना अनाथ बच्चाहरु छन् । उनीहरुले अर्काको घर चहारेर र मागेर खान बाध्य छन् । के त्यसप्रति तपाईंहरुको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन ?’ स्थानीय शिक्षक विक्रम राईको स्वर डरले लर्बराइरहेको थियो ।
‘माओवादीले माफीमात्र मागेर हुँदैन । परिवार र बालबच्चाको पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’ भीडबाट कसिलो आवाज आयो ।
जिल्ला सेक्रेटरी कमरेड दिनेश घाइते बाघझैं चौतारोमा बसेर भीडतिर घुरिरहेको थियो ।
‘यस ठाउँमा हाम्रो संगठन छैन । यहाँका मानिसहरुलाई धेरै प्राथमिकता दिनु कुनै जरुरी छैन । जिल्ला सेक्रेटरी कमरेड दिनेश बेलाबेलामा कमरेड विकलसँग असन्तुष्टि पोखिरहेको थियो ।
गाउँलेहरु चौरको पल्लो भागमा झुण्डझुण्डमा विभाजित भएर छलफल गरिरहेका थिए । यता माओवादी पार्टीको कार्यकर्ताको एउटा पंक्ति इन्चार्ज कमरेड विकलको निर्देशनसँग अस्वाभाविक रुपमा असन्तुष्टि बनेको देखिन्थ्यो ।
‘गलत बाटो छोडेर कतै फेरि अर्को गलत ठाउँमा त आइपुगिएन रु’ कमरेड सुदीप चौरको छेउमा बसेर आफ्नै बारेमा सोचिरहेको थियो ।
‘मैले हिँडेको हिजोको त्यो बाटोलाई सच्याएर मेरो सपनाको गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैनथ्यो । तर यो बाटो त्यसरी नै बिग्रिसकेको छैन ।’ फेरि आफैले आफ्नो चित्त बुझायो कमरेड सुदीपले ।
कमरेड सुदीप फेरि आफ्नै साथीहरुको भीडमा छि¥यो ।
‘हाम्रा तिनै केही गलत निर्णयहरुले गर्दा यी ठाउँहरुमा हाम्रो संगठन बन्न नसकेको हो ।’ कमरेड विकलको कुराले कमरेड सुदीप फेरि उत्साहित भयो ।
‘हामीबाट त्यसबेला ठूलो गल्ती भएको छ । अब त्यसलाई ढाकछोप गर्ने होइन, सच्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । पार्टीको निर्णय पनि त्यही हो । त्यसलाई तपाईंहरुले लागु गर्नैपर्छ ।’ जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ताहरुलाई वरिपरि राखेर कमरेड विकलले पुनः निर्देशन दियो ।
‘तपाईंहरुले सल्लाह दिएअनुसार गर्न हामीले आवश्यक ठान्यौं । हाम्रोतर्फबाट भएको गल्तीलाई तपाईंहरुले माफी दिनु हुनेछ र हामीलाई सच्याउने मौका दिनु हुनेछ ।’ भीडको बीचमा उभिएर कमरेड विकलले भन्यो ।
‘साह्रै असल मान्छेलाई मारे ।’ भीडबाट आवाज आइरहेको सुनियो ।
भीड घरतिर फर्किन थाल्यो । कमरेड विकल चौरको एउटा छेउमा आएर बस्यो र लामो श्वास फे¥यो ।
यही कार्यक्रमका लागि जम्मा भएका पार्टी कमरेडहरु फेरि आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रका लागि बाँडिए ।
‘यो पारिपट्टि देखिएको जिल्ला खोटाङ्ग हो । आज हामी त्यतैतिर जान्छौं ।’ कमरेड विकलले उत्तरतिर देखाउँदै सुदीपसँग भन्यो ।
‘सुनकोशी नदी तरेर जान्छौं ?’ कमरेड सुदीप भूगोल हेरेर जिज्ञासु भयो ।
‘हो !’ कमरेड विकल पनि जुरुक्क उठ्यो र आफ्ना साथीहरुतिर फर्केर विदाईको हात हल्लायो ।
घाम डुब्न लागिसकेको थियो । उनीहरु सुनकोशीको गड्तिरमा झरिसकेका थिए । उनीहरुले हिजो हेरेको चिहानमा उभिएर फेरि एकपटक हेरे ।
‘कतै हाम्रा सपनाहरु यी चिहानहरु मेटिए जसरी त मेटिदैनन् ?’ कमरेड सुदीपले कमरेड विकलसँग सुस्तरी भन्यो ।
कमरेड विकल मलिन हाँसो हाँस्यो मात्र ।
घाम डुब्न लागेकोले उनीहरु त्यहाँबाट छिटोछिटो बाटो लागे ।
नवयुवा, वर्ष १२, पूर्णाङ्क १२२, २०६४ मंसिर, पुस
प्रष्टै देखिने गरी उज्यालो भुइँमा खसेकै थिएन । केही हात मात्र टाढाको बस्तुलाई पनि राम्ररी ठम्याउन सकिँदैनथ्यो । गुँडबाट भरखर मात्र बाहिर निस्कन थालेका थिए चराहरु । उनीहरुको आवाजले उज्यालो भएको संकेत गरिसकेको थियो ।
चिनेचिनेजस्तो लाग्ने आवाज दोबाटोबाट उकालो लाग्यो । उनले कान थापेर सुने । हो, चिनेकै आवाज हो । कान्लाको छेवैमा उनी चाल मारेर उभिए । दुईवटा मानिसको आकृति ठूला घरतिर तेर्सियो ।
‘पर्धानको छोरो फेरि मुन्टिएछ ।’ एक्लै भए पनि उनले सानो आवाज निकालेरै बोले । ‘माओवादी जनयुद्ध सुरु हुनेबित्तिकै जनकारवाहीको डरले भागेको पर्धानको परिवार के यो शान्ति सम्झौता भएपछि फेरि यही गाउँमा बस्ने भो ?’ मनलाई चिसो बनाए उनले । दोबाटोबाट उकालो लागेका मानिसहरुको आवाज विस्तारैविस्तारै हराउँदै गयो ।
“यिनीहरु फेरि यही ठाउँमा बसे भनेदेखि त गाउँ फेरि मुर्दाघाट हुने भइहाल्यो नि ! बरु माओवादी युद्ध नसकिए पो हामीलाई राम्रो हुनेरहेछ ।” सोच्दासोच्दै उनी चाल मारेर जंगलतिर झरे ।
जंगलमा पुगेर पनि उनका हात राम्ररी लागेनन् । नचाहँदानचाहँदै पनि उनका मनमा विभिन्न तर्कनाहरु खेलिरहे ।
उनी थोरै मुठा घाँस बोकेर घर फर्के । तर विहान गएको बाटो होइन, अर्कै बाटो फर्के । “उनीहरुका शासनका दिनहरु फेरि फर्किन्छन् त ?” उनीभित्र यो प्रश्न कुमालेको चक्रझैं घुमिरहेको थियो ।
आज विहानैदेखि मन बेचैन भइरहेको थियो उनको । तर उनको बेचैनी कसैलाई पनि सुइँको दिएका थिएनन् उनले । उनी बारम्बार अरुको अनुहार पढ्ने कोशिस गरिरहेका थिए ।
“मान्छेहरु किन चिन्तित भइरहेका छैनन् ?” उनी साँच्चै अचम्मित भइरहेका थिए ।
“के मेरा आँखा र कानहरुलाई त कुनै भ्रम परेन ?” उनी बेलाबेलामा यसरी पनि सोचिरहेका थिए ।
टाढासम्म आँखा फालेर हेरे उनले । हिजो अस्तिको गति जसरी नै बगिरहेको थियो, उत्तरतिरको सुनकोशी । पश्चिमतिर खोलाको आवाजमा कुनै फरकपन थिएन । ‘सुनकोशीमा पानी बगेझैं समय पनि त बग्यो नि !’ फेरि मनलाई ढुक्क बनाएर सोचे, वरिपरि ठिङ्ग उभिएका रुखहरुलाई हेरे । रुखका पातहरु पनि हावामा नाचिरहेका थिए ।
“आज गाउँमा मैले नयाँ मान्छेहरु देखें । तैंले चिनिस्, को र’छन् हँ ती ?” अलिअलि कुरा लुकाएर स्वास्नीसँग सोधे उनले ।
“गाउँमा मान्छेहरु जाने हुन्छन् नि ! तिमीलाई किन ठूलै कुराजस्तो ल्यायो नि ?” उनको कुरालाई स्वास्नीले हावामा उडाइदिइन् ।
“ठूला घरनेर मैले आज नयाँ मान्छेहरु देखें । पर्धानकै छोराको स्वरजस्तै लाग्यो क्या, आज घाँस जाँदा । गाउँमा शान्ति भयो भनेको त, पर्धान र पर्धानका सन्तानहरु फेरि मुन्टिएछन् कि के हो ?” मनभित्रको उद्वेगलाई रोक्नै सकेनन् उनले ।
“गाउँका फटाहाहरुलाई सिध्यायौं भन्थे । यस्ता अपराधीहरुलाई चाहिँ केही गर्न सकेनछन् हगि माओवादीहरुले पनि ?” बूढाको कुराले झस्किँदै उनले भनिन् ।
“लौ के रै’छ बुझ न ! छोरीहरु पनि विहे गर्ने बेला भएका छन् । ती अपराधीहरु फर्के भने यो गाउँमा त फेरि राक्षस–राज चलिहाल्छ नि !” उनकी स्वास्नी पनि आतंकित भइन् ।
उनी अर्थात् देवीदत्त पराजुलीले ठूलाघरको बाटो हिँड्ने सबै मान्छेलाई नियालेर हेरे । कसैको आँखामा उनले कुनै त्रास देखेनन् ।
“आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ?” पराजुली बूढा साँच्चै बिलखबन्दमा परे ।
घरको काम सिध्याइसकेपछि आँगनको डिलमा बसेर एकछिन टोल्हाए उनी । फर्केर गाईगोठालो जान लागेका छोरीहरुको अनुहारमा हेरे ।
“यति राम्रो हाम्रो गाउँ–टोल अब फेरि मसानघाट हुने भो ।” विगत सम्झेर उनको मन फेरि कटक्क काटियो । पन्ध्र वर्षअघिको गाउँको दुषित र आतंकित वातावरण घुरमैलो भएर उनको अन्तरहृदयमा एकतमासले नाच्न थाल्यो ।
जति वर्षहरु बितेपनि यी घटनाहरु उनका आँखाबाट कहिल्यै पनि ओझेल पर्न सकेनन् ।
त्यस दिनको त्यो विहान ।
उज्यालो भुईंमा राम्रोसँग झर्न पाएकै थिएन ।
गाउँमा बूढापाका र महिलाहरु मात्रै थिए । गाउँका तन्नेरीहरुलाई सम्साँझैदेखि एकराते मेलाको रमझमले तानेको थियो । उनको छोरो रमेशलाई बरु त्यस प्रकारको रमझमको कुनै महत्व थिएन । गाउँमा उसका समवयका सबै मानिसहरु उसलाई ‘साधु’ भनेर जिस्क्याउँथे । हुन पनि ऊ व्यवहारले साधुजस्तै थियो, उमेरै नपुगी कर्तव्य र जिम्मेवारीले थिचिएको जस्तो । छोरोप्रति बाबु देवीदत्त पराजुली पनि भरोसा र विश्वास गर्थे । विद्यालयमा गएर धेरै कुरा पढ्न पाएको पनि होइन उसले । तर विद्यालय गएर पढेकाहरुभन्दा कम तेजिलो थिएन ऊ । सानैदेखि राजनीतिक विषयहरुमा खुवै रुचि लिन्थ्यो ।
गाउँका धेरै साथीहरुले कर गरेपछि मात्र ऊ त्यसदिन रातको मेलामा जान तयार भएको थियो । उसका साथीहरुले त्यसबेला उसलाई कर गर्दै भनेका थिए– ‘ऊ त्यहाँ गयो भने राजनीतिक विचारले उसका प्रतिस्पर्धीहरु त्यहाँ एकछिन पनि टिक्न सक्नेछैनन् ।’ उसले साथीहरुसँग आग्रह गर्दै भनेको थियो– ‘एकराते बजार राजनीतिक छलफलका लागि अनुकूल र उचित ठाउँ होइन ।’
रमेश स्पष्ट विचार र गहन अध्ययनका कारण गाउँटोलका युवाहरुका बीचमा मियो बन्दै गइरहेको थियो । साथीहरुको आग्रहका अघिल्तिर उसको केही पनि लागेन । ऊ साथीहरुको पछि लागेर गयो । जान मन नलाग्दानलाग्दै पनि गयो । साथीहरुको आग्रहलाई टार्न पनि उसलाई उचित लागेन ।
“सानैदेखि एकराते मेलासँग रमेश कहिल्यै नजिक भएन । आज त कसरी गएछ नि ?!” पराजुली बूढाले श्रीमतीसँग कुरा कोट्याए ।
“साथीहरुको कुरो काट्न सकेन, गयो होला । साथीहरु भनेपछि हुरुक्कै हुन्छ । त्यहाँ आज सभा पनि गर्ने अरे ।” बूढीले पनि यो कुरालाई सामान्य रुपमा लिइन् ।
“पर्धानका छोराहरुले रमेशलाई देखिसहेका छैनन् क्या ! त्यसैले पो मैले भनेको । झन् यो एकराते मेलामा टन्न रक्सी धोकेर उनीहरु साँढे नै हुन्छन् ।” पराजुली बूढाले शंकाको गाँठी कुरा खोले ।
“पर्धान र पर्धानका छोराहरुसँग भन्दा गाउँका सबै मानिसहरु रमेशकै पक्षमा कुरा गर्छन् ।” बूढीले मनलाई दह्रो बनाइन् ।
“उनीहरुसँग सम्पत्ति, शक्ति सबै कुरा छ । हामी गरिबसँग के छ र !?” बूढाको मनको कुनामा त्रास बाँकी नै रह्यो ।
“होइन, यो कस्तो व्यवस्था हो ? हिजो पंचायती कालमा पनि उनीहरुकै हाइ–हुकुम, उनीहरु नै प्रधान, उपप्रधान । अहिले पनि फेरि उस्तै । उनीहरु नै अध्यक्ष, उपाध्यक्ष । पंचायत र बहुदलीय व्यवस्था त उस्तैउस्तै दाजुभाइजस्तै रछन् नि !” बूढीले गम्भीर भएर जिज्ञासा राखिन् ।
‘यहाँ मात्रै हो र ! अन्त पनि त यस्तै छ नि ।’ बूढाले छलफलभित्र पस्ने आँट गर्न सकेनन् र कुरालाई यहीँ ट्ङ्ग्याउन खोज्दै भने ।
आधा रात ढल्किन मात्रै के थालेको थियो, बजारमा बजेको माइकको आवाज हावाको प्रवाहमा घरी प्रष्ट सुनिन्थ्यो, घरी मधुरो सुनिन्थ्यो । केही छिनमै रमेशको स्वरलाई हावाले उडाएर ल्याउथ्यो र फेरि हराउँथ्यो ।
“एकराते मेलामा राजनीतिक कुरा कसले सुन्छ ? जाँडरक्सीमा डुबेका मान्छेहरुका बीचमा त्यस्ता कुरा गरेर के फाइदा ?” पराजुली बूढाले आफ्नो असन्तुष्टि फेरि पोखे ।
बूढीले कुनै प्रतिक्रिया नदिई उनको कुरा मात्रै सुनिरहिन् ।
भरखर झकाउँदै गरेको बेला पुराजुली बूढा बन्दूक पड्किएको आवाजले झल्यास्स व्यूँझे । उनी सँगसँगै बूढी पनि व्यँुझिन् । उनी केही बोलेनन्, मात्र सुनिरहे । त्यतिबेला उनले कुनै अनिष्ट संकेतलाई मनमनै विश्लेषण गरेका थिए ।
‘हँ ः के भयो ?’ बूढीले बूढाबाट थप जान्न खोजिन् ।
बूढा केही नबोली ओच्छयानबाट जुरुक्क उठे र लुगा लगाए । बूढी पनि चुपचाप तयार भइन् । गल्लीबाट मानिस हिँडेको आवाज आउन थाल्यो
पराजुली बूढाहरु बजार पुग्दा मानिसहरु धमाधम आउँदै थिए । बजार बजारजस्तो थिएन । नितान्त एउटा युद्ध मैदानजस्तो थियो ।
“गोली चलाएर अपराधीहरु भागिसके ।” केही मानिसहरु यसो भन्दै यताउता दौडिरहेका थिए ।
“कसलाई गोली हाने ?” केहीले सोधिरहेका थिए ।
“गोली त सभास्थलभित्रै कान्छो धामीको छोरा रमाकान्तलाई लाग्यो ।” मानिसहरु एकअर्कालाई सुनाइरहेका थिए ।
“गोली लाग्नेबित्तिकै प्राण गयो ।” एकअर्कालाई समाचार सुनाउन सबै व्यस्त थिए ।
“साह्रै असल मान्छेलाई मारेछन् ।” पराजुली बूढी भक्कानो छुटाएर रोइन् ।
“पर्धानका छोराहरु र उसका भरौटेहरु सबै भागीसके ।” मानिसहरु सूचना सुनाउन व्यस्त थिए । पराजुली बूढा र बूढी कान्छो धामीको परिवारलाई सान्त्वना दिन बगरको अर्को छेउतिर दौडिए । धामीको छोराको शवयात्रामा मानिसहरुको समुद्र ओर्लियो ।
“पर्धान र तिनीहरुका भरौटेहरुको घरमा मानिसहरुले सबै तोडफोड गरे र आगो पनि लगाए ।” शवयात्राको बीचबीचका मानिहरुले खबर सुनाइरहेका थिए ।
सबै मानिसहरु सभाका लागि रातमाटे चौरमा जम्मा भएका थिए ।
“ऊः प्रहरीहरु आए !”
सभास्थलमा पुगिसकेपछि भीडबाट कुनै किशोरको आवाज आयो ।
सबै मानिसहरुको ध्यान पारी डाँडातिर गयो । सबैको आँखामा त्रासको एउटा बादल नाचिरहेको थियो । अघिअघि पर्धान र पर्धानका छोराहरु थिए । तिनीहरुको ठीक पछि गाउँकै हुल्याहा र फटाहाहरु थिए । तिनीहरुका पछि प्रहरीको ठूलो जत्था थियो ।
मानिसहरुको बीचमा आतंकको वातावरण पैदा भइरहेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्थो ।
“तपाईंहरु शान्त भएर कार्यक्रममा सरिक भइदिनु होला ।” परिस्थितिको आँकलन गर्दै मञ्चबाट कसैले बोलिरहेको थियो त्यसबेला ।
“अपराधीहरुलाई अब यहीं कारवाही गर्नुपर्छ ।” यस्तो आवाज पनि भीडबाट आइरहेको थियो ।
“ऊः त्यो मान्छेलाई गोली लाग्यो… लाग्यो … ।” गोली चल्नेबित्तिकै भीड तितरवितर भयो । गोली लागेका मानिसहरुलाई कोही बोक्न खोजिरहेका थिए । एउटा युवक नभाग्नुस्– नभाग्नुस् भन्दै छेउमा कराइरहेको थियो ।
“आतंककारीको लाश यही होइन ?” यसो भन्दै रमाकान्तको लासमाथि एउटा प्रहरीले लात्ती हानिरहेको थियो । केही प्रहरीहरु घाइते युवकलाई खोस्ने प्रयत्न गरिरहेका थिए । पर्धान र उसका छोराहरु कतै लुकिसकेका थिए ।
पराजुली बूढा र बूढीले भीडलाई छिचोलेर टाढासम्म हेरे । पक्राउ परिसकेकालाई प्रहरीहरुले घिसारेर लछारपछार गरिहेका थिए । प्रहरीकै घेराभित्रबाट रमेशले नारा लगाइरहेको देखिन्थ्यो ।
“यत्तिका मान्छे भएर पनि यी फटाहाहरुलाई किन नसकेका ?” पराजुली बूढा मानिसहरुतिर फर्केर भनिरहेका थिए ।
प्रहरीले रमाकान्तको लास लिएर गयो । रमेश र अरु घाइतेहरुसमेत पाँच जनालाई गिरफ्तार गरेर लग्यो । लाससहित गिरफ्तार गरेर लगिएका सम्पूर्ण मानिसहरु बेपत्ता बनाइए ।
“सुनकोशकिो किनारमा गोली ठोकर उनीहरु मारिए ।” कुनै बेला यस्तो हल्ला आयो ।
‘महाभारतको जंगलमा सबैजना जिउँदै जलाएर मारिए ।’ यस्तो पनि हल्ला सुनियो त्यसबेला ।
त्यसपछि गाउँमा पुलिस प्रशासनले गरेको अत्याचारको कुनै सीमा रहेन । दमन खप्न नसकेर धेरैले सदाका लागि गाउँ छाडेर अन्यत्र बसाइँ सरे ।
पन्ध्र वर्षअघिको घटनाले अझैसम्म उनलाई पच्छ्याउन छोडेको छैन । ‘यो कहिल्यै पनि निको नहुने घाउ हो ।” अरुलाई यसो भनेर टार्ने गर्छन् उनीहरु ।
‘लास नदेखुन्जेल आस हुँदोरहेछ ।” जतिसुकै बलियो मन पारे पनि उनले सकेनन् । सोच्दासोच्दै बूढाका आँखाबाट केही थोपा आँसुहरु धर्तिमा झरेर एकाएक बिलाए ।
सोच्दासोच्दै उनी फेरि एकपटक झस्के, यसो आकाशतिर फर्किए । घाम त निकै माथि चढिसकेछन् । बाँकी रहेको कामलाई सोचेर फेरि उनलाई चिन्ताले गाँज्यो ।
विहानको घटना उनको आँखाबाट ओझेल बन्नै सकेन । ठूलाघरको डाँडातिर एकपटक फर्केर हेरे उनले । चारजना मान्छेहरु उनकै घरलाई तोकेर आइरहेका थिए । ती मानिसहरु बरका रुखबाट सिधै उनकै घरतिर आए । नजिकै आएपछि मानिसहरु ठम्याए उनले । माझघरे विष्णुप्रसाद पण्डित, देवीथाने रामानन्द जैसी, राताघरे फुर्के भट्टराई र कान्छो धामी । सबैलाई ठम्याए उनले ।
‘यसरी हुलै बाँधेर किन आए उनीहरु ? के कुनै कुसमाचार बोकेर त आएनन् ?” उनको मन फेरि भरङ्ग भएर उड्यो ।
“निको चालले त यिनीहरु आएकै होइनन् ।” मनभित्रको शंकाको गाँठो झन् कसे उनले ।
चारैजनाले परैबाट हात जोडे । ल आउनुस् ? आउनुस् ! भन्दै उनी पनि सुकुल लिन भित्र पसे । सुकुल लिएर बाहिर निस्कँदा चारैजनाको अनुहारमा एउटा चमक आएको देखे उनले ।
“हामी तिमीलाई र गाउँलाई एउटा खुसीको खबर सुनाउन हिँडेको ।” पायरिया लागेको दाँत देखाउँदै देवीथाने जैसी हाँसे ।
“के हो भन्नोस् न !” पराजुली कुनै समाचार सुन्न उद्वेलित थिए ।
“बाँकी रहेका काँडाहरु पनि अब त उखेलिएर सिद्धिए है !” देवीथाने जैसी फेरि उसै गरी हाँसे ।
“जैसी बूढा ! खसोखास भन न ! कुरो के हो ? किन चपाएर बोल्छौ हँ ।” पराजुली अधैर्य भइरहेका थिए ।
“होइन ! खुसीको कुरा त एकैचोटि भनीहाल्नु कहाँ हुन्छ र !” फुर्के भट्टराईले फेरि मुख मिठ्याए ।
“अब भन्नै परो त !? भन्दाखेरी अब पर्धानको छोरो दुई–चार दिनदेखि यहाँ आएर भूमिगत बसेको रहेछ । भित्रभित्रै जग्गा–जमिनहरु आफ्ना नातेदारहरुलाई बेचेछ र आज विहानै अलिअलि भएका समानहरु लिएर हिँडेछ ।” माझघरे पण्डित फेरि खित्खिताए ।
“के साँच्चै हो र ! कि तिमीहरुले ख्यालख्याल गरेको ?” पराजुली बूढा वास्तविकता बुझ्न व्यग्र्र भए ।
“कुरा त साँच्चै हो देवीदत्त दाइ, तर ती अपराधीहरु लुकेर बसेका रहेछन् र मात्र । नत्र तिनीहरुलाई हामी गाउँलेहरु मिलेर जनकारवाही गर्नुपथ्र्यो, कि कसो हो ?!” कान्छा धामीको स्वर अलिक खरो थियो ।
“मैले त बिहानै देखेको थिएँ । ती मुर्दाहरु गाउँमा बसिदेलान् भन्ने आफूलाई कत्रो चिन्ता थियो !” पराजुलीले अन्तरको कुरा खोले ।
“ अब तिनीहरु गाउँमा बस्ने आँट नै गर्दैनथे नि ।” माझघरे पण्डितले तर्क गरे ।
“बसेको भए गाउँ त फेरि बर्वादै हुन्थ्यो ।” देवीथाने जैशीको प्रतिक्रिया थियो ।
“अब गाउँ पहिलेको जस्तो कहाँ छ र ? ! माओवादी आन्दोलनले गरिबहरुको आँखा पनि खोलिदिइसक्यो ।” कान्छा धामीको भनाइ थियो ।
“हो । अब गाउँका मान्छेहरु हामीले त्यसबेला सहेजस्तो शोषण सहेर कहाँ बस्छन् र ! ?” फुर्के भट्टराईले आफ्नो राय राखे ।
“अब हामी पनि कहाँ सहन्छौं र ? ! माझघरे पण्डितले ठूलो स्वर निकालेर हाँसे ।
“साँझ परेको पनि पत्त्तै पाइएनछ ।” देवीथाने जैसीले पश्चिमतिर हेर्दै भने ।
“हो त, नि ? पत्तै पाइएन छ ।”
अरुले पनि सही थापे ।
उनीहरु कुरा गदैगर्दै आ–आफ्नो बाटो लागे । पराजुली बूढाले टाढा पुगुन्जेलसम्म उनीहरुलाई हेरिरहे ।
नवयुवा मासिक, वर्ष १३, पूर्णाङ्क १३०, २०६५ भाद्र
बाहिरको वातावरणबाट भित्र पस्ने बित्तिकै एउटा सार्नो डम्पिङ साइड’ मा गएजस्तो याद आउँछ । चिसोले भित्ताहरुमा लेऊले बनेका धर्साहरु देखिन्छन् । वर्षौ अघि बिछ्याइएका कोरियन कार्पेटहरुमा पत्रैपत्र धुलो जमेको छ । धुलो र फोहोरमा भुइँबाट आएको चिस्यानले एक प्रकारको दुर्गन्धको सृष्टि हुनु स्वभाविकै थियो ।
म भरखरैमात्र कार्यालयको कोठामा प्रवेश गरेको थिएँ । पहिले पहिले भन्दा दुर्गन्ध अझ बढेको जस्तो महसुस भयो मलाई आज ।
“तँ त साँच्चै जागिरे भइछस यार ! यस्ता कामहरु छाड्दे बुझिस् ! ” मेरो कोठामा पस्ने बित्तिकै कुबेरले भनेको कुराले मलाई झनक्क रिस उठेको थियो ।
“के अफिसको काम गरेको भन्ने ठान्या छस् ! ”
मैले पनि तात्तातै जवाफ फर्काएँ ।
हाकिमको घरको टेलिफोनको बील तिर्ने लाइनमा उभिँदाउभिँदा म थकित भएर भर्खर कार्यालय आइपुगेको थिएँ । कार्यालय भन्नु मात्रै हो, हाकिमको व्यक्तिगत काम हेर्ने र गर्ने ठाउँ भएको छ मेरो टेबल । अहिलेसम्म मबाट कार्यालयको काम भएकै छैन भन्दा पनि केही फरक पर्दैन । कुबेर मेरै छेउमा बसिरहेको थियो र मैले बीलहरु फाइलिङ गरेको हेरिरहेको थियो ।
कुबेर र म एकैपटक ओभरसियरको पदमा स्थायी नियुक्ति लिएर यो कार्यालयमा प्रवेश गरेका थियौँ । त्यसबेला अर्थात् करिब ५ महिना अघि यहाँ आउँदा हामीसँग थुप्रै सपनाहरु थिए । प्राविधिक दक्षतालाई अझ वृद्धि गर्ने योजनाहरु थिए । दक्षतालाई विकास गर्दै इन्जिनियर बन्ने धोको बाँकी नै थियो । जागिर खाएको केही समयमै हामीले थाहा पाइसकेका थियौँ, हाम्रा योजनाहरुले असफलताका बाटाहरु हिँड्न थालिसकेका थिए । कुबेर र म दुवैले यसैगरी बुझेका थियौँ ।
मेरो कामलाई एकछिन हेरेपछि कुबेर हाँस्दै बाहिरियो । भित्रबाट हाकिमले घण्टी लगायो । पियन हरिप्रसाद पनि घण्टीको आवाजसँगै भित्र पस्यो । यो कार्यालयका कर्मचारीहरुमा हाकिम बाहेक हामी दुई जना मात्र बाँकी छौँ । हरिप्रसाद र म । यो कार्यालयमा सत्र जनाको दरबन्दी भएको कुरा मैले यहाँ आउने बित्तिकै सुनेको थिएँ । दरबन्दी अनुसार सबै कर्मचारीहरु छन् । चार, पाँच जनालाई त चिनेको पनि छु । हाजिर गर्दा कहिलेकाहीँ भेट हुन्छ । न उनीहरु यहाँ आएर काम गर्छन्, न उनीहरुलाई कामका लागि कसैले खोज्छ । भित्रबाट घण्टी बज्ने बित्तिकै मैले अनुमान गरिसकेको थिएँ उसले मलाई बोलाउन खोज्दै छ । यो अफिसमा उसले बोलाउने मान्छे म बाहेक अर्को कोही पनि थिएन ।
“सरलाई भित्र हाकिम साबले बोलाउनु भा’छ ।” हरिप्रसादले मलाई खबर दियो ।
“कल्याणजी ! ग्लोबल बैंकको शेयर भर्ने समय अब पाँच दिन मात्र बाँकी छ । यी नागरिकताहरु लिनुस् र सबैको नाममा सय सय कित्ता शेयर भरिदिनु होला । यो काम गर्न चाहिँ ढिलो नगर्नुहोला । फेरि तुरुन्तै अर्को बैंकको खुल्न लाग्दैछ भन्ने सुनेको छु ।” हाकिमले मेरा अघिल्तिर एक झोला नागरिकताका प्रमाणपत्रहरु दिँदै भन्यो ।
‘कस्तो अफिसमा जागिर खान आइएछ’
नागरिकताको पोको बोकेर बाहिर निस्के पछि निकै दिक्क लाग्यो । उसको, उसका परिवारहरु र नातेदारहरुका नाममा यो भन्दा पहिले पनि मैले थुप्रै पटक विभिन्न बैंक र संस्थाहरुको शेयर फर्म भरिदिएको छु । म बिहान आउने बित्तिकै अझ घरको पानी तान्ने मेशिन बिग्रियोसम्म भन्दै थियो यसले । मैले नसुनेभैmँ गरेँ । कुबेर चाहिँ यस्तो झन्झटबाट मुक्त छ जस्तो लाग्छ । त्यसैले मलाई भेट्ने बित्तिकै व्यङ्ग्य प्रहार गर्छ ऊ ।
त्यस दिन हाकिमको छोराको फिस बुझाईदिन जाने तयारी गर्दै थिए । फेरि कुबेर आइपुग्यो ।
“होइन ! तँलाई आज पनि फुर्सद छैन कि के हो ?
उसले फेरि व्यङ्ग्य प्रहार ग¥यो ।
कुबेर आज गालाको आधा भागसम्म छोप्ने बल्डयाङ्ग्रे कालो चश्मा लगाएर आएको रहेछ । मैले कहिल्यै पनि देखेको थिइन यसले कालो चश्मा लगाएको । उसको नयाँ अनुहार देखेर मलाई पनि निकै हाँस उठ्यो ।
“तँलाई कतै आँखा पाक्ने रोग त लागेन ?”
उसले लगाएको कालो चश्मा मेरो लागि समेत अनौठो भइरहेको थियो ।
“यसको अर्थ ठूलो छ, बिस्तारै बुभ्mछस् ! ”
रहस्यमा राखेर जवाफ दिने उसको बानी पहिले देखिकै थियो ।
“होइन ! यो अफिसमा कालो चश्मा लगाउनेको संख्या त ठूलै छ जस्तो छ । यो कस्तो खालको फेसन हो ।”
मैले म भित्र खुल्दुली लागिरहेको कुरा सोधेँ ।
“तँ मुर्ख बालकले यी सब कुरा बुभ्mने बेलै भएको छैन ।” चश्मा झिकेर हातमा घुमाउँदै उसले भन्यो ।
“तँलाई त म हिजो आज घुमिरहेको मात्र देख्छु । तेरो केही काम छैन कि के हो ?” मलाई लागिरहेको अर्को प्रश्न सोध्छु ।
“यहाँको काम तँ जस्तो बेवकुफले मात्र गर्ने हो ।”
फेरि उसले त्यस्तै बटारिएको उत्तर दियो ।
“के तँलाई कुनै काम गर्नु पर्दैन ?” म भित्रको जिज्ञासा अभैm बढ्दै गयो ।
“हाकिमसँग आतङ्कित भइस कि के हो ? उसले ठट्टा गर्ने शैलीमै भन्यो ।
मलाई त मेरो हाकिमले खुबै पेल्छ । आप्mना घर परिवारको समेत सबै काम लगाउँछ । कार्यालयको काम कस्तो हुन्छ ? अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । कस्तो खाडलमा आएर फसियो जस्तो छ । मैले कुनै ठट्टा नगरिकन ऊसँग छलफल गर्न खोजेँ ।
“ओ हो ! मेरो हाकिम पनि कहाँको कम हुन्थ्यो । झन् त्यो त भुईफुट्टा कवि परेछ । मलाई त झन् त्यसले खुबै हैरान बनाएको थियो ।” उसले चश्मालाई रुमालले पुछ्दै भन्यो ।
“के गथ्र्यो त्यसले ?” म झन् जिज्ञासु भएँ उसको कुराले ।
“कविताका नाममा जे पायो त्यही लेखेर ल्याउँथ्यो । कथा र निबन्धका नाममा उट्पट्याङ गन्थन लेखेर ल्याउँथ्यो । मैले टाइप पनि गर्न जानेको थाहा पाएपछि त त्यसले खुबै हैरान बनायो नि ! एकपटक टाइप ग¥यो फेरि मिलेन भनेर काट्थ्यो । फेरि थप्थ्यो । फेरि पछि थपेको काट्थ्यो । बीसपल्ट सच्याउँथ्यो । जतिपल्ट सच्याउँथ्यो उतिपल्ट सुनिदिनु पर्ने । त्यसले त अफिसमा साहित्य आतङ्क मच्चाएको थियो नि ! ” भन्दाभन्दै कुबेरले फेरि चश्मा लायो ।
“नाम चलेकै कवि हो कि के हो तेरो हाकिम ?” मलाई उसको कुरा रोचक लागिरहेको थियो । म ऊबाट थप कुरा सुन्न चाहन्थेँ ।
“के को नाम चलेको हुनु नि ! त्यस्तैले गर्दा त हो नि ! कविताको बिजोग भा’को ! ” कुबेर खित्का छाडेर हास्यो ।
“के हिजो आज पनि त्यही काम गर्छस्् तँ ?
उसको कुराले मलाई झन् चाख बढ्यो ।
कुबेर मेरो अन्तरङ्ग साथी हो । स्कुलदेखि कलेजसम्म हामीले सँगै पढ्यौँ । जागिरका लागि पनि सल्लाह गरेर सँगसँगै फर्म भ¥यौँ । हाम्रो जागिर एउटै अफिसमा भए पनि हाम्रा विभागहरु फरकफरक थिए ।
उसको र मेरो अफिस एउटै कम्पाउन्ड भित्र भए पनि भवनहरु अलगअलग थिए । दैनिक भेट भएन भने पनि टेलिफोन मार्पmत हामी कुराकानी गथ्यौँ ।
“अहिले त त्यसले मेरो मुखतिर पनि फर्केर हेर्दैन । हिजो अस्ति उसको साहित्यसँग म आतङ्कित थिएँ, आजभोलि हाम्रो ट्रिकसँग ऊ आतङ्कित छ ।” कुबेर फेरि चश्मा खोलेर हाँस्यो ।
“त्यो ट्रिक मलाई पनि बता न यार ! मेरो त यहाँ बिजोगै भइसक्यो ।” मलाई पनि त्यो गुरुमन्त्र जान्ने कौतुहलता जाग्यो ।
“पख् ! तँलाई भोलि म यो खाडलबाट मुक्त गराउँला ।” कुबेर मेरो ढाड थप्थपाउँदै हाँस्यो ।
काठमाडौँमा जाडो धेरै बढेको थियो । गएको पच्चीस वर्षसम्म यो वर्षको जस्तो जाडो कहिल्यै पनि नभएको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुले प्रसारण गरिरहेका थिए । यी समाचारहरुका कारणले पनि मानिसहरुले झन् बढी जाडो महसुस गरिरहेका थिए । मधुरो घाममा जाडोको चर्चा भइरहेको थियो ।
अन्य दिन पनि हाजिर गरेपछि कर्मचारीहरु यसैगरी बाहिर निस्कन्थे । अन्य दिन भन्दा आज कार्यालयको प्राङ्गणमा बढि नै कर्मचारीहरु भेला भएका देखिन्थे । मेरो पुरै शरीरलाई नियालेर हाकिम आप्mनो कार्यकक्षतिर हान्निएर गयो । म यसरी घाममा बसेको कुरा उसलाई मन परिरहेको थिएन भन्ने कुरा उसको हेराईले प्रष्ट बुझिन्थ्यो । अफिस भित्रको कामले अजिङ्गरले भैmँ मुख बायर बसेको छ । अफिसको काम भन्नु मात्रै हो, सबै त्यसका व्यक्तिगत कामहरुको चाङ छ ।
“अब म जान्छु ।” मैले कुबेरसँग बिदा हुन खोजेको थिएँ ।
“तँ गधाको काम बितिसक्यो होला ।” मेरो कुरालाई उसले फेरि हावामा उडाइदियो ।
“अफिसमा तँलाई के कामले पर्खिएर बसेको छ ।” उसले मलाई सबै साथीहरुका अघिल्तिर मजाकमा उडाउन खोज्यो ।
भीड बिस्तारै बिस्तारै पातलिँदै गयो । मैदानको एक छेउमा उभिएर हामी त्यहाँका दृश्यहरु हेर्दै कुराकानी गरिरहेका थियौँ । अगाडिपट्टि बङ्गलाजस्ता सानासाना घरहरु थिए । त्यसका अघिल्तिर युनियनका बोर्डहरु झुण्डिएका थिए । बङ्गलाहरुभित्र विभिन्न खालका चहलपहलहरु बढिरहेको देखिन्थ्यो ।
“तँलाई हाकिमले लगाएका व्यक्तिगत कामहरुबाट मुक्त हुने विचार छ होइन ?” कुबेरले अनुहारमा अलिकति मुस्कान छर्दै भन्यो ।
“कार्यालयको काम गर्न पाए पो हुन्थ्यो । उसको व्यक्तिगत काम गर्न जागिर खाए जस्तो । मलाई त कार्यालय भित्र पस्नै मन लाग्दैन । आज यी यतिबेलासम्म नगएको पूmलेर बसेको होला । अघि नै घुरेर हेर्दै थियो । जहाँजहाँ शेयरका लागि आवेदन माग हुन्छ, उसका सबै सन्तानको नागरिकता बोकेर लाइनमा लाग्नुपर्छ ।” मैले पनि उसका अगाडि एउटा तिक्तलाई उकेलेँ ।
“ ल ! बाहिर हिँड् म तँलाई उपयुक्त उपाय सिकाउँछु ।” कुबेरले मेरो हात समातेर तान्दै लग्यो र एउटा चश्मा पसलमा पु¥यायो । पसलेसँग एउटा कालो चश्मा माग्यो । म छक्क परिरहेको थिएँ । पसलेले एउटा चश्मा निकाल्यो तर कुबेर त्यो भन्दा निक्खर कालो चश्मा खोज्यो । केही दिनदेखि कुबेरले पनि त्यस्तै चश्मा लगाइहेको थियो । मलाई अचम्म लागिरहेको थियो र मैले कुबेरलाई हेरें । ऊ मुसुक्क हाँस्दै मलाई त्यो चश्मा लगाउन दियो । त्यसपछि उसले मलाई एउटा युनियनको अफिसमा लिएर गयो । उसले त्यहाँ मलाई युनियनको सदस्य बन्नका लागि रसिद काट्न लगायो । कुबेरले मसँग सदस्यता बापत भनेर एकसय रुपैयाँ माग्यो । मैले पनि खुरुक्क दिएँ । सबैतिर हेरेँ । सबै कालो चश्मामा सजिएका थिए र मतिर हेरेर अलिअलि मुस्कुराइरहेका थिए । त्यसपछि उसले मलाई युनियनको बाहिर लिएर आयो । युनियनको बाहिर गेट अगाडि एउटा बेञ्च राखिएको थियो । उसले मलाई केही समय त्यहीँ बसिरहन भन्यो । म पनि थचक्क त्यहीँ बसेँ । मलाई त्यहीँ छाडेर ऊ अर्केतिर गयो ।
कुबेरले सिकाएभैmँ म पनि त्यही बेञ्चमा बसिरहेको थिएँ । केही समयपछि मेरो हाकिम त्यही बाटो हँुदै कतै जाँदै थियो । ऊ म नजिकै आइपुगेपछि मैले उसलाई उठेर नमस्कार गरेँ । उसले छक्क परेर मतिर हे¥यो । मलाई देख्ने बित्तिकै उसको अनुहारमा आतङ्कका रेखाहरु सल्बलाइरहेको पाएको थिएँ मैले । ऊ मेरो नजिक आयो र मसँग अँध्यारो मुख लगाउँदै हात मिलाउन खोज्यो । मैले पहिलो पटक ऊसँग हात मिलाएको थिएँ ।
“कल्याणजी तपाई एकछिन पछि अफिसमा आउनुस् है ! ” उसले मसँग यति भन्दै नक्कली हाँसो फाल्यो ।
कुबेर आए पछि मैले उसलाई यी कुराहरु सुनाएँ । ऊ सबैले सुन्नेगरी जोडजोडले हाँस्यो ।
“बुझिस ! अब औषधि ठीक ठाउँमा लाग्यो । अब तैँले यो अफिसमा हाजिर मात्र गरे पुग्छ ।” कुबेर फेरि जोडले चिच्याउँदै हाँस्यो ।
“यो काम पनि तेरो र मेरो आदर्श अनुकूल छैन नि ! तेरो र मेरो सिद्धान्तले यस्तो कार्य गर्न दिन्छ र ! फेरि युनियन जस्तो श्रमजीवि वर्गको हितका लागि चल्नुपर्ने संस्थालाई यसरी उपयोग गर्नु राम्रो होइन । यो तर्पm तैँले सोचेको छैनस् कि के हो ?” म भित्र उठिरहेको प्रश्न उसका अघिल्तिर राखेँ ।
“राम्रो बनाउन अर्कै तरिकाले लाग्नु पर्छ ।” ऊ कुनै काममा हतारिए जस्तै गर्न थाल्यो । म पनि ऊबाट बिदा हुन खोजेँ ।
“यो सबै कालो चश्माको कमाल हो बुझिस् ! अब जता जानु पर्छ जा ” कुबेर यस्तो भन्दै आप्mनो बाटो लाग्यो ।
कालो चश्मा लगाउनुको अप्mटयारो महसुस गर्दै म आप्mनो कार्यकक्षतिर आएँ । हाकिम म बस्ने कोठा मै बसेर मेरो प्रतिक्षा गरिरहेको रहेछ ।
“कल्याणजी !आइ एम भेरी सरी मलाई ति नागरिकताका प्रमाणपत्रहरु दिनु होला । मेरो टेलिफोन खानेपानीका कार्डहरु पनि तपाईसँगै छन् । तिनीहरु पनि मलाई फिर्ता दिनुस् ।” हाकिम मेरो अनुहारतिर नहेरिकनै भट्भटाइरहेको थियो ।
मैले हतारहतार गर्दै उसका भएका सामानहरु फिर्ता दिएँ । उसले आप्mना सामानहरु खामभित्र हाल्यो । मसँग धेरै कुरा गर्ने उसको रुची नभएको कुरा मैले राम्ररी बुझिसकेको थिएँ ।
“ल है त ! कल्याणजी ! कहिलेकाहिँ काज, ओ.टी. केही चाहियो भने सम्झनुहोला । म तपाईलाई सहयोग गर्छु ।”
ऊ यसो भन्दै आप्mनो कार्यकक्षतिर लम्कियो ।
भित्र पुगेर हाकिमले तुरुन्त घण्टी बजायो । हरिप्रसाद फेरि दौडिँदै भित्र गयो । अब उसले मलाई बोलाउन घण्टी बजाएको होइन भन्ने कुरामा म द्विविधामुक्त थिएँ ।
“सरलाई कालो चश्माले सुहाउँदो रहेनछ ।” हरिप्रसाद बाहिर निस्कदै मलाई हेरेर हाँस्यो ।
“सुहाउन लगाएको होइन, बाध्यताले लगाएको हुँ ।”
मैले पनि सिधै जवाफ दिएँ ।
“सर ! सबैले लगाको देख्दा मलाई पनि लाउँलाउँ लागेको छ ।” उसले आँखा चिम्म पार्दै भन्यो ।
“मैले कुनै सपना त देखिरहेको छुईन ?” कालो चश्मा फुकालेर आँखा पुछेँ ।
म वास्तवमा विपनामै थिएँ ।
मधुपर्क मासिक, वर्ष ४१ अङ्क ९ पूर्णाङ्क ४७६, २०६५ माघ
आफ्नो भन्नलाई अब यही पार्टी मात्र बाँकी थियो । अरु केही थिएन । आफन्तहरु पनि टाढिएका छन् । उनीहरु टाढिनु पनि अस्वाभाविक थिएन । उनीहरुलाई दिन सक्ने हैसियत पनि मेरो केही थिएन । पहिलेपहिले पार्टीको ठूलो नेता हुन्छ, मन्त्री हुन्छ भन्ने अनुमान गरेर प्रायजसो भेटघाट गरेर जान्थे । तर अहिले उनीहरुको अनुमान ठ्याक्कै असफल भयो । मन्त्री बन्ने लडाइँमा म कहिल्यै पनि सहभागी भइनँ । तापनि पार्टी सरकारमा गएको बेला धेरै नातेदारहरु भेट्न आए । केहीले मात्र सार्वजनिक र विकासका काम लिएर आउँथे । नत्र सबैको उही समस्या हुन्थ्यो । जागिर, सरुवा, बढुवा र यस्तैयस्तै । मैले उनीहरुका व्यक्तिगत समस्यालाई प्राथमिकता दिने र उत्प्रेरित गर्ने कुरै थिएन । विचारका कारण नजिकिनेबाहेक अरु सबै मबाट बिस्तारैबिस्तारै टाढा भए ।
कमरेड आदित्यको व्यक्तिगत जीवन त झनै खण्डहर भयो । उसलाई छाडेर उसकी श्रीमतीले दोस्रो विवाह गरिन् । छोराछोरीहरुको पढ्न त के बाँच्नलाई नै ठूलो सङ्घर्ष गर्नुप¥यो । पार्टी फुटेपछि हामी अलगअलग हुन पुग्यौं । अहिले सुन्दैछु– क्यान्सर रोगले ग्रस्त छ ऊ । चोखो मन बोकेर आन्दोलन, क्रान्ति, परिवर्तन भन्दै कुद्यो । पैत्रिक सम्पत्ति पनि प्रशस्त थियो । पूर्ण इमान्दार भएर सम्पत्ति पार्टीकरण ग¥यो । पार्टी फुट्दै गएपछि सानो समूह मात्र बाँकी रह्यो । तराईतिरका साथीहरुको संरक्षणमा बसेको छ भन्ने सुनेको छु । भेट हुन नपाएको पनि धेरै भइसक्यो । पार्टीमा आएको विखण्डनपछि क. शैलेस र क. विपिन पनि टाढा भए । उनीहरुको व्यक्तिगत जीवन पनि दुःखैदुःख र कष्टैकष्टका बीचबाट गुज्रियो ।
रात यति निरस र कठोर हुँदोरहेछ भन्ने कुरा मलाई आज पहिलोपल्ट अनुभव भयो । ओछ्यानमा पल्टिएर ननिदाइकनै रात छर्लङ्ग कटाएको यो मेरो पहिलो अनुभव हो । पार्टीको सम्मेलन, भेला, बैठकहरुमा नसुतीकन रात बिताएका मसँग प्रशस्त अनुभवहरु छन् । तर ती अनिँदा रातहरु कतै पनि पीडादायक बन्दैनथे । बरु एउटा काम सकिएर नयाँ काममा प्रवेश गरेपछि एकप्रकारले आनन्दको महसुस हुन्थ्यो मलाई ।
कमरेड रमणको हिजोको कुराले म साँच्चै अनकण्टार छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ । पार्टी र साथीहरुको सोच्ने स्तर यतिसम्म तल झरिसकेको कुरा मैले पहिलोपल्ट अनुभव गरें । लामो समय भएकाले म मजदुर सङ्गठनको अध्यक्षबाट बिदा लिन चाहन्थें । मभन्दा पछाडि पनि प्रशस्तै साथीहरु थिए, जसले त्याग र बलिदानका धेरै गल्छेँडाहरु छिचोलिसकेका थिए ।
अब नयाँ बाटो खोज्नु सिवाय मसँग कुनै विकल्प थिएन । म हिजोको घटना बिर्सन चाहन्थेँ । टाउको पनि फुट्लाजस्तो गरेर दुखिरहेको थियो । टाउको दुख्नुको कारण पनि हिजोकै घटनाबाट सिर्जित मानसिक तनाव नै थियो । केही साथीहरु सम्झन्छु– कमरेड रघु, कमरेड विपिन, कमरेड शैलेस, कमरेड आदित्य आदि आदि । हिजोदेखि ती साथीहरु मेरो मानसपटलमा बारम्बार आइरहेका छन् । क्रान्तिका लागि व्यक्तिगत जीवनको कुनै पर्वाह गरेनन् तिनीहरुले ।
पार्टीले संसदीय राजनीतिलाई उपयोग गर्न थालेपछि उनीहरुको व्यक्तिगत जीवन झनै खण्डहर भयो । पार्टीभित्र हुर्कन थालेको सामूहिक जीवनपद्धति भताभुङ्ग भयो । अत्यन्त कष्टका साथ उनीहरुले काम गरिरहेका छन् । निजी सम्पत्ति भएकाहरु व्यवस्थित भए । इमान्दार भएर क्रान्तिमा लाग्ने कमरेडका परिवारका सदस्यहरु कोही मलेसिया, कोही कता, कोही दुबइमा पुगेर कामको खोजीमा भौँतारिइरहेका छन् । सक्नेले छोराछोरीहरुलाई सरकारी विद्यालयमा पढाए । कतिले त त्यति गर्न पनि सकेनन् । पार्टी सरकारमा भएको बेलामा पनि हामीमध्ये धेरै साथीहरु व्यक्तिगत काम बोकेर मन्त्रालय धाएनौं । सहिद परिवारको समस्या, अन्य सामुहिक समस्याहरु नै हाम्रा प्राथमिकतामा परे ।
हुन त हाम्रो पार्टी एकैपटक यो ठाउँमा आइपुगेको होइन । वैकल्पिक शक्ति बन्ने हैसियत राखेपछि हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरुको सङ्ख्या एक्कासी बढ्यो । तिनीहरुले नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँसम्म पहुँच पु¥याए । सरकारमा जाने, पद र सुविधाहरु प्राप्त गर्ने कुरामा पार्टीले मरिमेट्न थाल्यो । त्यसपछि हाम्रो पार्टीले आदर्श र सिद्धान्तहरु छाड्दै गयो । सांसद, मन्त्री, जिएमजस्ता पदहरुका लागि तँछाडमछाड चल्न थाल्यो । क्रान्ति, परिवर्तन, मुक्तिजस्ता उद्देश्यहरु अब बिस्तारै गफ गर्ने विषयहरु मात्रै बन्न थाले ।
अधिकांश साथीहरु मेरो निर्णयबाट वास्तवमै आश्चर्यचकित भएका थिए । परिवार र केही आफन्तहरु वास्तवमै चिन्तित भए । व्यक्तिगत सम्पत्ति पार्टीकरण गर्ने कार्यक्रम मजस्ता क्षेत्रीय तहका कार्यकर्ताका लागि बाध्यकारी थिएन । पार्टीको माथिल्लो नेतृत्व तहमा बस्नेहरुका लागि त्यो बाध्यकारी बनाइएको थियो । पार्टीको यो निर्णय आउनुभन्दा अघि नै मलगायत कमरेड रघु, कमरेड विपिन, कमरेड शैलेस र कमरेड आदित्य निजी सम्पत्ति राखेर क्रान्ति अघि बढाउन सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थियौं । पार्टीको त्यो निर्णयले हाम्रा लागि झनै उत्साह थपिदियो ।
पार्टीले नेतृत्वको सम्पत्ति पार्टीकरण गर्ने निर्णय समाचार बनेर बाहिर आएपछि धेरैतिरबाट प्रतिक्रियाको बाढी आयो । निजी जीवनलाई आर्थिक रुपले सम्पन्न बनाउँदै कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहिरहेका आवसरवादीहरुले कथित सिद्धान्त निर्माण गरेर विरोधका स्वरहरु उचाले । तर अन्य कम्युनिस्ट पार्टीमा रहेका बौद्धिकहरुको एउटा तप्काले खुलेरै समर्थन ग¥यो । मजदुर सङ्गठन झनै उत्साहित भयो ।
पार्टीको निर्णय आउनेवित्तिकै मैले आफ्नो अंशभागको सम्पत्ति बेचविखन गरें । सम्पत्ति बेचेर पार्टीलाई बुझाएको दिन साथीभाइ र आफन्तहरुको एउटा हिस्साले हाम्रो तारिफ ग¥यो । त्यस दिन घरभित्र केहीको अनुहारमा एउटा कालो छायाँ दोप¥यो । मेरो बुबा सबैभन्दा बढी दुःखी देखिनुभएको थियो । श्रीमती उषाको हाँसो धेरै दिनसम्म हरायो ।
“दुईवटी छोरीहरु भर्खर स्कुल जान थालेका छन् । उनीहरुको भविष्य कस्तो हुने हो ?”, उषाले यति मात्र भनिन् ।
“गरिब नेपालीहरुको जीवनभन्दा हामीले माथि सोच्नु हुँदैन । त्यसमाथि हाम्रो पार्टी त छँदै छ नि !” मेरो कुरो सुने पनि उनले कुनै प्रतिक्रिया जनाइनन् ।
“सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाएपछि केही नेताहरुले पश्ताचाप गरेका घटनाहरु पनि मैले सुनेको छु ।” मैले आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गरेपछि बुबा बारम्बार यस्तै तर्कहरु गरिरहन्थे ।
बुबा कम्युनिस्ट आन्दोलनका पुराना कार्यकर्ता थिए । उनी आन्दोलनमा लामै समय हिँडे । पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनेर पनि हिँडे । मान्छे रोगी थिए । सोचेजति हिँड्न सकेनन् । बाबुबाजेले जोडिदिएको जग्गाजमिन पुग्दो थियो । सम्पत्ति छेलोखेला पनि थिएन, के लाऊँ के खाऊँ भन्ने पनि थिएन । घरको एक्लो छोरो थिए, त्यसैले पनि आर्थिक रुपले उनले कुनै कष्ट उठाउनु परेन । मैले सबभन्दा पहिले आफ्नो निर्णय उनलाई सुनाएको थिएँ ।
“पार्टीलाई सर्वश्व ठान्दै सम्पूर्ण त्याग गरेर हिँड्ने कमरेडहरुको जीवनको अन्त्य धेरै दुःखदायी भएको देखेको छु ।” बुबाले मलिन अनुहार लगाएर मतिर हेरेर भनेका थिए ।
“मेरो अन्त्य दुःखदायी हुनसक्छ, त्यो अर्कै कुरा हो । तर व्यक्तिगत सम्पत्ति राखेर सर्वहाराकरणको बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने शिक्षा प्रचार गर्न मलाई एकदमै अप्ठ्यारो लाग्यो ।” उनलाई मैले मेरो मनको कुरो खोलिदिएँ ।
“कम्युनिस्ट पार्टीमा हिँडेका तेत्तिका पढेका मान्छेहरुले पनि त्यसरी सोचेका छैनन् । तैंले नै किन त्यसरी सोच्नुपर्छ ?” मेरो निर्णय फिर्ता गराउन उनले निकै कोसिस गरिरहेका थिए ।
“अरुले के गरे भन्दा पनि मैले कसरी राम्रो गर्ने हो भन्ने पो मूल कुरा हो त !” मेरो योजनाबाट पछि फर्काउन चाहने बुबाका तर्कहरुलाई म यहीँ अन्त्य गराउन चाहन्थें ।
“तैंले यसरी सोच्नुहुन्न बुझिस् !” तर्क गर्न नसकेपछि अन्तिममा यसो भनेर बिट मार्ने बानी थियो उनको ।
भाइ कैलाश गाउँकै एउटा विद्यालयमा शिक्षक थियो । बुबा उसैसँग बस्थे । जागिर पनि भएको कारण उसको आर्थिक अवस्था राम्रै थियो । तर मेरो आर्थिक अवस्था झन्झन् कमजोर बन्दै गएकोमा बाबु बढी नै चिन्तित हुँदै गएको म राम्ररी बुझ्दथें ।
मलाई यो विषयमा धेरै हल्ला हुनु ठीक लागिरहेको थिएन । साथीहरुसँग नियमित छलफल हुनु स्वाभाविक थियो । अहिलेको जीवनशैलीले सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्न सकिँदैन भन्ने लागिरहेको थियो । हामी साथीहरुको एउटा समूह यसैगरी सोच्ने गथ्र्यौैं, छलफल गथ्र्यौं ।
पार्टीको मूल नेतृत्वले सम्पत्ति पार्टीकरण गर्नुभन्दा अघि नै हामीले आ–आफ्नो सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाइसकेका थियौं । हाम्रो छिटोपनले गर्दा नेतृत्व तहका कयौं कमरेडहरु हामीसँग भित्रभित्रै मुर्मुरिरहेका थिए । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुले सम्पत्ति लुकाउन थालेका समाचारहरु अखबारका पानाहरुमा आइरहेका थिए । अखबारहरुले हाम्रो निर्णयलाई हौस्याउँदै पार्टी नेतृत्वलाई व्यङ्ग्य गरिरहेका थिए । हामीलाई त्यसले झनै उत्साहित बनाइरहेको थियो ।
कमरेड दीक्षान्तले सम्पत्ति लुकाएको समाचारलाई पत्रपत्रिकाले महत्वका साथ प्रचार गरिरहेका थिए ।
“कमरेड दीक्षान्तले सम्पत्ति लुकाए ।” मालपोत कार्यालयमा गरिएको राजीनामाको कपिसमेत छापेर चर्चित राष्ट्रिय दैनिक ‘कन्चनजङ्घा’ले आफ्नो मुखपृष्ठमा समाचार प्रकाशित ग¥यो ।
केही चलाख र धुर्त नेताहरुले आफ्नो अचल सम्पत्ति देखाएर ‘पार्टीले आवश्यकताअनुसार चलन गर्नू’ भनेर पन्छिए ।
पत्रपत्रिकाहरुमा मात्र होइन, सभा, सम्मेलन, गोष्ठीहरुमा समेत यी विषयहरु त्यसबेला चर्चाको शिखरमा थिए ।
“तपाईंसँग सानो कुरा गर्नुछ, साँझतिर भेट्नुपर्ला हैं !” रत्नपार्क शान्तिबाटिकाको विरोध लुजुसलाई समापन गर्नेवित्तिकै मजदुर सङ्गठनका फ््रयाक्सन इन्चार्ज कमरेड रमणले मेरोनजिकै आएर खुसुक्क भने ।
“साँझमा भन्दा अहिले नै भेट्न मलाई सजिलो हुन्थ्यो ।” साँझमा भिमढुङ्गाको एउटा बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले मैले उनलाई अहिले नै छलफल गर्न अनुरोध गरें ।
मजदुर सङ्गठनको राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि तयारी अन्तिम अन्तिम चरणमा पुगिरहेको थियो । कमरेड रमणले त्यही बारेमा छलफल गर्न खोजेका होलान् भन्ने लख काटेँ । मैले मजदुर सङ्गठनको अध्यक्ष भएर काम गरेको पनि धेरै लामो समय भइसकेको थियो । म आफैंले पनि सक्षम साथीको खोजी गरिरहेको थिएँ । मजदुरआन्दोलनभित्र प्रतिबद्ध र इमान्दार कार्यकर्ताको ठाउँमा व्यक्तिगत स्वार्थले चुर्लुम्म डुबेका कार्यकर्ताको बोलवाला चल्न थालेको थियो । मजदुर सङ्गठनभित्रका कार्यकर्ताहरु नवधनाढ्य बनिरहेका थिए । सम्पत्तिको स्रोत पारदर्शी छँदै थिएन । पैसा, तिकडम र जालझेल मौलाउँदै थियो । धेरैतिरबाट प्रश्न उठेपछि ससुरालीबाट प्राप्त भएको भन्ने सजिलो उत्तर तयार हुन्थ्यो । ठगहरुलाई ससुरालीको आर्थिक जीवन अत्यन्तै कमजोर भएको हेक्कै हुँदैनथ्यो । यो प्रवृत्तिका विरुद्ध पनि सङ्घर्षको झन्डा उठाउने नयाँनयाँ साथीहरु आन्दोलनभित्र आइरहेका थिए । तर पनि सङ्गठनभित्र नेता एवं कार्यकर्तामा सांस्कृतिक मूल्यको ह्रास भइरहेको थियो ।
“त्यही रेस्टुरेन्टभित्र गएर छलफल गरौं ।” कमरेड रमणले नजिकैको एउटा रेस्टुरेन्टतिर औँला देखाए ।
हामी रेस्टुरेन्टको एउटा कुनामा गएर बस्यौं । उनले दुई प्लेट मःमः र दुई कप चिया अर्डर गरे ।
मजदुर सङ्गठनको नेतृत्वका बारेमा पार्टीले गरेका निर्णयहरु सुन्न म उत्सुक भइरहेको थिएँ ।
“कमरेड नवीन !” उनले मतिर हेरे । केही बोल्न खोजे । फेरि हच्किए ।
“कमरेड पार्टीले आज मात्रै एउटा निर्णय लियो । त्यसमा मेरो भूमिका छ भन्ने ठान्नु होला । तर मेरो भूमिका केही पनि छैन ।” आफ्नो मुखाकृतिलाई अलिअलि बिगार्दै भने उनले ।
“के निर्णय ग¥यो ? जे ग¥यो ठीकै त ग¥यो होला नि !” मैले उनलाई हाँसेर जवाफ दिएँ ।
मैले अध्यक्ष पदका लागि पार्टीले अर्को मान्छे तयार गरेछ भन्ने बुझिसकेको थिएँ । उपयुक्त व्यक्तिलाई नेतृत्वमा लानुपर्छ भन्ने मेरो पनि सोच थियो । तर त्यसका लागि केही समस्या पैदा भइरहेको थियो । कमरेड दिनेश, कमरेड हिमाल, क. जितमानजस्ता साथीहरु थिए । त्याग, बलिदान, इमान्दारिता, प्रतिबद्धता र क्षमतासमेत भएका एकएक साथीहरु थिए । यिनीहरुमध्ये छान्नुपर्ने थियो । यी सबै समानजस्ता लाग्दथे । यीमध्ये कसलाई चाहिँ छान्यो होला भन्ने मभित्र कौतुहल भइरहेको थियो ।
“कमरेड शक्तिलाई पार्टीले अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको छ ।” त्रास मिश्रित स्वरमा बोले उनी ।
“उनलाई कसरी ?” म अचम्मित भएँ । “धेरै छलफल गरेर पार्टीले यो निर्णय लिन पुग्यो । तर मेरो कुनै भूमिका छैन है कमरेड ।” उनको स्वर कतैकतै थर्थराइरहेको जस्तो लाग्थ्यो ।
“दोहोरो भूमिका खेल्ने यो झन् अवसरवादी छ । कमरेड शक्तिलाई लिएर काठमाडौंका रेस्टुरेन्ट चहार्दै यसलाई फुर्सद छैन । इन्चार्ज यही हो । आफ्नो भूमिका छैन भनेर पन्छिन खोज्छ ।” म मनमनै कमरेड रमणको मूल्याङ्कन गरिरहेको थिएँ ।
“काम गरिरहेका साथीहरुको तुलनामा पछिल्लो पुस्ताको मान्छे र सांस्कृतिक दृष्टिबाट अन्यन्त कमजोर मान्छेबाट कसरी नेतृत्व हुन सक्छ ?” मैले उनीसँग यो निर्णयको थप पृष्ठभूमि खोजिरहेको थिएँ ।
“पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नबाहेक हामी के गर्न सक्छौं र ?” उनी बारम्बार यस्तै लाचारी प्रकट गरिरहेका थिए ।
“कसरी भयो यस्तो निर्णय ?” म उनीबाट केही कुरा सुन्न जिज्ञासु थिएँ ।
“आर्थिक रुपमा सवल मान्छेलाई नेतृत्वमा लैजानुपर्छ भन्ने धेरै कमरेडहरुको धारणा रह्यो ।” यति भनेर उनले फेरि मेरो अनुहारतिर हेरे ।
“यो त झनै खतरनाक कुरा हो । सम्पत्ति पार्टीकरण गर्नुपर्छ भनेर घोषणा गर्ने पार्र्टीले आर्थिक रुपमा सवल मान्छे नेतृत्वका लागि भनेर कसरी खोज्न मिल्छ ?” मेरो कुराले उनी लकपकाए ।
“अब निर्णय स्विकार्नु सिवाय हामीसँग कुनै उपाय पनि छैन ।” उनले फेरि उही कुरा दोहो¥याए ।
“आर्थिक रुपमा उनी झनै विवादास्पद छन् । उनी बसेको घरबाहेक लाजिम्पाटमा अर्को ठूलो भव्य महल भएको जानकारी आएको छ । काठमान्डुमा प्रशस्त जग्गाजमिनहरु उनले जोडेको चर्चा सङ्गठनभित्र व्याप्त छ । पैत्रिक सम्पत्तिको दृष्टिले उनी कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मानिस हुन् । त्यसो भए नेतृत्वमा पुग्ने महत्वपूर्ण कडी यही भयो होइन त ?” कमरेड रमण यो तथ्यसँग जानकार भए पनि मैले फेरि दोहो¥याएँ । कमरेड रमणले मेरो कुरा सुनिरहे ।
“अब हाम्रो पार्टीमा नेतृत्वको मापन पैसा हुने भयो होइन त !” म उनीबाट अरु छलफल गर्न चाहन्थें । मलाई जीवनमै नउठेको आक्रोश पैदा भइरहेको थियो ।
“पार्टीको यो निर्णय राम्रो त होइन, तर …” कमरेड रमण बोल्न खोज्दै थिए ।
“त्याग र बलिदान गरेका त्यतिका साथीहरुले यो सङ्गठनको झन्डा उठाइरहेका छन् । त्यस्ता भ्रष्टको नेतृत्वमा अब तिनीहरुले कसरी काम गर्छन् !” मेरो रिसले टाउको दुख्न थालिरहेको थियो ।
“अब पार्टीको निर्णय स्विकार्नु सिवाय हामीसँग कुनै उपाय पनि त छैन ।” सुकेका ओँठहरु फर्फराउँदै उनी लाचारी प्रकट गरिरहेका थिए ।
“किन छैन ?” म कड्किएँ ।
“के छ ?” उनी उत्सुक भए ।
“विद्रोह !” म रेस्टुरेन्टको कोठै थर्किने गरी कराएँ । उनी चुप लागे ।
“यो निर्णयले अनैतिक र भ्रष्ट पार्टीको रुपमा गुणात्मक फड्को मा¥यो ।” मैले पनि उनीसँग यसरी कुरो टुङ्ग्याउन खोजें ।
कमरेड रमणको टेबुलमा मःमःको प्लेट रित्तिसकेको थियो । उनी हडबडाउँदै चिया पिएर अर्को मिटिङमा जानु छ भनेर हिँडे । म पनि एकदुई पिस मःमः र अलिकति चिया पिएर निस्किएँ ।
“पार्टीलाई बिगार्न सफल हुनुभयो ।” उठ्दाउठ्दै उनीप्रति व्यङ्ग्य गरें मैले ।
मेरो कुरा नसुनेजस्तो गरे उनले । दोहोरो कुरा गर्ने चरित्र थियो उनको । त्यही सिप र कलाको प्रयोग गरेर उनी पार्टीको नेतृत्वमा पुगे ।
बाहिर निस्केर हेरें, आकाश कालो बादलले ढाकिसकेको थियो । कमरेड रमण मलाई छाडेर परै पुगिसकेका थिए ।
एकपटक आफ्नो अतीततिर फर्किएर सोचें !
आफूले जीवनमा गरेका निर्णयहरु सबै सही थिए । ठगहरु सर्वहारा वर्गको झनडा बोकेर व्यापार गर्न आएका थिए । उनीहरु सफल भए ।
आफैंलाई फर्किएर सोच्दासोच्दै म बागबजारनेरको मोडमा पुगिसकेको थिएँ । बाटोको छेउमै मानिसहरुले एउटा घर भत्काइरहेका थिए ।
मूल्याङ्कन मासिक, वर्ष–२७, पूर्णाङ्क–१७५, २०६६ असोज
‘परिचित अभिनय’ कथा लेखेको एक दशकपछि मेरा उही पात्रहरु रामप्रसाद आचार्य र शान्तासँग फेरि पनि भेट भयो । हाम्रा गाउँहरुबाट काठमाडौं सहरतिर पसेर जागिर खाएका साथीहरुमध्ये केही साथीहरुले रामप्रसाद आचार्यको बाटो पछ््याए । अर्थात् उनीहरु पनि रामप्रसाद आचार्य नै भए । त्यो कथा प्रकाशित भएपछि रामप्रसाद आचार्य र शान्ता बनेका मेरा आफन्तहरु अहिलेसम्मै रिसाइरहेका छन् । कतै बाटोमा भेट्दा पनि अझै छलिएर हिंड्छन् ।
हाम्रा गाउँहरुबाट काठमाडौं सहर भित्रिएपछि काठमाडौंमा रामप्रसाद आचार्य र शान्ताहरुले एउटा भिन्न संस्कृति बोकेको समाजको निर्माण गरिसकेका थिए । जुनसुकै तरिकाले सम्पत्ति कमाउनु उनीहरुको एकमात्र उद्देश्य हुन्थ्यो । भन्सार, अन्तःशुल्क, कर र मालपोत जस्ता कार्यालयहरु त्यहाँ चर्चामा आइरहन्थे । त्यस्ता ठाउँहरुमा जागिर खानेहरुको त्यहाँ ठूलो इज्जत हुन्थ्यो । जन्मेको माटो, पहाड, आफ्नो गाउँ, पाखा–पखेरा, गरिब आफन्तहरु खिसीट््युरी गर्ने विषयहरु हुन्थे । त्यो समाजमा भष्टाचार राम्रो मौका र भाग्यका रुपमा स्थापित थियो । इज्जतको मापन गर्ने साधन सम्पत्ति थियो । निष्ठा, विवेक र मानवीय नैतिकता अपमानित थियो । मेरो यसपटक फेरि रामप्रसाद आचार्य र शान्तासँग भेट भयो ।
यसपटकको रामप्रसाद आचार्य र म सहपाठी मात्र थिएनौं, एउटै जङ्गलमा गाईवस्तु चराउँदै हुर्केका दौंतरी पनि थियौं । खोलाको एउटै दहमा पौडी खेलेर हुर्केका साथी–संगाती थियौं । पहिल्यै नै पनि रामप्रसाद मेरो साथी त थियो तर ऊ अरू साथीहरुभन्दा भिन्न थियो । त्यसबेला पनि उसको स्वभाव देखेर हामी सबै साथीहरु उसलाई केही टाढै राख्न चाहन्थ्यौं । ऊ हाम्रा नजिक आइहाल्यो भने हामी अनेक शङ्का उपशङ्काले ग्रस्त हुन्थ्यौं । कुनै फाइदा लिनुप¥यो भने मात्र ऊ हाम्रा अघिल्तिर आउँथ्यो । कहीं अरु साथीहरुसँग झगडा गथ्र्यो र उनीहरुसँग लड्न हामीलाई उपयोग गर्न चाहन्थ्यो । ऊ बाटोमा कसैलाई धम्की दिन्थ्यो र उनीहरुसँग लड्न हाम्रो सहायता खोज्थ्यो । पसलहरुमा खाएको उधारो तिर्दैनथ्यो र पसलेलाई धम्क्याउन हाम्रो सहयोग चाहन्थ्यो । यस्तैयस्तै कामका लागि उसलाई हामी चाहिन्थ्यो । जब हामीबाट यस्ता कामहरुका लागि कुनै सहयोग प्राप्त हुँदैन भन्ने थाहा पाएपछि ऊ अलिक टाढा हुन्थ्यो । होटल, पसलतिर हामीले किनेर खानेबेलामा टुप्लुक्क हाँस्तै पुग्थ्यो । ऊ आफूले किनेर खानुपर्ने बेलामा हामीबाट पूरै भूमिगत हुन्थ्यो । हामी उसको कुरा बुझिहाल्थ्यौं ।
रामप्रसाद हामी सबैभन्दा आर्थिक रुपमा सम्पन्न थियो । ऊ पण्डित भोलाप्रसादको एक्लो छोरो । हामीले गाउँको विद्यालयबाट सँगसँगै एस.एल.सी. पास ग¥यौं । त्यसपछि काठमाडौं गएर पढ्ने हामीसँग कुनै सामथ्र्य थिएन । हामीमध्ये उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि ऊ मात्र काठमाडौं गयो । हामी नसक्नेहरु विभिन्न पेसा व्यवसायतिर अल्झियौं । म नजिकैको एउटा प्राथमिक विद्यालयमा शिक्षक भएँ ।
काठमाडौं गएको बेला एकदिन रामप्रसादलाई मैले पुतलीसडकको चोकमा भेटेको थिएँ । मैले त्यसबेला एकछिन कतैतिर बसेर ऊसँग केही कुरा गर्न चाहेको थिएँ । ऊसँग धेरै वर्षपछि भेट भएको थियो । पहिले पहिले दसैंको समय पारेर पहाड जान्थ्यो ऊ । तर धेरै वर्ष भइसकेको थियो ऊ पहाड नगएको । त्यसैले हाम्रो भेटघाट नभएको पनि निकै वर्ष भइसकेको थियो ।
रात्री बसबाट काठमाडौंको नयाँ बसपार्कमा ओर्लेपछि त्यसबेला म सिधै कर्मचारी सञ्चयकोषको कार्यालय ठमेल गएको थिएँ । सञ्चयकोषको काम अरु दुई तीन दिन लाग्ने भएकाले कार्यालयको समय सिद्धिने बित्तिकै मैले बागबजारको एउटा लजमा आश्रय लिएँ । लजको कोठामा झोला राखेर बेलुकापखको काठमाडौं हेर्ने रहरले बाहिर सड्कतिर निस्किएँ । पुतलीसडकको चोकनेर उभिएर टोलाइरहेको मात्र के थिएँ, रामप्रसादलाई मैले टाढैबाट आउँदै गरेको देखें । उसलाई देख्नेबित्तिकै सहरको एकान्तपनबाट मुक्त भएझैं लाग्यो मलाई ।
मलाई देख्नेबित्तिकै ऊ एकाएक अक्मकियो । भरखरै मात्र उसले लोकसेवा आयोगबाट अधिकृत परीक्षा पास गरेको खबर गाउँमा वेगमय गतिका साथ पुगेको थियो । काठमाडौं गएका बेला उसलाई भेट्ने योजना पनि थियो मेरो । भेटेर बधाई दिने सोचाइ थियो । तर ऊ मसँग झस्किएको देखेर त्यसबेला आश्चर्यचकित भएको थिएँ ।
‘अधिकृत पास गरेछौ बधाई छ हैं !’ हात समातेर नजिक तान्दै मैले भनें ।
‘धन्यवाद !’ ऊ फिस्स हाँस्यो ।
‘कहाँ बस्छौ ?’ उसलाई सहज बनाउन खोजें ।
‘बानेश्वरमा !’ ऊ झन् असहज देखियो ।
‘एकछिन कुनै चिया पसलतिर बसौं न ! तिमीलाई भेट्नु पनि थियो मैले ।’ मैले नजिकैको चिया पसलतिर सङ्केत गर्दै भनें ।
‘होइन ! मलाई हतार छ ।’ मेरो हातबाट आफ्नो हात छुटाउँदै भन्यो उसले ।
‘मलाई हतार छ म हिंडे है ल !’ राती असमयमै उठेजस्तो मुख लाउँदै ऊ अझ पर हट्यो ।
‘चियाको पैसा म तिरिहाल्छु नि ।’ पैसा तिर्नुपर्ला भन्ने अप्ठ्यारो मानेजस्तो सोच्दै भनें मैले ।
ऊ निकै पर पुगिसकेको थियो । कुद्दै गएँ र भने, ‘पहाडबाट तिम्रो बुबाले खबर ल्याइदिनु भन्नुभएको छ । केही छ कि !’ सोध्नुपर्ने कुरा हतारिएर सोधें ।
‘ठिकै छ रे भन्देऊ न !’ पर पुगेर टाउको हल्लायो उसले ।
पुतलीसडककको बारमा उभिएर मैले निकैबेरसम्म उसलाई हेरिरहें । बी.ए. पास गरेर अधिकृत भइसक्दा पनि ऊ परिवर्तन भएको रहेनछ । त्यसपछि उसलाई फेरि भेट्ने योजना मैले त्यागिदिएँ ।
रामप्रसादका बारेमा गाउँमा विभिन्न टिप्पणीहरु हुन्थे । कुनै कुनै टिप्पणीहरु रोचक पनि हुन्थे । रामप्रसादको बारेमा गाउँमा एकपटक यस्तो पनि सुनिएको थियो – उसका बाबु छोरो भेट्न काठमाडौं आएछन् र छोरालाई टेलिफोन गरी आफू पशुपतिको धर्मशालामा बसेको जानकारी दिएछन् । सात दिन बस्दा पनि छोरो लिन आएनछ । आठौं दिनमा उनी छोराको अफिस खोज्दै पुगेछन् । विभिन्न बहाना बनाएर रामप्रसादले बूढालाई बसपार्क पु¥याएर त्यहीदिन घर फर्काइदिएछ ।
यो कुरा सुनाएर पण्डित बूढालाई हामी कहिलेकाहीं जिस्क्याउँथ्यौं ।
‘पण्डित बा ! काठमाडौंतिर गएर बस्ने होइन त !’ हामी गफ गरेर समय बिताउनुपर्दा बूढासँग कुरा खोतल्थ्यौं ।
‘मेरा छोरा बुहारी त अर्कै लोकबाट आएका जस्ता छन् ।’ पण्डित बूढा आधा झरिसकेको दाँत देखाउँदै हाँस्थे ।‘हामीलाई गाउँका मान्छे मन पर्दैन ।’ गाउँतिरबाट कोही उनीहरुको घरमा पुगिहाले भने उनीहरु हाक्काहाक्की भन्थे भन्ने हल्लाहरु बेला–बेलामा सुनिरहन्थ्यौं हामीहरु ।
महिना दिन नाघिसक्यो, पण्डित भोलाप्रसादलाई रोगले झनै चाप्दै लग्यो । एक सय दुई डिग्रीबाट ज्वरो तल नझरेको पनि एकहप्तै भइसक्यो ।
‘अब बूढा फर्केलान् जस्तो छैन ।’ उनलाई घरमा भेट्न आउने आफन्तहरु यस्तै टिप्पणी गर्दै बाहिर निस्कन्थे ।
पण्डित भोलाप्रसादलाई गाउँका मान्छेले मात्र नभएर टाढा–टाढाका मान्छेहरुले पनि सम्मानका आँखाले हेर्थे । पण्डित भएर पनि समाजसेवाका सम्पूर्ण क्षेत्रमा उनको सक्रिय उपस्थिति थियो । राणा शासनको उत्तराद्र्धदेखि वर्तमान समयसम्मको जीवित इतिहास थिए उनी ।
दिउँसो घाम तात्तिँदै गएपछि पण्डितको आँगनमा मान्छेहरुको चहलपहल क्रमशः बढ्दै जान्थ्यो । केही दिनदेखि यो क्रम झन्झन् बढिरहेको थियो । घरको दलानमा मुठो पारेर राखिएका एकएक वटा गुन्द्री च्याप्दै मानिसहरु आँगनभरि समूह–समूहमा छरिन्थे । बूढापाकाहरु पुराना–पुराना कुरा झिक्थे भने युवाहरु तासका पत्तीमा भुलिन्थे । पण्डितको बिरामी कम हुने सङ्केत कतै पनि देखिएको थिएन । ब्राम्हणबाहेक अरु जातिले छोएको नखाने पण्डितको लागि पालैपालो गरेर गाउँका मानिसहरु आएर खानेकुराको व्यवस्था गरिदिन्थे । पण्डितले घरको छेवैमा कतै पनि घरबार नभएको एउटा मगर परिवारलाई आश्रय दिएका थिए । भान्साको बाहेक सबै काममा त्यो परिवारको उनलाई पूरै भरथेग थियो । बिरामी नहुन्जेल उनी बिहानै नदीमा जान्थे, नुहाउँथे र आएर आफै खाना बनाउँथे । उनी बिरामी भएको केही दिनपछि मधेसतिर घर भएका दुई वटी छोरीहरु आएपछि पण्डितको राम्रो हेरचाह भएको थियो ।
पहिलेदेखि नै पण्डित अस्पतालको कुरो सुन्नै मान्दैनथे । अझ मधेसतिर बसाइँ जाने कुराको उनी सधैं विरोधी भइरहे ।
‘काठमाण्डुमा गएर बसे हुन्छ नि ! तपाईंको छोरो पनि ठूलै जागिरे छ । ठूलाठूला तीर्थस्थल पनि उतै छन् ।’ हामी बेलाबेलामा बूढालाई जिस्काइरहन्थ्यौं ।
‘आ ! त्यस्ता ठाउँमा बसेर मेरो आयु अरु दस वर्ष घट्छ’ पण्डित यस्तो प्रतिक्रिया दिन्थे ।
‘पण्डितले अब आफू बाँच्ने आश मारिसकेछन् !’ मास्टर्नी भाउजूले पण्डितलाई हेरेर बाहिर आँगनमा आउनेबित्तिकै प्रतिक्रिया दिइन् ।
‘किन र ?’ मैले जिज्ञासा राखें ।
‘पहिले–पहिले छोरोको कुनै खोजी गर्दैनथे, ‘एकपटक अनुहार हेर्न बोलाई दिनू भनेका छन् ।’ उनले पण्डितको अवस्थाको सानो विश्लेषण गरिन् ।
‘पण्डितले भन्नुभन्दा पहिले नै हामीले खबर गरिदिएका छौं नि ! उसले बाबुको अवस्था बुझ्न एकपटक पनि हामीसँग सम्पर्क गरेको छैन’, मैले उनको प्रतिक्रियाको जवाफ दिएँ ।
‘त्यस्तो छोरो जन्मनुभन्दा त कोख बाँझै रहेको राम्रो’, मास्टर्नी भाउजू असन्तुष्टि फलाक्दै हिँडिन् ।
बेलुकाको खाना खान भान्सामा टुवmुक्क मात्र के बसेको थिएँ, मास्टर्नी भाउजू फेरि हस्याङफस्याङ गर्दै आइपुगिन् ।
‘अब बूढाको प्राण सजिलैसँग जाने भो !’ खुसी हुँदै भनिन् उनले ।
‘रामप्रसादले आफ्नी श्रीमती पनि लिएर आएछ’, यसो भनेर मास्टर्नी भाउजू फेरि मख्ख परिन् ।
‘हामीलाई पनि अब धेरै सजिलो भयो’, मैले पनि उनीसँग सन्तुष्टि प्रकट गरें ।
पण्डितको स्वास्थ्य दिनदिनै गम्भीर बन्दै गइरहेको थियो । बूढाको मुखमा अन्न नपरेको निकै दिन भइसकेको थियो । अस्ति एक दिन त उनले एक चम्चा पानी पनि मुखमा हाल्न सकेनन् । हामी सबैले करिब–करिब आश मारिसकेका थियौं । महिना दिनदेखि हामी छिमेकीहरुको धेरै समय उनको घरमै बित्ने गरेको थियो । खासै खेतीको समय पनि सुरु नभएकाले पण्डित बिरामी भएपछि दिनभर उनको आँगनमा सानोतिनो बजार लागेजस्तै हुन्थ्यो ।
उनीहरुको व्यवहार देख्नेबित्तिकै आगन्तुकहरु एकाएक अचम्मित हुन्थे । कोही जिब्रो टोक्दै बाहिर निस्कन्थे ।
‘मान्छे त यसरी पनि फेरिँदो रहेछ’, रामप्रसादको असामाजिक चरित्रकोे विरोध गर्नेहरु पनि आफ्नो धारणा बदल्न बाध्य भइरहेका थिए ।
म पनि बिहानको खाना खाइसकेपछि रामप्रसादलाई भेट्न उसको घर पुगेको थिएँ । बिस्तारै घाम तात्तिँदै गइरहेको थियो । रामप्रसाद काठमाडैंबाट आएर होला, अरु दिनको भन्दा पण्डितको घरमा चहलपहल पनि अलिक बढी देखिन्थ्यो । घरको दलानमा मुठा पारेर राखिएका गुन्द्री च्याप्दै मानिसहरु घाम लागेका ठाउँमा ओछ््याउँथे र छलफलमा व्यस्त हुन्थे । काठमाडौंबाट बुहारी आएकैले रामप्रसादका दिदीहरु पनि हिजो अस्तिभन्दा प्रफुल्ल थिए ।
‘सन्चै छौ ?’ पुग्नेबित्तिकै मैले रामप्रसादसँग हात मिलाएँ ।
‘ओ हो माधव ! तिमीले मेरो बुबाका लागि ठूलो सहयोग ग¥यौं, त्यसका लागि धन्यवाद छ है !’ ऊ मतिर हेरेर फिस्स हाँस्यो ।
‘यो त हाम्रो कर्तव्य हो नि’, मैले पनि औपचारिकता निभाएँ ।
मसँगको कुरा सक्दा नसक्दै ऊ औषधीका केही पोका बोकेर पण्डितको कोठातिर पस्यो । उसको व्यवहारले मैले उसलाई निकै फरक पाइरहेको थिएँ । अत्यन्त सरल र शिष्ट देखिन्थ्यो ऊ ।
‘अलिकति खाइस्योस् न बाबा, खाइस्योस्’, रामप्रसादकी श्रीमती शान्ताको आवाज भित्र कोठाबाट बाहिरैसम्म आइरहेको थियो ।
‘अब बूढाको सास पनि सन्तोषले जाने भो’, भेट्न आएका मानिसहरुबाट यस्तै कुरा निस्किरहेका थिए ।
केही दिनपछि पनि त्यसैगरी म पण्डितको घरमा पुगेको थिएँ । रामप्रसाद थकित अनुहार लिएर आँगनको डिलमा बसिरहेको थियो । उसकी पत्नी शान्ता भित्र कचौरामा दूध लिएर चम्चाले ससुरालाई ख्वाइरहेकी थिइन् ।
‘के तिमी बिरामी भयौ कि के हो ?’ रामप्रसादको थकित चेहरा देखेपछि मैले उसलाई सोधेको थिएँ ।
‘होइन !’ उसले आफ्नो स्वभावअनुसार छोटो उत्तर दियो ।
मानिसहरु घरको पछाडिपट्टि उभिएर केही छलफल गरिरहेका थिए । कोही–कोही छलफलमा निकै गम्भीर पनि बनिरहेका देखिन्थे । पण्डितलाई रोगले बढी च्यापेको अनुमान गरें मैले । रामप्रसादको अनुहारमा देखिएको निराशाले त्यो अनुमान गर्न मलाई कुनै कठिन भएन ।
‘बुबाको बिरामी बढ्यो कि के हो ?’ मैले उसलाई सोधिहाल्न उपयुक्त ठानें ।
‘होइन, हिजोअस्तिको भन्दा राम्रो छ ।’ यसो भनिरहँदा पनि उसको अनुहारमा खुसीको कुनै छाया थिएन ।
‘नरोत्तम काकाहरु घरपछाडि के छलफल गरिरहनुभएको छ ?’ म थप कुरा बुझ्न हतारिएको थिएँ ।
‘हेर न, राती कसले हो, तुलसीको मोठ र घरको आँगनभरि खनेर यस्तो बनाइदिएछ ।’ रामप्रसादले आँगनतिर औंलाले देखायो ।
घर बनाउन खनिएका जगका खाल्डोहरु जस्तै आँगनदेखि तुलसीका मोठहरुसम्मै खनिएको थियो । तुलसीको मोठ पूरै भत्किएको थियो ।
‘राती चोर आएर खनेछ ।’ उसले स्पष्टीकरण दियो ।
‘तपाईंहरुले थाहा पाउनु भएन’, मैले रामप्रसादकी दिदी सरितालाई सोधें ।
‘किन थाहा नहुनु, थाहा भएर पनि के गर्नु !’ सरिताले आँखाबाट आँसु बगाइन् ।
‘कसले ग¥यो त यस्तो ?’ म जिज्ञासु भएँ ।
‘जसले गरे पनि अब छाडिदिऊँ । अरुभन्दा पनि तुलसीको मठ भत्किएको सुनेपछि बुबा झनै दुखित हुनुभएको छ ।’ उनले कण्ठ अबरुद्ध पारिन् ।
‘त्यस्तो गर्नेलाई त छाड्नु भएन नि ! हामी समाजमा यतिका आफन्तहरु छौं ।’ मैले ढाड्स दिन खोजें ।
उसको अघिल्तिर शान्ता उभिइरहेकी थिइन् । र उनी पनि केही निरास जस्तै देखिन्थिन् । सरिताको कुराले मभित्रको जिज्ञासा झनै बढेर गयो । मेरो जिज्ञासाको कुनै उत्तर नदिइकन उनी घरको कोठातिर पसिन् ।
‘चोरले घरको आँगनै किन खन्यो त ?’ मैले नरोत्तम काकालाई सोधें ।
‘गाडधन भएको शङ्का प¥यो ।’ नरोत्तम काकाले केही नसोची उत्तर दिए ।
‘पण्डितसँग प्रशस्त सुनचाँदी र पुराना रुपैयाँ पैसा छन् भन्ने कुरा रामप्रसाद सँगसँगै मैले पनि सुनेको थिएँ । यो हल्ला हामीले सानैमा सँगसँगै सुनेका थियौं’, म अतीततिर फर्किएँ ।
‘चोर खोज्ने झन्झट नगरे हुन्छ’ रामप्रसादकी अर्की दिदी देविकाले हाम्रा छेउमा आएर बिस्तारै भनिन् । ‘किन र नानी ! नरोत्तम काकाले जिब्रो टोक्दै भने ।
पण्डितको स्वास्थ्यमा सुधार देखिएको थियो । भेट्न आएका मानिसहरूसँग उनी दोहोरो कुरा गर्न पनि थालेका थिए । तर रातिको घटनाले उनी फेरि व्यथित भए । हामी गाउँका सबैजना विभिन्न अनुमान र चिन्ताहरू व्यक्त गर्दै दिनभर पण्डितको घरमै बितायौं ।
झमक्कै साँझ परिसकेको थियो । मास्टर्नी भाउज्यू हस्याङफस्याङ गर्दै आइपुगिन् । उनी यसरी आइपुग्नु कुनै नयाँ सूचना आउनु हो भन्ने हामी सबैले बुझिसक्थ्यौं । नयाँ सूचना प्राप्त भएपछि उनी एकपटक सबै गाउँ घुम्छिन् । अझ विशेष प्रकारका सूचनाहरू लिएर आउँदा उनको हाउभाउ नै बेग्लै हुन्थ्यो । उनले पहिले पहिलेझैं आउनेबित्तिकै उसैगरी नयाँ सूचनाहरू सुनाउन थालिन् ।
‘तिमेरूले थाहा पायौ, गाडधन छ भन्ने शङ्काले पण्डितको छोरो रामेले सबै घर खनेछ नि !’
‘औषधी र दूध ख्वाउने निहुँमा जतिबेलै पनि दुवैजना छोरा र बुहारीले सम्पत्ति कहाँ गाड्नुभएको छ, हामी नै त होऔं नि । छोराबुहारी भन्थे रे !’
‘तिनीहरू त बूढा बिरामी भएर होइन गाडधन छ कि भनेर पो आएका रे !’
‘ती बिचरा दुइटी दिदीहरूले सम्पत्ति हात पार्ने हुन् कि भनेर पो गाउँ आएका रहेछन् ।’
‘काठमाडौं लैजान भनेर घरका भाँडाकुँडा सबै भारी कसेर ठीक्क पारेका छन्, मैले त आफ्नै आँखाले देखेको ।’
मास्टर्नी भाउजूले यी सबै कुराहरु नरोकिइकन सरासरी सुनाइन् र अर्को घरतिर कुदिन् ।
म विरामी पण्डित र उनलाई स्याहार गर्न आएका दुई वटी छोरीहरुलाई परेको मानसिक चोटको अनुमान गर्दै खाना खान भान्सातिर पसें ।
हिजोको घट्नाले र मास्टर्नी भाउजूको कुराले रातभरि निद्रा परेन । रामप्रसाद र मसँगै पढेका सहपाठी । आफैंले पढेर ज्ञान आर्जन गरेको शिक्षासँग आफैलाई अविश्वास लागिरह्यो । यो सम्पत्ति मोहको अमानवीय चिन्तन कतै आफैंभित्र लुकेको त छैन भन्ने डरले आफै आतङ्कित भएँ । म बिहान चिया पिउनेबित्तिकै कुनै थप सम्भावित दुर्घटनाको आँकलन गर्दै पण्डितको घरतिर कुदें ।
भत्किएको आँगनको डिलमा बसेर रामप्रसादका दिदीहरु रोइरहेका थिए ।
‘के भो देविका दिदी !’ म उनीहरुको छेउमा गएँ ।
‘माधव भाइ ! रातभरि भाइ र बुहारीले फेरि अँगेना र चुलोमा सबैतिर ठूलाठूला खाडलहरु खने । बुबाको अवस्था त्यस्तो छ भारी बोक्ने मान्छेहरु खोजेर ल्याएर घरमा भएका राम्रा राम्रा भाँडाकुँडाहरु लिएर गए । त्यो त लगून् उनीहरुकै हो । भाइबुहारी आए भनेर खुसी भएको त बुबालाई समेत यो समाजमा मुखै देखाउन गारो पारेर हिँडे । माधव भाइ, कस्तो शिक्षा पढेको रहेछ मेरो भाइले ?’ रुँदा रुदै बोल्न सकिनन् देविका दिदी ।
पूर्वतिर फर्केर हेरें । महाभारत डाँडाका थुम्काहरुमा घामले आफ्नो अनुहार देखाउन थालेको थियो । रामप्रसाद हिँडेको बाटोतिर नहेरौं भन्दाभन्दै आँखा पुगिहाले । रामप्रसाद र उसकी पत्नी शान्ता केही भरियाहरुलाई अघि लगाएर रिठ्ठेपानीको उकालो काट्नै लागिसकेका थिए । दिदीहरुको रोइरहेको अनुहार हेरें । भित्र खाटमा पण्डित भोलाप्रसादको शुष्क सरीरलाई फेरि हेरें । मेरो आँखा फेरि तिनै खाडलहरुमा पुगे । दिदीहरु पनि त्यही खाडलमा टोलाएर हेरिरहेका थिए ।
‘अब यी सबै खाडलहरु पुरौं । दिउँसो आँगनमा मान्छेहरुलाई बस्ने ठाउँ पनि चाहिन्छ नि !’ मैले एउटा उपाए सुझाएँ ।
‘हो हो छिटो गरौं ।’ दिदीहरु पनि खाडल पुर्न उत्साहित भए ।
शब्दयात्रा त्रैमासिक, वर्ष–१, अङ्क–१, २०६६ फागुन
Posted by मातृका पोखरेल on 2011/07/18 in कथा संग्रहहरु
कथा संग्रहहरु (2)
कविता सङ्ग्रहहरु (3)
ब्यक्तिगत – बिवरण (1)
समीक्षा र समालोचनाहरू (2)